YEYINTNGE(CANADA): Monday, July 20
နအဖ မောင်အေးနှင့် ရုရှားနိုင်ငံ ကြည်းတပ် ဒုဦးစီးချူပ်တို့ ၏ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်း (၂၀၀၈ ခုနှစ်) - လျှို့ ဝှက်
Russia-Burma Military Leaders Meeting (Rangoon) 2008
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/20/20090အကြံပြုခြင်း
နအဖ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဥာဏ်ဝင်းနှင့် အမေရိကန် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံတို့တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးချက် မှတ်တမ်း (၂၀၀၈ ခုနှစ်) - လျှို့ ဝှက်။
Meeting - SPDC 2008 (page 1)
အာဇာနည် ၉ ဦးနှင့် နတ်ဆိုး ၉ ကောင်
အာဇာနည် ၉ ဦးနှင့် နတ်ဆိုး ၉ ကောင် (ဝါ) အာဇာနည်နေ့က ပေးသော သင်္ခန်းစာနှင့် လမ်းညွှန်ချက်
'သူရိယ' သတင်းစာ ပုံနှိပ်တိုက်၏ တယ်လီဖုန်း တလုံးမှနေ "ပစ္စတင်ကွင်းများ ရရှိပြီးပါပြီ …" ဟူသော ပဟေဠိ ဆန်သည့် စကားလုံးများ စတင် ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် "ခြေဆွံ့နေသည့် မကောင်းဆိုးဝါးကြီး" … "ငှက်ပျောသီးစိမ်းဖြင့် ဧည့်ခံ" … "သံပုရာရည်မှာ ဒေးဗစ်၏ အချစ်ဆုံး" … "ရေကန်ထဲမှာ ငါးမရှိ" … "အရပ်မြင့်မြင့် လူကြီး" … "ကျနော်ကတော့ ပန်ချာပီ" စသည့်ဖြင့် ယနေ့တိုင် အတော မသတ်နိုင်အောင် ထွက်ပေါ်လာသော ပဟေဠိများနှင့် အတူ အာဇာနည် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး ၉ ဦး၊ နတ်ဆိုး ၉ ကောင်၊ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ပါသည်ဟု အတိအကျ ထုတ်ဖော် ပြောကြားနိုင်ခြင်း မရှိသည့် လျှိုဝှက် ဆန်းကြယ်သည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များ အပြင်၊ ဝိဝါဒ ကွဲပြားသည့် အမြင် ၃ ရပ်နှင့် လွတ်လပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရော … စသည့် … စသည့် ဂမႝီရမဟုတ်၊ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် ကြေကွဲ တုန်လှုပ်ဖွယ် အဖြစ်ဆိုးကြီးနှင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ရပ်များ … … …
အာဇာနည့်နေ့က ပေးသော သင်္ခန်းစာနှင့် လမ်းညွှန်ချက်
ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း (ခ) ဗိုလ်တေဇ
(၁၉၁၅ - ၁၉၄၇)
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း (ခ) ဗိုလ်တေဇ (၃၂) နှစ်၊ မြန်မာ့ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု၏ ခေါင်းဆောင်ကြီး၊ ဘုရင်ခံ အမှုဆောင် ကောင်စီ၏ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ (သို့) တကယ့် လက်တွေ့အားဖြင့် လွတ်လပ်ရေး မရမီ ဝန်ကြီး အဖွဲ့၏ ဝန်ကြီးချုပ်၊ ၎င်းအပြင် ထိုအစိုးရ အဖွဲ့၏ ကာကွယ်ရေးနှင့် နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး၊ ကျည်ဆန် ၁၃ ချက် သင့်သော ဒဏ်ရာဖြင့် နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန် ခဲ့ရသည်။
(၁၈၉၃ - ၁၉၄၇)
ဒီးဒုတ်ဦးဘချို (၅၄) နှစ်၊ စာရေးဆရာ၊ သတင်းစာဆရာနှင့် ဒီးဒုတ်ဂျာနယ်၏ အယ်ဒီတာ၊ ပြန်ကြားရေး ဝန်ကြီး၊ သူ့ အသက်အရွယ်နှင့် ဦးနှောက်ထဲ ဝင်သွားသော ကျည်ဆန် အပါအဝင် ကျည်ဆန် ၅ ချက် ရရှိသည့်တိုင် နေ့လယ်ပိုင်း အထိ ရန်ကုန် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီးတွင် အသက်ရှင်လျက် ရှိနေသေးပြီး၊ ညဘက်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။
(၁၈၉၇ - ၁၉၄၇)
သခင်မြ (၄၉) နှစ်၊ လူငယ် ခေါင်းဆောင်များကြားတွင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်သော နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ အဆုတ်ကို ထွင်းဖောက်သွားသော သေနတ်ဒဏ်ရာဖြင့် နေရာတွင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၁၈၉၈ - ၁၉၄၇)
ဦးအဗ္ဗဒူ ရာဇတ် (၄၉) နှစ်၊ မန္ဈလေးမြို့ မူဆလင်ခေါင်းဆောင်၊ ပညာရေးနှင့် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဝန်ကြီး၊ ဒဏ်ရာ ၆ ချက် ရရှိပြီး နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၁၉ဝ၁ - ၁၉၄၇)
ဦးဘဝင်း (၄၆) နှစ်၊ ဦးအောင်ဆန်း၏ အကို၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးနှင့် ထောက်ပံ့ရေး ဝန်ကြီး၊ ကျည်ဆန်ဒဏ်ရာ (၈) ချက် ရရှိပြီး နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၁၉ဝ၃ - ၁၉၄၇)
မန်းဘခိုင် (၄၃) နှစ်၊ ဟင်္သာတမှ ကရင် အမျိုးသား တဦးဖြစ်ပြီး ဂျပန် သိမ်းပိုက်ထားစဉ်က ပြန်လည် ခုခံတော်လှန်ရာ၌ ပါဝင်ခဲ့သည်။ စက်မှုလက်မှု ဌာနနှင့် အလုပ်သမား ဌာနဝန်ကြီး၊ ကျည်ဆန် ၁၅ ချက် ထိမှန်ခဲ့သည်။ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
မိုင်းပွန် စော်ဘွားကြီး စပ်စံထွန်း
(၁၉ဝ၇ - ၁၉၄၇)
စပ်စံထွန်း (၄ဝ) နှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှ မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး၊ နယ်ခြားဒေသ ဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံ ဝန်ကြီး၊ ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာ ၂ ချက် ရရှိပြီး ၂ဝ ရက်နေ့ မွန်းတည့်ချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်သူ့ ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်သည်။
(၁၉၁၃ - ၁၉၄၇)
ဦးအုန်းမောင် (၃၄) နှစ်၊ သယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ဌာန၊ ဒုတိယ အတွင်းဝန် (ICS)၊ အစီရင်ခံစာ တခုကို လာရောက် တင်သွင်းနေစဉ် လူသတ်သမားများ၏ ကျည်ဆန်များ ထိမှန်သွားခြင်း ခံရသည်။ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
(၁၉၂၉ - ၁၉၄၇)
ကိုထွေး (၁၈) နှစ်၊ ဦးရာဇတ်၏ သက်တော်စောင့်၊ မန္ဈလေးအနီးရှိ တောင်ပြင် သိပ္ပံရပ်မှ မူဆလင် လူငယ်တဦး ဖြစ်သည်။ အစည်းအဝေး ခန်းမတွင်းမှ သေနတ်သံများ ကြားရသဖြင့် အနီးရှိ ရုံးခန်းမှ ပြေးထွက်လာစဉ် ဆုတ်ခွာ ပြေးသွားနေသော လူသတ်သမားများ၏ ပစ်ခတ်ခြင်းကို ခံရသည်။ ဒဏ်ရာ ၄ ချက်ရရှိပြီး ဆေးရုံတွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။
ဦးစော၊ ဂဠုန်၊ ၁၉ဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် သာယာဝတီမြို့၌ မွေးဖွားသည်။ လူသတ်သမားများ၏ ခေါင်းဆောင်ဟု အစွပ်စွဲခံရသူ၊ သမ္ဘာရင့် လက်ျာ နိုင်ငံရေးသမား ဖြစ်ပြီး ဦးအောင်ဆန်း၏ အဓိက ပြိုင်ဘက် ဖြစ်သည်။ သူရိယ သတင်းစာကို စတင် ထူထောင်သူနှင့် မျိုးချစ်ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည်။ ၁၉၄ဝ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလမှ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ အထိ နန်းရင်းဝန်၊ ၁၉၄၂ မှ ၁၉၄၆ အထိ ယူဂန္ဓာပြည်တွင် အထိန်းသိမ်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် ချုပ်ဆိုသော အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်ကို အသိအမှတ်ပြုရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သူ ဖြစ်၍ ဦးအောင်ဆန်းနှင့် သူ့ အမှုဆောင် ကောင်စီ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား သတ်ဖြတ်မှုဖြင့် ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင် အဖမ်းခံရလျက်၊ စွဲဆိုထားသည့် အတိုင်း ပြစ်မှု ထင်ရှားသဖြင့် အပြစ်ပေးခံရပြီး၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် အင်းစိန်ထောင်၌ ကြိုးပေးခံရသည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် အပြီး ဗြိတိန်၏ ဝန်ကြီးချုပ် အသစ် အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက်ခံရပြီး၊ လေဘာ ပါတီ ခေါင်းဆောင် 'ကလီးမင့် အက်တလီ' (Clement Atlee၊ အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား တနှစ်အတွင်း လွတ်လပ်ရေး ပေးမည်ဟု အာမခံခဲ့သူ) က ၁၉၄၇ ခု၊ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း ကျင်းပခဲ့သည့် လန်ဒန် ဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွဲ့ဝင်တဦး အဖြစ် ပါဝင်ခဲ့သူ ဂဠုန်ဦးစော အပေါ် ယခုကဲ့သို့ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
သေနတ် ခလုတ်နှိပ်ရလျှင် ပျော်နေကြသည့် နောက်လိုက် နတ်ဆိုးများ
သက်နှင်း၊ သေနတ်သမား၊ ကျိုက်လတ်မြို့မှ ဂဠုန် တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း ဖြစ်ပြီး ယင်းမြို့ မျိုးချစ် ပါတီ၏ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်သည်။ ဦးစောကို အထူးကြည်ညိုပြီး လုံးဝဥဿုံ ယုံကြည် ကိုးစားသူ ဖြစ်သည်။ သေဒဏ် ပေးခံရသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင်ပင် အင်းစိန်ထောင်၌ သေဒဏ် အစီရင်ခံရသည်။
မောင်စိန်၊ သေနတ်သမား၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့မှ ဖြစ်၍ စစ်အတွင်းက ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ ဗမာ့ တပ်မတော်သား ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် ပြည်သူ့ ရဲဘော် အဖွဲ့သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ့မိဘများမှာ မျိုးချစ် ပါတီကို လိုလား နှစ်သက်သူများ ဖြစ်၍ သူ့ကို ဦးစော၏ နောက်လိုက်ဖြစ်ရန် သိမ်းသွင်း ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြသည်။ သေဒဏ် ပေးခံရသည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၈ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် အကျဉ်းထောင်၌ သေဒဏ် အစီရင်ခံရသည်။
သုခ၊ လူသတ်သမားများအား အတွင်းဝန်ရုံးသို့ ဂျစ်ကားဖြင့် မောင်းပို့ ပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့ရှိ အစိုးရ အထက်တန်းကျောင်းမှ ၉ တန်း အောင်မြင်ခဲ့သည်။ စစ်ပြီးနောက် ကျိုက်လတ်မြို့ ဖဆပလ အဖွဲ့၏ ငွေထိန်းဖြစ်ပြီး ကုန်သည်တဦး ဖြစ်သည်။ သက်နှင်းက သူ့ကို ဦးစောနှင့် မိတ်ဆက် ပေးခဲ့သည့် အပြင် မျိုးချစ်ပါတီ တွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် စာရင်းတင်ပေးခဲ့သည်။ ဦးစော၏ ခြံဝင်းသို့ လုပ်ကြံမှု မတိုင်မီ နောက်ဆုံး ရောက်ရှိလာသူ ဖြစ်သည်။ သေဒဏ် ပေးခံရသော်လည်း ကြိုးပေးမည့်နေ့ မတိုင်မီနေ့ ညနေပိုင်းတွင်မှ အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂ဝ သို့ လျှော့ချခြင်း ခံရသည်။
ခင်မောင်ရင်၊ ကြံရာပါ တဦးဖြစ်၍ ရှေ့ပြေးအဖွဲ့ စီးသော ဖို့ဒ်ဆန် ထရပ်ကားကို မောင်းသူ ဖြစ်သည်။ ဦးစော ဇနီးသည်၏ တူတော်သည်။ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး ထိုင်နေကြောင်း လျှို့ဝှက် သင်္ကေတဖြင့် သတင်းပေးပြီး လူသတ်သမားများ ထွက်ခွာလာရန် အချက်ပြခဲ့သည်။ သေဒဏ် အပေးခံရသော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂ဝ သို့ လျှော့ချခြင်း ခံရသည်။
လူသတ်သမားနှင့် ကြံရာပါ အဖွဲ့ထဲတွင် ဝါကြီးသူ တယောက်ဖြစ်သည့် ခင်မောင်ရင်၏ ဖြောင့်ချက်တွင် အတိတ်ကာလက ဖြစ်ရပ်များကို တင်ပြရာတွင် ဦးစော၏ အသက်ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် ရန်ရှာခဲ့သည့် အကြောင်းမှ ဆက်၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော ဖြစ်ပုံ တစုံ ထုတ်ဖော် ပြောပြခဲ့သည်မှာ ဦးစောက အမိန့်ပေးပြီး လုပ်ခိုင်းသည့် တာဝန်အရ "စစ်ဦးစီး ဗိုလ်ချုပ်၏ ပြည်လမ်းနေအိမ် ညပိုင်း ဧည့်ခံပွဲတွင် ဦးအောင်ဆန်းအား ပစ်ခတ်ရန် စေလွှတ်ခဲ့ရာ ဦးအောင်ဆန်း ကားဖြင့် ရောက်လာသည်ကို မြင်သော်လည်း သူပြန်လာကာ ဦးစောအား ဦးအောင်ဆန်း ထိုပွဲသို့ တက်ရောက်ခြင်း မရှိဟူ၍ လိမ်ပြောလိုက်ကြောင်း" သူပြောတာ မှန်တယ်လို့ ယုံကြည်ရလျှင် ဦးစော လန်ဒန်မြို့မှ ၁၉၄၆ ခု၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ပြန်ရောက်လာပြီး မကြာမီလောက်က ဖြစ်လိမ့်မည်။
မောင်နီ၊ ကြံရာပါ တဦးဖြစ်၍ ရှေ့ပြေး အဖွဲ့နှင့် လိုက်ပါ သွားခဲ့သည်။ လူသတ်သမားများ ထွက်အပြေးတွင် လွတ်မြောက်နိုင်ရန် အကူအညီ ပေးရေးအတွက် ခြောက်လုံးပြူး သေနတ် တလက်ဖြင့် အတွင်းဝန်များရုံး အထွက် ဂိတ်ပေါက်မှ စောင့်နေခဲ့ရသည်။ သေဒဏ် အပေးခံရသော်လည်း အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂ဝ သို့ လျှော့ချခြင်း ခံရပြီး ယင်းသတင်းကို သုခနှင့် တပြိင်နက်တည်း အသိပေးခံခဲ့ရသည်။
ဘညွန့်၊ ကြံရာပါ တဦးဖြစ်၍ ရှေ့ပြေး အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည်။ ဦးစော၏ လူယုံတော် အဓိက နောက်လိုက်ခေါင်းဆောင် ဖြစ်ပြီး သူတဦးသာ ဦးစော၏ အိမ်အတွင်း နေထိုင်ခွင့်ရသည်။ ဘညွန့်သည် ဦးစော၏ မျိုးချစ် ပါတီဝင် ဖြစ်လာပြီး နောက် လက်နက်များ၊ ခဲယမ်းမီးကျောက်များ စုဆောင်းရန်နှင့် ရန်ပုံငွေ ရှာရန် တာဝန် ၃ ရပ် သူ့ကို အပေးခံခဲ့ရသည်။ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်တထောင်ပင်မ စစ်လက်နက် ပစ္စည်းတိုက်မှ ဘရင်းဂန်း အလက် ၂ဝဝ ထုတ်ယူသွားသူမှာ သူဖြစ်ကြောင်း ဘညွန့်က ထုတ်ဖော်လိုက်သည်။ ထိုလက်နက်များကို သုံးတန်တင် လော်ရီကားဖြင့် တကြိမ်တည်း တင်ပြီး ဦးစော၏ အေဒီလမ်း နေအိမ်သို့ သူမောင်းပို့ခဲ့ကြောင်း သူက ပြောဆိုလိုက်သည်။ နောက်တကြိမ်တွင်လည်း ပြည်လမ်းပေါ်ရှိ အခြား လက်နက် သိုလှောင်ရုံ တခုမှ ဒဿမ (၃ဝ၃) ကျည်ဆံ အတောင့် တသိန်းတိတိကို သူသွားရောက် ယူဆောင်ခဲ့ရကြောင်း ဝန်ခံသည်။
သူသည် အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ နှစ်ဘာသာသင် အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်လာသူ ဖြစ်၍ ဦးစော၏ သေနတ်သမားများထဲ၌ ပညာ အတတ်ဆုံး ဖြစ်လေသည်။ ထို့အပြင် အသိဉာဏ် ရှိ၍ အိုးသည်ကုန်း တရားရုံးတွင် စာရေး ဖြစ်ခဲ့သည်။ သခင်နုအား သတ်ရန် တာဝန် အပေးခံရသည်။ ဘုရင့်သက်သေ (ဖော်ကောင်) အဖြစ် ဘက်ပြောင်း ထွက်ဆိုရန် သဘောတူခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အခြေအနေ အရ သူ့အား အပြစ်မှ ခွင့်လွှတ်မှု အပေးခံရလျက် အလုပ်ကြမ်းနှင့် ပြင်းထန်သော ထောင်ဒဏ် ၁ဝ နှစ်နှင့် ၆ လ ချမှတ် ခံခဲ့ရသည်။
ထိုစဉ်က ဘုရင်ခံဖြစ်သူ ဆာဟူးဘတ်ရန့်စ် (Sir Hubert Rance) သည် ထိုအမှုကို စစ်ဆေး ဆုံးဖြတ်ရန် ၁၉၄၇ ခု၊ စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့တွင် တရားသူကြီး ၃ ဦးပါ "အထူးခုံရုံး" ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ခုံရုံး သဘာပတိ အဖြစ် တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး ဦးကျော်မြင့်အား တာဝန် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၊ ခုံရုံး အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် သမ္ဘာရင့် စက်ရှင် တရားသူကြီးများ ဖြစ်ကြသော ဦးအောင်သာကျော်နှင့် ဦးစီဘူးတို့ကို တရားဝင် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။
တရားဆိုင်ခြင်းကို အင်းစိန်ရှိ အထူးခုံရုံးတော်၌ ထိုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် စတင် ပြုလုပ်သော အခါ ၎င်းတရားဆိုင်ခြင်းသည် ဗြိတိသျှ ဘုရင်နှင့် ဦးစော (အဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ မောင်စိုး (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ သက်နှင်း (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ မောင်စိန် (ခေါ်) စိန်ကြီး (ခေါ်) လှအောင် (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ ရန်ကြီးအောင် (ခေါ်) လှထွန်း (လူသတ်သမား အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ သုခ (အတွင်းဝန်ရုံးသို့ လူသတ်သမားများအား ကားဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရသူ ကားဒရိုင်ဘာ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ ခင်မောင်ရင် (ကြံရာပါ ကူညီသူ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ)၊ မှုန်ကြီး (ခေါ်) မောင်မှုန် (ကြံရာပါ ကူညီသူ အဖြစ် စွပ်စွဲခံရသူ) တို့၏ အမှု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ တရားဥပဒေ စကားရပ်မှာ၊ "တူညီသော ရည်
ရွယ်ချက် အကျိုးစီးပွား အလို့ငှာ လူသတ်ရန် တာဝန်ပေး စေခိုင်းမှု" စသည့် ခေါင်းစဉ် စွဲချက်များဖြင့် ရုံးတင် စစ်ဆေး တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ထိုသို့ တရားဆိုင်ခြင်းကို နောက်ဆုံး ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ အထိ ဆက်လက် ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးနောက် စုစည်းရရှိထားသော ထင်ရှားသက်သေ အစုလိုက် အပြုံလိုက်ကို ဆန်းစစ် သုံးသပ်ပြီးနောက် အထူးခုံရုံးတော် အနေဖြင့် စကားလုံးရေ (၅၂,ဝဝဝ) ဖြင့် ရေးသားထားသော စီရင်ချက်ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့တော့သည်။ ထိုနေ့က တရားခွင်ကို ဖွင့်ပေးခဲ့သဖြင့် ဥပဒေပညာရှင်များ၊ သတင်းစာ ဆရာများ စသဖြင့် စုရုံး ရောက်ရှိလာလျက် ယင်းလူအုပ်ထဲတွင် မြန်မာ ဝတ်လုံတော်ရမင်းလည်း ဖြစ်ပြီး စာရေးဆရာလည်း ဖြစ်သော ဒေါက်တာမောင်မောင်လည်း ပါရှိခဲ့ပါသည်။ (နောက်ပိုင်းတွင် သူသည်လည်း နောက်လိုက် နတ်ဆိုး တဦး အဖြစ် သူတတ်ထားသည့် ပညာဖြင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းပြုခဲ့သူ) ဒေါက်တာမောင်မောင်က ဤသို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်လေရာ ပြစ်ဒဏ်ချခံရသူ ၉ ဦး အတွက် လမ်းတလမ်းသာ ကျန်တော့သည်။ ၎င်းနောက်ဆုံး မျှော်လင့်ချက်မှာ နိုင်ငံတော် သမ္မတထံမှ သက်ညှာထောက်ထား ကရုဏာပွားမှုကို တောင်းခံရန်သာ ဖြစ်လေသည်။ သမ္မတ နိုင်ငံတော်သစ်၏ ဂုဏ်ကျက်သရေ မြင့်မားလှသော သမ္မတကြီးမှာ ရှမ်းပြည်နယ်မှ ညောင်ရွှေစော်ဘွား 'စပ်ရွှေသိုက်' ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်ဆုံးချိန်တွင်ကျမှ ၃ ဦးသာလျှင် တသက်တက္ဆွန်း ထောင်ဒဏ်၊ တနည်းအားဖြင့် အနှစ် ၂ဝ ထောင်ဒဏ်သို့ အပြစ်ဒဏ် လျှော့ပေါ့ခြင်း ခံကြရသည်။ ၎င်းတို့မှာ ဂျစ်ကားမောင်းသူ သုခ၊ လူသတ်သမားများ အတွင်းဝန်ရုံးသို့ ရောက်မလာမီ ကြိုတင် ထောက်လှမ်းရသူ ခင်မောင်ရင်နှင့် လူသတ်သမားများ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို ခြောက်လုံးပြူး တလက်ဖြင့် စောင်ကြပ်ခဲ့ရသူ မောင်နီတို့ ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်သောသူ အားလုံးမှာ ကြိုးပေး ခံရသည်။
ထိုသို့ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့ အထူးခုံရုံးတော်က စီရင်ချက်ကို ဖတ်ကြားသည့် အချိန်တွင် ရန်ကုန်မြို့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းပေါ်ရှိ ဂျူဗလီခန်းမ၌ နိုင်ငံတော် ဈာပန အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အခြား လုပ်ကြံခြင်း ခံရသူများ၏ ရုပ်အလောင်းများမှာ လဲလျောင်းလျက် ရှိနေဆဲပင်။
ထိုလုပ်ကြံမှုကြီးသည် ထိုအချိန်က မြန်မာတော်တော်များများ အရိုးခံ ယုံကြည်ကြသကဲ့သို့ ဦးအောင်ဆန်းအား ဖယ်ရှား၍ သူတို့ လက်ဝေကို ခံပြီး သူတို့အား မလှန်မည့်သူ တဦးအား အစားထိုးနိုင်ရန် လန်ဒန်ရှိ အာဏာပိုင် ရပ်ကွက်များမှ စီမံသည့် ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုတရပ် ဖြစ်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ပါက ဗီဗီယန်း၊ ဒိန်း၊ ယမ်းနှင့် မိုးတို့လို လူမျိုးများသည် ပုဂ္ဂလိက လက်နက် မှောင်ခိုသမားများနှင့် မိမိတို့ ဘာသာ စွန့်စွန့်စားစား လုပ်လိုသူများသာ ဖြစ်ကြပါသလား။ ထို့အပြင် 'ဘင်ဂလေ' ဆိုသူမှာ အတိအကျ မည်သူမည်ဝါ ဖြစ်ပါသနည်း။ ဦးစောနှင့် သူ၏ လက်ပါးစေများကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ ရုံးတင် စစ်ဆေးခြင်းများသည် မည်မျှလောက် သေသေသပ်သပ်၊ စနစ်တကျနှင့် က္ဆွမ်းကျင် လိမ္မာစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည် ဖြစ်စေကာမူ ယင်းအမှုကြီး တခုလုံးသည် မျက်စိတဆုံး မြင်နိုင်လောက်ရုံထက် အဆပေါင်းများစွာ ပိုမိုရှုပ်ထွေး ပတ်သက်မှုများ ရှိနိုင်ခဲ့ပေလိမ့်မည် …. .…။
ဘင်ဂလေ၊ ဂ္ဆွန်စတျူးဝပ် (Bingley, John Stewart) ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ (၁၉၄၆-၄၇) ခုနှစ်များ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗြိတိသျှကောင်စီ ( British Council) ၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် ရန်ကုန်မြို့၌ နေထိုင်ခဲ့သည်။ ဦးစောက အင်းစိန်ထောင်ထဲမှ စာအချို့ သူ့ထံ ရေးသားပြီး ငွေတောင်းခံခဲ့သည်။ ထောက်လှမ်းရေး လုပ်ငန်းများတွင် သူ ပါဝင် ပတ်သက်နေသည်ဟု သခင်နု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းနှင့် အချို့ ပုဂ္ဂိုလ်များက အကြီးအကျယ် သံသယ ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလောသုံးဆယ် ထွက်ခွာ သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက်ပိုင်း သူ့ ကံကြမ္မာနှင့်သူ မည်သည့် အရပ်ဒေသသို့ ရောက်သွားပြီး မည်သို့ မည်ပုံ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်များမှာမူ မည်သူမျှ မသိနိုင်တော့သော လျှို့ဝှက် ဆန်းကြယ်မှုပင် ဖြစ်နေပေတော့သည်။ ၁၉၇၉ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၊ ဆရေး (Surrey) နယ်တွင် ကွယ်လွန်သွားသည်။ မစ္စတာ ဘင်ဂလေ၏ ကိုယ်ကာယမှာ ထူးထူးခြားခြား အရပ်ရှည်ခြင်း မရှိချေ။ သို့သော်လည်း မျက်နှာရှည်ရှည်နှင့် ပိန်ပိန်ပါးပါး ဖြစ်သည်။
ဒေါ်မန်စမစ်၊ ဆာ ရီဂျင်နယ် ဟျူး (Dorman-Smith, Sir Reginald Hugh)၊ ၁၈၉၉ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး (၁၉၃၅-၄၁) ခုနှစ်များတွင် ကွန်ဆာဗေးတစ် (Conservative MP) အမတ် ဖြစ်ခဲ့၍၊ ဗြိတိသျှ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အတော်များများတွင် ဝန်ကြီး အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် လည်းကောင်း၊ (၁၉၄၁-၄၆) ခုနှစ်များ အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဘုရင်ခံ တဦး ဖြစ်ကာ ဦးစောနှင့်လည်း များစွာ အက္ဆွမ်းဝင်သူ တဦး ဖြစ်သည်။ ထိုနောက် ဗြိတိသျှ အမျိုးသားရေး ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းသို့ ပြန်မဝင်သော်လည်း ဟန့်ရှိုင်းယားနယ် တာဝန်ယူရသော အဆင့်မြင့်ရဲမှူး (High Sheriff of Hampshire) နှင့် ပြေငြိမ်းရေး တာဝန်ခံ (JP) အလုပ်များ လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး ပြီးနောက် ဂဠုန်ဦးစောအား မြန်မာနိုင်ငံရေး လောကသို့ ပြန်လည် ခေါ်ယူပြီး နေရာပေးခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဘုရင်ခံ၏ ကိုယ်ရံတော် အဲရစ် ဘက်တာစဘီ (Eric Battersby) (အေဒီစီ ၁၉၄၂) အား ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီ အစီအစဉ် [ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရသည့် အနှစ် (၅ဝ) မြောက် အဖြစ် "အောင်ဆန်းကို အမှန်တကယ် ဘယ်သူသတ်သလဲ" မှတ်တမ်း ရုပ်ရှင်ကို ရိုက်ကူးပြီး ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီမှာ ၁၉၉၇ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်တွင် ဗြိတိန်၌ ထုတ်လွှင့် ပြသခဲ့သော တင်ဆက်မှု] က တွေ့ဆုံ မေးမြန်းရာမှာ၊ "ဦးအောင်ဆန်း၏ အစွန်းရောက် အယူအဆများ စွန့်လွှတ် သွားစေရန် ဦးစောက လွှမ်းမိုး လုပ်ဆောင်နိုင်လိမ့်မည် ဟူသော မျှော်လင့်ချက်နှင့် (ဆာဒေါ်မန်စမစ်က) က္ဆွန်ုပ်အား (ဦးစောကို ပြန်ခေါ်လာရန်) စေလွှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ သက်သက်မဲ့ ရူးတာပါ၊ ဒါဟာ လွယ်လွယ်လေး ဘယ်ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဦးစောဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သြဇာအာဏာ မရှိတော့ပါဘူး၊ ဦးအောင်ဆန်းကသာ ချုပ်ကိုင်ထားတာပါ" ဟု ပြောပြသည်။
ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီ အစီအစဉ်မှာပဲ၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ မေလအတွင်း ကြိုးပေးတဲ့နေ့က ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ ဗြိတိန် သံအမတ်က ဝှိုက်ဟောသို့ လျှို့ဝှက် ကြေးနန်းစာ တစောင် ရေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ကြေးနန်းစာဟာ နှစ်ပေါင်း ၅ဝ ခန့် မပေါက်ကြားသင့်သည့်စာ အဖြစ် ထိန်းသိမ်းထား ခံခဲ့ရပါတယ်။ လအနည်းငယ် အကြာမှာ နိုင်ငံခြားရေးရုံးက ဒီအစီအစဉ်ရဲ့ သုတေသနမှူးထံ ၎င်းစာအား ထုတ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းကြေးနန်းစာက ရဲအကြီးအကဲက သံအမတ်ကို ပြောပြချက်အား ထုတ်ဖော်ထားပါတယ်။
ဒိန်း၊ ဗိုလ်မှူး ပီတာအားနက် လန့်စ်လော့ ( Daine, Major Peter Ernest Lancelot)၊ ၁၉၂၃ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ အချက်ပြ ဆက်သွယ်ရေးတပ်၌ ၁၉၄၄ မှ စတင်၍ အရာရှိ အဆင့်ကို ရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဗမာ့ စစ်ဦးစီးဌာနချုပ် ထောက်လှမ်းရေးတပ်၌ တာဝန် ထမ်းဆောင်လျက်၊ မင်္ဂလာဒုံ မြောက်ဘက်ရှိ ပင်မ ခဲယမ်းမီး ကျောက်တိုက်၏ တပ်မှူးလည်း ဖြစ်သည်။ ဦးစော တပည့်များ ထုတ်ယူသွားသော လက်နက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့အား ဖမ်းဆီးခြင်း မရှိ။
မိုး၊ ဗိုလ်မှူး ဂျေ၊ အေ၊ (Moore, Major J.A.)၊၁၉ဝ၈ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ အိန္ဒိယ တပ်မတော်၏ လက်နက်ကြီးတပ်မှ အရာရှိ တဦးဖြစ်ပြီး၊ ဗိုလ်တထောင်ရှိ ပင်မ ခဲယမ်းမီးကျောက်တိုက်၏ တပ်မှူးဖြစ်ပါလျက် ဦးစော တပည့်များ ထုတ်ယူသွားသည့် လက်နက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သူ့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့သော်လည်း ပြစ်ဒဏ် ကျခံရခြင်း မရှိ။
ဗီဗီယန်း၊ ကပ္ပတိန် ဒေးဗစ် (Vivian, Captain David)၊၁၉၃၂ ခုနှစ်တွင် စတင် အရာရှိ ဖြစ်လာသည်။ အိန္ဒိယ တပ်မတော်မှ မြန်မာ လက်နက်ကိုင် ပုလိပ် တပ်ဖွဲ့သို့ လက်နက် အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ရန် လွှဲပြောင်းခြင်း ခံရလျက်၊ ဇူလိုင်လ ၂ဝ ရက်တွင် အဖမ်းခံရပြီး လက်နက်များ ရောင်းချမှုဖြင့် စွဲချက် တင်ခံရသည်။ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်နှင့် ရူပီး ငါးထောင် ငွေဒဏ်၊ ၂ ခု ပူးတွဲ အပြစ်ပေး ခံရသည်။ သို့သော် ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အင်းစိန်ကို ကရင် လက်နက်ကိုင် သူပုန်တပ်များ သိမ်းပိုက်ရာတွင် လွတ်မြောက်ခဲ့သဖြင့် ကရင့် တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် အလယ်ရိုးမမှ တဆင့် အရှေ့ရိုးမ တောတွင်း လက်နက်ကိုင် ကရင်စခန်းများသို့ ရောက်သွားရာမှ ၁၉၅ဝ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ထိုင်းနယ်စပ် အနီးရှိ ကော့ကရိတ် နယ်မြေအတွင်း လယ်တဲတခု၌ ကရင့် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးနှင့် အတူ ခေတ္တ စခန်းချနေခိုက် ဗမာ့ တပ်မတော်နှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ကာ အသတ်ခံရသည်ဟု မြန်မာ အာဏာပိုင်များက ယူဆခဲ့သော်ငြားလည်း အမှန်စင်စစ် ထိုနေ့က ထိုနေရာတွင် သူမရှိခဲ့ပါ။ ၁၉၅ဝ နှစ်လယ် ခန့်၌ ထိုင်းနိုင်ငံမှတဆင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသို့ ပြန်သွားသည့် အချိန်အထိ သူသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကရင် တော်လှန်ရေးသမားများနှင့် လွတ်မြောက် နယ်မြေများ အတွင်း နေထိုင်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၈ဝ ခုနှစ် အတွင်း ဝေလနယ်၊ ဆွမ်စီးမြို့တွင် ကွယ်လွန် သွားခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရသည့် အနှစ် (၅ဝ) မြောက် အဖြစ် ဘီဘီစီ (၂) တီဗွီ အစီအစဉ် တင်ဆက်သူက သူတို့ သုတေသနပြု တွေ့ရှိချက်တွေကို ဖော်ထုတ် တင်ဆက်ရာမှာ၊ ဗိုလ်ကြီး ဒေးဗစ်ဗီဗီယန်း (Vivian, Captain David) သည် ကရင့်လှုပ်ရှားမှုတွင် လည်းကောင်း၊ ဦးစော၏ ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုတွင် လည်းကောင်း ပါဝင် ပတ်သက်နေသူ နောက်တဦး ဖြစ်သည်။ ၁၉၅၄ ခုနှစ်တိုင်အောင် ကရင်များနှင့် အတူ တိုက်ခိုက်ခဲ့သော နေ့ရက်ဟူသော သူ၏ နေ့စဉ် မှတ်တမ်းနှင့် ဂ္ဆွန်မော်ဂင် (John Morgan) ဟူသော နာမည်ဖြင့် အထောက်အထားတုများ အသုံးပြုကာ ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ ဗြိတိန်သို့ သူပြန်လာခဲ့ခြင်းကို ဘီဘီစီမှ သုတေသနပြု သူများက ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဗိုလ်ကြီး ဗီဗီယန်နှင့် ပတ်သက်သော မှတ်ချက်များ နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှ ဖိုင်တွဲများမှာ အဖျက်အဆီး ခံရပုံရသည်။ ဘန်ကောက်ရှိ ဗြိတိသျှ သံရုံးက "သူသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောင်ကျခံရမှုမှ ရှောင်ပြေးလာခဲ့ကြောင်း သိရှိခဲ့သည်" ဟူသော အချက်ကို အညွှန်းဇယား တခုက ပြသခဲ့သည်။ စောစောပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထောင်ကျခဲ့စဉ်က "ဗြိတိန်က တစုံတယောက်က ကျနော့်ကို ဖယ်ရှားချင်နေတယ်။ စကားပြောခွင့်လဲ မပေးခဲ့ဘူး။ အချက်အလက်တွေကို ကျနော် ပြောလိုက်ရရင် အထူးသဖြင့် ဗြိတိသျှတွေနဲ့ မြန်မာတွေ အကြား အကြီးအကျယ် ဆူပွက်ကုန်လိမ့်မယ်" ဟု သူက ဗြိတိသျှ အာဏာပိုင်များကို ပြောဆိုခဲ့သည်။
ယမ်း၊ ဗိုလ်မှူး စီဟင်နရီ ( Young, Major C. Henry)၊ အိန္ဒိယ တပ်မတော် လျှပ်စစ်နှင့် စက်မှု အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်ရုံတပ်ခွဲ၏ တပ်မှူး တဦးဖြစ်၍ ဦးစောကို လက်နက် ပေးကမ်းခဲ့မှုဖြင့် ၁၉၄၇ ခု၊ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် အဖမ်းခံရပြီး၊ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် အပြစ်ပေးခံရသော်လည်း အသနားခံစာ တင်သဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ချက်ချင်း ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါသည်။
♦ 'တစ္ဆေက ညတိုင်း ထော့နင်း ထော့နင်း ဖြစ်နေသည်' - မေဂျာယမ်းက သူ့အိမ်မှာ ထော့နင်း ထော့နင်း ဖြစ်နေသော တစ္ဆေ အခြောက်ခံရသည်ဟု နာမည်ကြီးနေကြောင်း ရှင်းပြသည်။
ကာတစ်၊ ဘင်နစ်, ဆာ ဖရက်ဒရစ် ဟင်နရီ (ဒဲရက်) ကေစီ (Curtis- Bennett, Sir Frederick Henry (Derek) KC၊ ၁၉ဝ၄ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ဘုရင့် ဥပဒေ အကြံပေး ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၍ ရာဇဝတ်မှုခင်းများတွင် အောင်မြင် ကျော်ကြားသော ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ရှေ့နေ တဦးဖြစ်သည်။ အထူးခုံရုံးတော်တွင် တရားပြိုင်ရာ၌ သူ့ကို ကာကွယ်ခုခံရန် အကြီးတန်း အကြံပေး အဖြစ် ဦးစောက ငှားရမ်း ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်နေ့တွင် သူနေထိုင်ရာ လန်ဒန်တိုက်ခန်းထဲတွင် သေဆုံးလျက် ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။ ရင်ခွဲ စစ်ဆေးသူ ဆရာဝန်က လွန်ခဲ့သည့် ၄/၅ ရက်ကပင် သူ သေဆုံးပြီး ဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ချက် ပေးသည်။ သို့ဖြစ်လျှင် သူသေဆုံးရက်သည် နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားလျက် သေဒဏ် ကျခံခဲ့ရသော သူ၏ အမှုသည် ကျူးလွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက် အမှု (၉) နှစ် ပြည့်မြောက်သည့် နေ့ရက်ခန့်တွင် ဖြစ်နေပေတော့သည်။
တု(ခ်)၊ ကောလင်း (Tooke, Colin)၊ ရန်ကုန်အနီးရှိ ဟံသာဝတီမှ ခရိုင် ရဲဝန်ထောက်ဟောင်း တဦး ဖြစ်သူသည် ဤခုံရုံး၏ စစ်ဆေးမှု ပြီးသည့်နောက် ဦးစော၏ အမှုကို လျှို့ဝှက်စွာ စတင် စုံစမ်း ထောက်လှမ်းခဲ့သည်။ တစုံတခု မှားယွင်းနေပြီဟု သူထင်ခဲ့သည်။ တနေ့ သူအိမ်ပြန် ရောက်သောအခါ သူ့ ဗမာအိမ်ဖော်က သူ့အယ်လ်ဇေးရှင်း ခွေးကြီးမှာ ခွေးရူး ပြန်နေပြီဟု ပြောခဲ့သည်။ သို့ဖြင့် သူ့ခွေးကို သူ သေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်လိုက်ရပြီး၊ သူ့ခွေးမှာ အနီးရှိ မြစ်ကမ်းဘေးတွင် လဲသေနေလေပြီ။ တု (ခ်) မှာ ယုံကြည်၍ မရနိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ ထုံးစံအားဖြင့် ခွေးရူးပြန်ရောဂါမှာ အချိန်အတန်ကြာ စတင် ဖြစ်ပွားရမြဲဖြစ်ပြီး ထိုနေ့ နံနက်ကပင် သူ့ခွေးမှာ အကောင်းပကတိ ဖြစ်နေသည် မဟုတ်ပါလား။ သို့ဖြစ်၍ တု (ခ်) သည် သူ့ခွေး၏ ခေါင်းကို ဖြတ်ကာ ရန်ကုန်မြို့ရှိ တိရစ္စာန်ကု ဆရာဝန်ထံ ယူသွားပြီး စစ်ဆေးကြည့်ရာ တိရစ္စာန်ကု ဆရာဝန်က သူ့ခွေးတွင် ခွေးရူးပြန် ရောဂါ မရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ့အိမ်ကို ဖောက်ထွင်းခံခဲ့ရပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လုပ်ကြံခံရမှုနှင့် ပတ်သက်သော သူ၏ စာရွက်စာတမ်း ဖိုင်တွဲများ ပျောက်ဆုံး သွားခဲ့ရပြန်သည်။ ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် ကြာပြီးနောက် အစာ အဆိပ်သင့်ပြီး တု(ခ်) သည် ဆေးရုံတွင် သေဆုံး သွားခဲ့လေတော့သည်။
ဦးတင်ထွဋ်၊ ၁၈၉၅ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ ဒါးလ်ဝစ်ခ်ျ ကောလိပ် (Dulwich College) နှင့် ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ် ( Cambridge University) တို့တွင် ပညာ သင်ကြားခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ ပဋိညာဉ်ခံဝန်ထမ်း (ICS) တဦးဖြစ်ပြီး၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်၏ ဒု-အဓိပတိ (Vice-Chancellor) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒိုင်အာခီခေတ်နှင့် (၉၁) ဌာနခေတ်များ၌ ဝန်ကြီးအဖွဲ့ အတော်များများတွင် အတွင်းဝန်ချုပ် အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ သူ၏ အစ်ကိုမှာ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ တရား ဝန်ကြီးချုပ် ဦးကျော်မြင့် ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းလှအောင်၊ ၁၉ဝ၂ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ် အစိုးရလက်ထက် ဘုရင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် မှုခင်း စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး ဌာန၏ ဒု-ရဲချုပ်၊ ဦးစောနှင့် သူ့အပေါင်းအပါများကို လျင်မြန်စွာ ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည့် အတွက် နိုင်ငံတော်၏ လေးစားမှုကို ခံခဲ့ရသည်။ တရားသူကြီးမင်း ဦးသောင်းစိန်နှင့် အတူတွဲ၍ ဦးစော၏ လုံခြုံရေး တာဝန်ကို ယူခဲ့ရသည်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ရဲချုပ် ဖြစ်လာခဲ့ပြီး၊ ၁၉၄၈ ခုနှစ်၊ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် သြဂုတ်လတွင် ဗိုလ်ချုပ် ရာထူးဖြင့် ဒု-ဦးစီးချုပ် အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ၁၉၆ဝ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သွားခဲ့သည်။
ဦးထွန်းလှအောင်သည် ဆင်း(ဒ်)ဟတ်(စ်) (Sandhurst) ဘုရင့် စစ်ကောလိပ်သို့ ဝင်ခွင့်ရခဲ့သူ ပထမဦးဆုံး မြန်မာ အမျိုးသားဖြစ်ပြီး ၁၉၂၂ ခုနှစ်တွင် သင်တန်းပြီးဆုံး၍ ဘွဲ့ရသည်နှင့် ဘုရင်၏ ရာထူး ခန့်ထားခြင်းကို ခံခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ သူသည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် လန်ဒန်ရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ မြန်မာစစ်သံမှူး အဖြစ် စေလွှတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ ထိုရာထူးမှာ ယခင်က သူကိုင်တွယ်ခဲ့ရသည့် ရာထူးထက် အဆင့်များစွာ နိမ့်သော ရာထူး ဖြစ်လေသည်။ ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ သူ့တာဝန်သက်တမ်း ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီး သူသည် မိခင်တိုင်းပြည်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ သို့သော် သူစီးလာသော သင်္ဘော သီဟိုဠ်က္ဆွန်း (ယခု သီရိလင်္ကာ) ကိုလံဘို ဆိပ်ကမ်း ဆိုက်ကပ်ချိန်တွင် သူ့ကို မြန်မာ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိများက လာရောက် တွေ့ဆုံပြီး သူကိုင်ဆောင်ထားသော နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကို ပယ်ဖျက် ပစ်လိုက်ကြသည်။ ဤသည်မှာ ရှင်းလင်းပြ၍ မရနိုင်လောက်သော ထူးဆန်းမှု ဖြစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် သူသည် သီဟိုဠ်တွင် ၁၉၅၄ ခုနှစ် အထိ သောင်တင် နေခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဗမာ့ တပ်မတော်၌ အရင်းခံ အဆင့်အမြင့်ဆုံး စစ်တပ် အရာရှိကြီး ၄ ဦး ရှိသည့် အနက် ၁၉၄၉ ခုနှစ်၊ အရောက်တွင်မူ ဦးနေဝင်း တယောက်သာ ကျန်ခဲ့ပေတော့သည်။
လုပ်ကြံမှုကြီးနှင့် ကွဲပြားသည့် အမြင် ၃ ရပ်
ဒုတိယအမြင်မှာ ၁၉၄ဝ ခုနှစ်၊ နှောင်းပိုင်းကာလက မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမှုထမ်းခဲ့ဖူးပြီး ယခုအခါ ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိ နေထိုင် နေကြသော ဗြိတိသျှ အရာရှိ အများအပြား၏ စွဲမြဲသော အမြင် ဖြစ်သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၁ဝ) ရက်၊ သာယာလှမောသော ဖလော်ရီဒါ၏ ညနေခင်း တချိန်တွင် ဗမာ့ လက်နက်ကိုင် ပုလိပ် သောင်းကျန်းမှု နှိမ်နင်းရေး တပ်ဖွဲ့ (Burma Armed Police Striking Force) တွင် အမှုထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပေဖူးလွှာ မဂ္ဂဇင်းကို အယ်ဒီတာချုပ် အဖြစ် တာဝန်ယူ ထုတ်ဝေခဲ့သူ၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ရန်ကုန် ဆေးရုံကြီး၌ ကွယ်လွန်ခဲ့သူ ဗိုလ်လက်ျာ၏ ညီငယ် ဦးမြလှိုင် (ဆေးကုသခံယူရန် ၁၉၈၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ကတည်းက အမေရိကန်သို့ ရောက်နေခြင်းဖြစ်) ၏ နေအိမ် ဖလော်ရီဒါ (Florida) ၌ အလုပ်လုပ်နေသော မြန်မာ ဆရာဝန် တဦးဖြစ်သည့် ဒေါက်တာကြင်ဟိုး (ခေါ် ) ဒေါက်တာနိုင်ဝင်းတို့ နှစ်ဦး ညစာ စားသောက်နေချိန်တွင် ၎င်းအကြောင်းအရာတို့ အပေါ် စကား စပ်မိသွားကြသည်။ ဆရာဝန်က မေးခွန်းမျိုးစုံကို အားတက်သရော မေးသည်။ သူ့မိတ်ဆွေက နိုင်ငံရေးသမား တဦးဖြစ်သည့် 'ရန်ကုန်ဘဆွေ' ဟု လူသိများသော သူ၏ တွဲဖက် တဦးပါ၊ ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့သည့် အံ့သြ ရင်ဖိုစရာ ဇာတ်လမ်းတရပ်ကို ဖော်ထုတ် ပြောပြလေတော့သည်။
ဦးအောင်ဆန်း အသတ်မခံရမီ ၁ဝ လ အလို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့တွင် ဦးစော အသက်ကို ရန်ရှာခြင်းနှင့် အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ပြည်သူ့ ရဲဘော်များ ပါဝင် ပတ်သက်နေပုံရခြင်းတို့ကို လုပ်ကြံမှု အတွက် စေ့ဆော်ချက် အဖြစ် တရားဆိုင်နေစဉ် အတွင်းတွင်ပင် ကိုးကားခြင်း ခံခဲ့ရလေသည်။
ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် ထုတ်ဝေသူ ဦးတင်မောင်ဝင်းသည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလထုတ် ဂျာနယ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် ထုတ်ဝေသော က္ဆွန်ုပ်၏ စာအုပ် အပေါ်တွင် ခြုံငုံ ရေးသားရာ၌၊
ဗိုလ်နေဝင်းသည် သူ့ဘဝ ရှေ့ရေးအတွက် ပြဿနာ တရပ်ကို စဉ်းစားရာ၌ ကစားသမားပီပီ အမှား အမှန်ကို အဓိက မထားဘဲ အနိုင် အရှုံးကိုသာ အမြဲတမ်း အဓိက ထားတတ်သူဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တပ်မှ ထွက်ကာ နိုင်ငံရေး နယ်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားချိန်တွင် သူ၏ စဉ်းစားခန်း ဝင်ခဲ့သည်မှာ ဂဠုန်ဦးစောသည် တချိန်က နန်းရင်းဝန်ဟောင်း တဦးဖြစ်လျက်၊ သူ့ကို အထင်သေး၍ မရ၊ အကယ်၍ သူသည် မတော်တဆ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဈေးကစားချက်အား ပြိုင်ရာ၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ 'တနှစ်အတွင်း လုံးဝ လွတ်လပ်ရေး' ဟုွွေ့ကးကြော်သံ မပေးဘဲ ဗြိတိသျှ အစိုးရအား 'ဒိုမီနီယန်' လျှော့ဈေးပေးကာ ဝန်ကြီးချုပ် ဖြစ်သွားခဲ့သော် ဦးတင်ထွဋ်သည် သူ့လူရင်း ဖြစ်ရုံသာမက ပညာ အရည်အချင်း အားဖြင့်လည်း ဗြိတိသျှ ပဋိညာဉ်ခံဝန်ထမ်း (ICS) ဖြစ်သောကြောင့် မျိုးချစ်ပါတီ အစိုးရတွင် ဧကန်မုချ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် ဗိုလ်နေဝင်းသည် ရှေ့ဆက် မတွေးတော့ဘဲ ရန်ကုန်ဘဆွေနှင့် လွန်စွာ ရင်းနှီးသော မြင်းခြံသား ဗိုလ်ကြီး (ယပက်လက်) လှယွှေအား သွားခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ထို့နောက် (မြဝတီ ရဲခေါင် ပြန်ပြောင်းပြောပြသည့် ရန်ကုန်ဘဆွေ၏ ပြောဆိုချက်မှာ အောက်ပါ အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ကြံမှုနေ့ ညနေပိုင်းမှ စတင်၍ ဖြစ်သည်။)
အခြား စွပ်စွဲချက် တခုမှာ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှ ထုတ်လွှင့်သော 'လွတ်လပ်သော အာရှအသံ'၊ မြန်မာပိုင်း အစီအစဉ်၊ ၂ဝဝဝ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလနှင့် စက်တင်ဘာလ ထုတ်လွှင့်ချက် (အမှတ် ၁၁၂ နှင့် ၁၁၃) တို့၌ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဖလော်ရီဒါနယ်တွင် အခြေချ နေထိုင်နေသော သတင်းစာ ဆရာကြီး ကြေးမုံဦးသောင်း (ခေါ်) စာရေးဆရာ အောင်ဗလ၏ ပြောကြားချက်များတွင် နေဝင်း ပါဝင် ပတ်သက်မှု ရှိသည့် အချို့ အစိတ်အပိုင်းများကို ထုတ်ဖော်သွားခဲ့သည်။ ယင်းတို့မှ သက်ဆိုင်သည်များကို အောက်တွင် ကောက်နုတ် ဖော်ပြပါမည်။
ဗိုလ်မှူး နေဝင်း ပေးသော သက်တော်စောင့် ၂ ဦးဖြစ်သူ ရဲဘော် ဘတုပ်နှင့် ရဲဘော် ရဲမြင့်တို့သည် သေနတ်ပစ် လက်ဖြောင့်ကြသည်။ ခြောက်လုံးပြူးနှင့် ပစ္စတို(လ်) ၁ဝ ချက် ပစ်လျှင် ၈ ချက်တို့သည် ပစ်မှတ်တို့၏ ဗဟိုသို့ ထိမှန်အောင် ပစ်နိုင်သူများ ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်နေဝင်း၏ ရာသက်ပန် လူယုံတော်၏ ဖျာပုံပြောက်ကျားတပ်မှ ပြောက်ကျားဗိုလ်၏ လက်စွဲများ ဖြစ်ကြသည်။
သခင်ရှုမောင် (ခ) ဗိုလ်နေဝင်း (၁၉၁ဝ - ၂ဝဝ၂) နှင့် သမီးဖြစ်သူ စန္ဒာဝင်း
သခင်ရှုမောင်၊ (ခ) ဗိုလ်နေဝင်း၊ ပြည်မြို့ အနီးရှိ ပေါင်းတလည်မြို့၌ ၁၉၁ဝ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသည်။ ရန်ကုန်မြို့၊ ကိုရှုမောင်သည် ဂျပ်ဆင် ကောလိပ်တွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြားခွင့် ရခဲ့သော်လည်း ၁၉၃၁ ခုနှစ်တွင် ဘွဲ့မရဘဲ ကျောင်းထွက်ခဲ့ရပြီး၊ ယခင်ချာချီလမ်း (ယခု ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းလမ်း) ရှိ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက် စာတိုက်ခွဲတခုတွင် အငယ်တန်းစာရေးလေး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့ စာတိုက်စာရေး၊ ထို့နောက် သခင်ဗစိန်၊ သခင်ထွန်းအုပ်တို့၏ နောက်လိုက် ဘဝမှ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဖြစ်လာပြီးနောက် ၁၉၄၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ် အထိ မြန်မာ့ အမျိုးသား တပ်မတော်၏ စစ်ဦးစီးမှူး ဖြစ်သည်။
၁၉၁၁ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားခဲ့သည့် တရုတ်-မြန်မာ ကပြားဖြစ်သူ ငယ်နာမည် ရှုမောင် (ခေါ်) ဦးနေဝင်းသည် ဦးနုထက် ၄ နှစ်ငယ်ပြီး ဦးအောင်ဆန်းထက် ၅ နှစ်ကြီးသူ ဖြစ်သည်။ ရဲဘော်သုံးကျိပ် အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပင် ဖြစ်သော်ငြားလည်း ဦးနေဝင်းသည် ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ နောက်ပိုင်းကျမှသာ ယှဉ်ပြိင်သူများကို ရက်ရက်စက်စက် ဖယ်ရှားပြီး ထိပ်ပိုင်းနေရာသို့ မရမနေ စတင် တက်လှမ်းလာနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ကွန်မြူနစ်များ၊ ပြည်သူ့ ရဲဘော်များ တောခိုသွားပြီး အမှတ် (၁) နှင့် အမှတ် (၃) ဗမာ့ လက်နက်ကိုင်တပ်များ ပုန်ကန်ထွ့ကသည့် အချိန်တွင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ အမှတ် (၄) ဗမာ့ လက်နက်ကိုင်တပ်သည် အစိုးရ အတွက် တခုတည်းသော မှီခိုအားထားရာ အဓိကမဏ္ဍိုင် ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကို တပြည်လုံး ဖြန့်ကျက်ထားနိုင်ရန် အတွက် ဦးတင်ထွဋ်၏ ပြည်ထောင်စု အရန် တပ်ဖွဲ့များ ကဲ့သို့သော တပ်ဖွဲ့ အသစ်များကိုထူထောင်ခဲ့ရသည်။
ရှုမောင်သည် အငယ်တန်း စာရေးလေး အဖြစ် အလုပ်လုပ်ဖက် ဒေါ်တင်တင်ကို ၁၉၃ဝ ခုနှစ်လည်တွင် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သား ၂ ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။ သူတို့ ကွဲပြီးနောက် မနာလို ဝန်တိုပြီး ဒေါသနှင့် အာဃာတတရား ကြီးမားလှသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း အဖြစ် မစ္စစ် ကေတီတောင်ကြီး (ခ) ကေတီဘသန်း (ခ) ခင်မေသန်းကို ၁၉၅ဝ ခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် လက်ထပ်ခဲ့သည်။ သူ့တွင် သမီး သုံးဦး ပါရှိလာခဲ့ပြီး နေဝင်းနှင့် သမီး ၂ ယောက်၊ သား ၁ ယောက် ရရှိခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၇၂ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ ၁၉၇ဝ ခုနှစ်လည်တွင် ဒေါ်ကြာဆန်ဟု ခေါ်သော ရခိုင် အမျိုးသမီး တဦးကို ဇနီးမယား ပြုခဲ့သည်ဟု ကောလာဟလ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကုန်းဘောင်မင်းဆက်မှ ဘုရင် မင်းတုန်းမင်း၏ မြစ်တော်သူ ဂ္ဆွန်ရို့စ် ဘယ်လာမီ (June Rose Bellamy) (ခ) ရတနာနတ်မယ်ကို ၁၉၇၅/၇၆ ခုနှစ်တွင် တရားဝင် လက်ထပ်ခဲ့ပြန်သည်။ ယင်းအိမ်ထောင်မှာလည်း ခေတ္တမျှသာ ခံပြီး အိမ်တွင်း ရန်ဖြစ်မှု အတွင်း ဆေးလိပ်ပြာ ဖန်ခွက်ဖြင့် ပစ်ပေါက်မှုဖြင့် အဆုံးသတ် သွားခဲ့သည်။ မည်သူက စပစ်ပေါက်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းပြန့်ပွားမှု အတွင်း ဝိဝါဒ ကွဲလွဲမှုများ ရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး သိရှိရသည့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမှာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သမိုင်းဌာနမှ သုတေသန ကထိက ဒေါ်နီနီမြင့်နှင့် ဖြစ်သည်။ သူ့နှင့် ကွဲပြီး ပြန်လည် လက်ထပ်ပြန်သည့် အတွက် ယင်းကို နှစ်ကြိမ်ဟု တွက်လျှင် စုစုပေါင်း (၆) ကြိမ် ရှိသည်။
၂ဝဝ၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် သမက်နှင့် မြေး ၃ ယောက် ဖြစ်သော အေးဇော်ဝင်းနှင့် သားသုံးဦး ဖြစ်သူ အေးနေဝင်း၊ ကျော်နေဝင်း၊ ဇွဲနေဝင်းတို့မှာ မအောင်မြင်သော အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီး ခံခဲ့ကြရသည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံတော် သစ္စာဖောက်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်း ခံကြရပြီးနောက် ဦးနေဝင်းနှင့် သမီးဖြစ်သူ ခင်စန္ဒာဝင်းတို့ ကိုယ်တိုင်သည်ပင် အကျယ်ချုပ် ကျခံခဲ့ရသည်။ နိုင်ငံတော် အာဏာကိုသိမ်းရန် ပူးပေါင်း ကြံစည်မှုဖြင့် တရားစွဲခံရသူ ၄ ဦးကို ၉ လကြာ နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှုဖြင့် စစ်ဆေး တရားစီရင်ကာ သေဒဏ် အပြစ်ပေးခဲ့သည်။ သူတို့အား စီရင်မည့်ရက်ကို မသတ်မှတ်သေးသော်လည်း သူတို့မှာ သေဒဏ်ကျခံရန် ထောင်တွင်း တနေရာတွင် ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် အာဏာရှင်အိုကြီးမှာ အကျယ်ချုပ် ကျနေစဉ် ဒီဇင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့ နေအိမ်၌ပင် သေဆုံးသွားသည်။
ဗိုလ်အောင်ကြီး (အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း)
ဗိုလ်အောင်ကြီး၊ အငြိမ်းစား ဗိုလ်မှူးချုပ်၊ ၁၉၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ခရိုင် ပေါင်းတည်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ တရုတ်-မြန်မာ မိသားစုမှ ဆင်းသက်ခဲ့သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ဂျပန် ဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု၌ မြစ်ဝက္ဆွန်းပေါ်နှင့် ဖျာပုံခရိုင် အတွင်း ဗိုလ်နေဝင်း၏ လက်ရုံး အရာရှိ တဦး အဖြစ် ပါဝင် လုပ်ကိုင်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် လွတ်လပ်ရေး ရအံ့ဆဲဆဲ တပ်မတော်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းလိုက်သော အခါ အမှတ် (၄) ဗမာ့ သေနတ်ကိုင် တပ်ရင်းတွင် ဗိုလ်နေဝင်း၏ လက်အောက် အရာရှိအဖြစ် အမှုထမ်းခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဆိုရှယ်လစ် ပါတီ၏ စည်းရုံးရေးမှူး ဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၅၈-၆ဝ ခုနှစ်၊ အိမ်စောင့် အစိုးရ အဖွဲ့တွင် အဓိက နေရာများကို ရခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ်တွင် တော်လှန်ရေး ကောင်စီဝင် ဖြစ်လာပြီး၊ ဒုကာကွယ်ရေး စစ်ဦးစီးချုပ်၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၃ ခုနှစ်တွင် သူ၏ လက်တွေ့ကိုသာ အရေးထားသော ပေါ်လစီများကြောင့် အစိုးရ အဖွဲ့မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း ခံရပြီး၊ ၁၉၆၅ မှ ၁၉၆၈ ခုနှစ်၊ ၁၉၇၃ ခုနှစ်များတွင် ထောင်ကျခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်တွင် စီးပွားရေးပေါ်လစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးမှုများနှင့် ပတ်သက်သော အိတ်ဖွင့် ဝေဖန်စာများကို နေဝင်းထံသို့ ရေးသားပေးပို့ခြင်း၊ ထိုစာများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဖြန့်ဝေခဲ့ခြင်း အားဖြင့် လူထု အွုံွ့ကမှုတွင် သြဇာ လွှမ်းမိုးခဲ့သည်။ ထိုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ထိန်းသိမ်းခံရပြီး သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် လွတ်မြောက်ခဲ့ကာ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြန်သည်။ စက်တင်ဘာလ ၃ဝ ရက်နေ့တွင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထိုပါတီမှ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင် နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉ဝ ပါတီစုံး အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရှုံးနိမ့်သွားပြီး နောက်ပိုင်းတွင် နိုင်ငံရေး၌ ပါဝင် လှုပ်ရှားနိုင်ခြင်း မရှိတော့ပေ။
ရန်ကုန်မှ သားသတ်သမား (ဝါ) ဗိုလ်မှူးချုပ် စိန်လွင် (၁၉၂၃-၂ဝဝ၄)
နေဝင်းက သူ့ကို သူ၏ ယုတ်မာရက်စက်သော လုပ်ဆောင်မှုများ အတွက် ကောင်းစွာ ချီးမြှင့်သည့် အနေဖြင့် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတနှင့် မဆလ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် တတိုင်းတပြည်လုံး အနှံ့ ပြည်သူ သန်းပေါင်းများစွာသည် လမ်းမများပေါ်သို့ ထွက်၍ စစ်အုပ်စိုးမှု ရပ်စဲရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ပြည်သူလူထု အတွက် ၂၆ နှစ်ကြာ ဖိနှိပ်ခံခဲ့ရမှုသည် လုံလောက်ခဲ့ပြီ။ စထွက်သည်နှင့် စိန်လွင်က ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း တုံ့ပြန်သည့် အနေဖြင့် ဆန္ဒပြမှုများအား သေနတ်ဖြင့် ပစ်ခတ် လူစုခွဲရန် ခြေမြန်တပ်မ (၂၂) မှ စစ်သားများကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဆန္ဒပြနေသူ လူအုပ်ကြီးများထဲသို့ စစ်တပ်က လက်လွတ်စပယ် ပစ်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် လူသုံးထောင် (၃,ဝဝဝ) ထက်မနည်း သေကြေခဲ့ရသည်။ ထိုသို့ ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့ အရေးတော်ပုံ အတွင်း သူ၏ ပြည်သူလူထု အပေါ် လူမဆန်စွာ ရမ်းကား သတ်ဖြတ်မှုများကြောင့် "ရန်ကုန်မှ သားသတ်သမား" အမည်ဖြင့် ကမ္ဘာကျော်ခဲ့ရသည်။ ပြည်သူလူထု၏ ဒီရေအလား ဆန့်ကျင့် အွုံွ့ကမှုများကြောင့် စိန်လွင်၏ သမ္မတ သက်တမ်းသည် ၁၈ ရက်သာ သက်တမ်း တည်မြဲခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် တာဝန် အားလုံးမှ နှုတ်ထွက် ပေးခဲ့ရသည်။ ၂ဝဝ၂ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် သူ့ဆရာသခင် အိမ်အကျယ်ချုပ်သဖွယ် ခံရပြီးနောက် မကြာမီပင် သူလည်း တရားမဝင် ရရှိနေသော ခံစားခွင့်များ၊ သြဇာ အာဏာများ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး မဖြစ်စလောက်သော စစ်တပ် ပင်စင် လစာလေးဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးစွာ ရှင်သန် နေခဲ့ရသည်။ သူ၏ အစာအိမ်ရောဂါ အတွက် စင်ကာပူတွင် ကုသမှု ခံယူပြီး အပြန် ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၉ ရက်နေ့ အသက် ၈၁ နှစ် အရွယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ သေဆုံးသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံရေးသမား တဦး တယောက်တည်း၏ အာဏာလောဘရမက်ကို ကျေနပ်မှု ပေးစေနိုင်ရန် အတွက် ရဲဘော်သုံးကျိပ် စစ်ခေါင်းဆောင်နှင့် ပြည်သူများ အပေါ် ဆွဲဆောင်မှု ထက်မြက်လှသည့် နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ကြီး တဦးနှင့် အတူ ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ က္ဆွန်သပေါက် လက်အောက်ခံ ဘဝမှ လွတ်လပ်သော နိုင်ငံတော် ဘဝသို့ ကူးပြောင်းနေသည့် စပ်ကူးမတ်ကူး ကာလ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေ့တန်း အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင် ခေါင်းဆောင်မှု ပေးနိုင်သည့် အခြားဉာဏ်ပညာ အရှိန်အဝါ ထက်မြက်လှသည့် ခေါင်းဆောင် ခြောက်ဦးနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း သားကောင်း ရတနာ ၂ ဦးတို့ အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤသည်ကား "အတော်ဆုံးသူများမှာ သူတို့ ကံကြမ္မာကို မြဲအောင် မတတ်နိုင်ကြ။ သူတော်ပေါင်း၊ နွုွေ့ကကောင်း၍ သူယုတ်မာ သက်ဆိုးရှည်သည်" ဖြစ်ပါလေသတည်း။
'ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဘယ်သူသတ်သလဲ'၊ အောင်ခင်၊
၂ဝဝ၄ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ၊ တတိယအကြိမ် ပြုပြင်တည်းဖြတ် ထုတ်ဝေခြင်း၊
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 7/20/2009 1 အကြံပြုခြင်း
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 16 နာရီ 19 မိနစ်
NLD ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးနှင့်အဖွဲ့သည် အထက်မြန်မာပြည် ပါတီစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းအတွက် သွားရောက်ဆောင်ရွက်ရာ ဒီပဲယင်းမြို့နယ်၊ ကျီရွာအနီး၌ ၃၀-၅-၂၀၀၃ ရက်နေ့တွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ကြရပြီးနောက် ၃၁-၅-၂၀၀၃ ရက်နေ့မှစ၍ နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၀ (က) နှင့် ၁၀ (ခ) တို့အရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဦးတင်ဦးတို့ကို အရေးယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းဥပဒေပုဒ်မတို့သည် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှ ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဥပဒေများကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် ၃ အရ ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံသားတဦး၏ မူလအခွင့်အရေးများကို လိုအပ်သလို ကန့်သတ်မိန့် ချမှတ်နိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်၍ ၀န်ကြီးအဖွဲ့သည် မိမိကိုယ်စား ဗဟိုအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။ ဗဟိုအဖွဲ့တွင် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးက ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့က အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဒ်မ ၁၀ (က) အရ ၃၁-၅-၂၀၀၃ ရက်နေ့မှ ၂၇-၁၁-၂၀၀၃ ရက်နေ့အထိ ၆ လ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေထိုင်မကောင်းဖြစ်၍ ၁၇-၉-၂၀၀၃ ရက်နေ့မှာ အာရှတော်ဝင်ဆေးခန်းသို့ ပို့ဆောင်ကုသခဲ့ပြီး ၂၆-၉-၂၀၀၃ ရက်နေ့ ဆေးရုံမှပြန်ဆင်းရချိန်တွင် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း နေအိမ်သို့ ပို့ပေး၍ ၂၇-၁၁-၂၀၀၃ ရက်နေ့ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ကုန်ဆုံးမည့် ရက်အထိ ထားခဲ့သည်။
ထို့နောက် အများပြည်သူ အေးချမ်းသာယာရေးကို ဆက်လက်ထိခိုက်ရန် အလားအလာရှိသည့်အတွက် ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) အရ ၂၈-၁၁-၂၀၀၃ မှ ၂၇-၁၁-၂၀၀၄ ရက်နေ့အထိ ၁ နှစ် ကန့်သတ်တားဆီးမိန့်ဖြင့် နေအိမ်တွင် တားဆီးထားပြန်သည်။ ဗဟိုအဖွဲ့အနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ပုဒ်မ ၄၆ (င) အခွင့်အာဏာအရ ပုဒ်မ ၁၀ (က) မှ ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) သို့ ပြောင်းလဲတားဆီးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဗဟိုအဖွဲ့သည် ၎င်း၏ အခွင့်အာဏာ ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ဆက်လက်တားဆီးရန် လိုအပ်သဖြင့် ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၁၄ အရ အစိုးရ၀န်ကြီးအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် တကြိမ်လျှင် ၁ နှစ်ထက် မပိုစေဘဲ ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကန့်သတ်တားဆီးမိန့်များ ဆက်လက်ထုတ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် စစ်အစိုးရက ချုပ်နှောင်ချိန်ကို လိုသလို တွက်ထားသည်။
ရဲချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီနှင့် ပြည်ထဲရေးဗဟိုအဖွဲ့ဝင် ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးချုပ်မြင့်သိန်းတို့က ထုတ်ဖော်ရှင်းလင်းသော သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် တွက်ပြပုံမှာ---
(က) ၂၈-၁၁-၂၀၀၄ မှ ၂၇-၁၁-၂၀၀၅ ရက်နေ့အထိ ပထမအကြိမ် - ၁ နှစ်
(ခ) ၂၈-၁၁-၂၀၀၅ မှ ၂၇-၅-၂၀၀၆ ရက်နေ့အထိ ဒုတိယအကြိမ် - ၆ လ
(ဂ) ၂၈-၅-၂၀၀၆ မှ ၂၇-၅-၂၀၀၇ ရက်နေ့အထိ တတိယအကြိမ် - ၁ နှစ်
(ဃ) ၂၈-၅-၂၀၀၇ မှ ၂၇-၅-၂၀၀၈ ရက်နေ့အထိ စတုတ္ထအကြိမ် - ၁ နှစ်
(င) ၂၈-၅-၂၀၀၈ မှ ၂၇-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့အထိ ပဉ္စမအကြိမ် - ၁ နှစ်
စုစုပေါင်း ၄ နှစ်နှင့် ၆ လသာ ရှိသေးသည်ဟု ဆိုသည်။ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့်ကို စုစုပေါင်း ၅ နှစ်အထိ ထားနိုင်သည့်အတွက် နောက်ထပ် ၆ လ တားဆီးနိုင်သေးသော်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်နေသည်ကို အလေးအနက်ထား စဉ်းစားနေချိန်၌ ယခုကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အတွင်း တရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာသည့် အမေရိကန်နိုင်ငံသား Mr. John Willam Yettaw ကို ၂ ရက်ဆက်တိုက် နေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ လက်ခံစကားပြောခြင်း၊ အစားအသောက်များ ကျွေးမွေးခြင်းစသည့် ကူညီမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အတွက် တည်ဆဲဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ အရ တရားစွဲဆိုခဲ့ရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ၁၆-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပါရှိသည်။
ဤသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပတ်သက်၍ ပုဒ်မ ၁၀ (က) နှင့် ၁၀ (ခ) တို့အကြောင်း ရှင်းပြမှုတွင် အစိုးရ၀န်ကြီးအဖွဲ့ ကိုယ်စား ဗဟိုအဖွဲ့၏ အမိန့်အရ ပုဒ်မ ၁၀ (က) ဖြင့် ၃၁-၅-၂၀၀၃ ရက်နေ့မှ ၂၇-၁၁-၂၀၀၃ ရက်နေ့အထိ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှု ၆ လအပြင် ပုဒ်မ ၁၀ (ခ) ကန့်သတ်တားဆီးမှု ၂၈-၁၁-၂၀၀၃ ရက်နေ့မှ ၂၇-၁၁-၂၀၀၄ ရက်နေ့အထိ ၁ နှစ်တို့ကို ဘာကြောင့် ထည့်သွင်းမရေတွက်ရပါသလဲ။ ဗဟိုအဖွဲ့သည် အစိုးရ၀န်ကြီးအဖွဲ့ကိုယ်စား ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခံရသည့်နေ့ရက်မှ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့် ကုန်ဆုံးသည့်နေ့အထိ တဆက်တစပ်တည်း ဖြစ်နေပါသည်။ အဆိုပါ ပုဒ်မ၁၀ (ခ) အရ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့် ၁ နှစ်ကိုလည်း ထည့်သွင်းရေတွက်ခွင့် မပြု၊ ချန်လှပ်ငြင်းပယ်ထားခြင်းမှာ ဥပဒေမဲ့ ပြုကျင့်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုဖြစ်ကြောင်း ထင်ရှားသည်။
အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းသည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ပုဒ်မ ၁၀ (က) ၊ ၁၀ (ခ) နှင့် ပတ်သက်၍ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှု၊ ကန့်သတ်တားဆီးမှုများကို ပွင့်လင်းစွာ ကြိုတင်ထုတ်ဖော် ကြေညာအသိပေးခြင်း မရှိခဲ့သည့်အတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ အများပြည်သူတို့ဘက်မှ ခွင့်ပြုကာလ ၅ နှစ် ကျော်လွန်လျက်ရှိကြောင်း အငြင်းပွားလျက် ရှိနေကြပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၇ အရ ယင်း၏ မူလအခွင့်အရေးများကို ကန့်သတ်မိန့်ထုတ်ပြန်၍ ပုဒ်မ ၁၀ (က) အရ ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မိန့်၊ ပုဒ်မ ၁၀ (ခ)၊ ၁၁ တို့အရ တားဆီးမိန့်နှင့် ပုဒ်မ ၁၃၊ ၁၄ တို့အရ ဆက်လက်တားဆီးမိန့်များ ထုတ်ပြန်ပြီး ကန့်သတ်တားဆီးထားရာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်ခြံဝင်းအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံသား Mr. John Willam Yettaw မှာ ၃၀-၁၁-၂၀၀၈ ရက်နေ့ ညအချိန် ခြံအနောက်ဘက် အင်းယားကန်အတွင်းမှ ရေကူးသွားရောက်ကာ ခြံဝ၌ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ မ၀င်းပပတို့နှင့် တွေ့ရှိ၍ Book for Mormon အမည်ရှိ စာအုပ်အား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖတ်ရှုရန် ချထားပေးခဲ့ကြောင်း၊ အလားတူ ၃-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့ညအချိန်တွင် အင်းယားကန်အတွင်း ရေကူးပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခြံအတွင်း တိတ်ဆိတ် ၀င်ရောက်၍ ၅-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့အထိ နေအိမ်အတွင်း နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ Mr. John Willam Yettaw နှင့် လက်ခံစကားပြောခဲ့ခြင်း၊ အစားအသောက်များ ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် မ၀င်းပပတို့မှလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် အားပေးကူညီခဲ့ကြောင်း၊ ထိုသို့ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့်များအား လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ထိုသို့ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းကို အားပေးကူညီသော ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ မ၀င်းပပနှင့် Mr. John Willam Yettaw တို့ ၃ ဦးအား ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၀၉ အရလည်းကောင်း အမှုဖွင့်အရေးယူပေးရန် ဒုရဲမှူးဇော်မင်းအောင်မှ ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းမှူးထံသို့ ၁၁-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားရာမှ ပေါ်ပေါက်လာသော အမှုဖြစ်ပါသည်။
ယင်းအမှုကို ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ခုံရုံး တရားသူကြီးဦးသောင်းညွန့် (ဥက္ကဋ္ဌ) နှင့် ဦးညီညီစိုး (အဖွဲ့ဝင်) တို့က ပြစ်မှုကြီးမှုအမှတ် ၄၇၊ ၂၀၀၉ဖြင့် လက်ခံစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ တရားလိုရဲမှူးဇော်မင်းအောင်မှ တိုင်ချက်ပါအတိုင်း ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် ဆက်လက်ထွက်ဆိုရာ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပေါ် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့် ထုတ်ထားခဲ့ရာ၌ သံရုံးများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဆက်နွယ်သူများနှင့် မဆက်သွယ်ရန်၊ နေအိမ်မှပြင်ပသို့ ထွက်ခွာခွင့် လုံးဝမပြုရန်နှင့် အခြားသို့ စာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ စကားပြောကြေးနန်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ခြင်း မပြုရန်၊ ၂၈-၅-၂၀၀၈ ရက်နေ့မှ ၂၇-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်တားဆီးမိန့် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ၅ ကြိမ် ထုတ်ခဲ့သော တားဆီးမိန့်နှင့် ဆက်လက်တားဆီးမိန့်များမှာ စုစုပေါင်း ၄ နှစ်နှင့် ၆ လ ရှိကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို တားဆီးကန့်သတ်ထားပြီး ဖြစ်သည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံခြားသားအား ညအိပ်နေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်း၊ လက်ခံစကားပြောခြင်း၊ တွေ့ဆုံစကားပြောခြင်းတို့မှာ ကန့်သတ်မိန့်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ Mr. John Willam Yettaw ပေးခဲ့သော စာရွက်စာတမ်း (စာအုပ်)ကို လက်ခံခဲ့ခြင်းသည်လည်း တားဆီးမိန့်ပါစာဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းကို ဖောက်ဖျက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ခြံဝင်းအတွင်း အတူနေထိုင်သူ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် မ၀င်းပပတို့ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တားဆီးမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်ကို သိရှိသူများဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်မှုများကို အားပေးခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်း၊ Mr. John Willam Yettaw သည် ယခုအမှု ဖြစ်ပေါ်ရာတွင် အဓိက ဆောင်ရွက်အားပေးသူ တဦးဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ဖြစ်၍ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့်များကို လိုက်နာခြင်းမရှိဘဲ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ အရလည်းကောင်း၊ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်းကို အားပေးကူညီခဲ့ကြသော ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ မ၀င်းပပနှင့် Mr. John Willam Yettaw တို့အား ယင်းဥပဒေပုဒ်မ ၂၂၊ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၁၀၉ အရလည်းကောင်း တရားစွဲဆိုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထွက်ဆိုသည်။
အင်းယားကန်အတွင်း အဖမ်းခံရသည့်အဖြစ်ကို မည်သူတို့က စီမံညွှန်ကြားခဲ့ပါသလဲ။ ပြည်ပ အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ၏ ပယောဂကြောင့်ဟု ရဲချုပ်မှ စွပ်စွဲထားသောကြောင့် ယင်းသို့ Mr. Yettaw အဖမ်းခံရအောင် စီမံပေးခဲ့သော ပြည်တွင်းပြည်ပရောက် နအဖ ဘက်တော်သားများ၏ နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ် ကျရောက်အောင်၊ ထပ်မံချုပ်နှောင်ထားစေနိုင်အောင် လုပ်ကြံစီမံချက် ဖြစ်နေကြောင်း လူအများက ယုံကြည်နေကြပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၆-၅-၂၀၀၉ ရက်စွဲဖြင့် ခရိုင်တရားရုံး ခုံအဖွဲ့သို့ အပြစ်မရှိကြောင်း ကိုယ်တိုင် ထုချေရေးသား လျှောက်လဲတင်ပြရာ၌ ''၃၀-၁၁-၂၀၀၈ ရက်နေ့၊ အမည်မသိသေးသော ပထမအကြိမ် (Mr. Yettaw) အိမ်ခြံဝင်း အတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်း ကိစ္စကို အတူနေသူ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းထံမှတဆင့် ကြားသိရ၍ ယင်းအကြောင်းကို စစ်ဆေးရန် လာခွင့်ရသူ ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်းမှတဆင့် အာဏာပိုင်များထံ သတင်းပို့ခဲ့သော်လည်း စုံစမ်းစစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်း မပြုခဲ့သည့်အပြင် အရေးယူဆောင်ရွက်ကြောင်းလည်း မသိခဲ့ရကြောင်း၊ ခြံဝင်းအတွင်းသို့ လူဝင်ရောက်မှုရှိပါက အာဏာပိုင်များထံ ချက်ချင်း သတင်းပို့ရမည်ဟု သတိပေးခဲ့ဖူးခြင်းလည်း မရှိ၊ Mr. Yettaw ဒုတိယအကြိမ် ၄-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း ၀င်ရောက်လာသည်ကို တွေ့မြင်သိရှိ၍ ပြန်ထွက်သွားရန် ပြောခဲ့ရာ၌ မိုးလင်း၍ ပြန်ထွက်လျှင် အဖမ်းခံရနိုင်သဖြင့် ညရောက်လျှင် ပြန်မည်ပြောခဲ့ပြီး ညရောက်သောအခါ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ တညအိပ်ခွင့်ပေးရန် မေတ္တာရပ်ခံခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအချိန်တွင် များစွာသော ကျမ၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်၊ ရဲဘော်ရဲဘက်များသည် ဥပဒေ၏ ကာကွယ်မှုနှင့် သက်ညှာမှုတို့ကို မခံစားရဘဲ နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များ ကျခံနေရပါသည်။ ထို့ကြောင့့်် ကျွန်မအနေဖြင့် မည်သူ့ကိုမျှ အဖမ်းအဆီး၊ အချုပ်အနှောင် မခံရစေရန် ကျမ တွန်းမပို့နိုင်ဟူသော နိုင်ငံရေးခံယူချက်အရ ခေတ္တခိုလှုံခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ လစဉ်ဆေးစစ်ရန် ၇-၅-၂၀၀၉ ရက်နေ့တွင် ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း ရာက်လာပါက ယင်းသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုကိစ္စကို တင်ပြရန် ရည်ရွယ်ထားပါသော်လည်း ထိုနေ့က ဒေါက်တာ တင်မျိုးဝင်း လာခွင့်မရတော့ဘဲ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များသာ ရောက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျမအပေါ် စွဲဆိုထားသည့် နိုင်ငံတော်အား နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးလိုသူများ၏ ဘေးအန္တရာယ်မှ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ အရ တားဆီးမိန့်၊ ကန့်သတ်မိန့်များ ချိုးဖောက်သည်ဟု စွပ်စွဲထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားလိုပြသက်သေများ၏ ထွက်ဆိုချက်များအရ ဖောက်ဖျက်ခြင်း မရှိကြောင်း ထင်ရှားနေပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံသားတဦး၏ မူလအခွင့်အရေး ကန့်သတ်မှုပုဒ်မ ဖြစ်၍ ၁၉၈၈ ခု အာဏာသိမ်းသည့်နေ့မှစ၍ အာဏာတည်ခြင်းမရှိတော့သည့် ပုဒ်မများအရ ကန့်သတ်မိန့်တို့မှာလည်း တရားဝင်မှု မရှိပါ။ ယခု အမှုအရင်းခံ အကြောင်းအရင်းများမှာ လုံခြုံရေးလစ်ဟင်းမှု၊ (သို့မဟုတ်) လုံခြုံရေးဖောက်ဖျက်မှု ဖြစ်သော်လည်း ယခုအချိန်အထိ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိမှုအတွက် အရေးယူခြင်းမရှိဘဲ ကျမကိုသာ အရေးယူ တရားစွဲဆိုခြင်းမှာလည်း ဘက်လိုက်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်'' ဟု ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း၊ မ၀င်းပပတို့ဘက်မှ လိုက်ပါဆောင်ရွက်သော ရှေ့နေများက တရားလိုကို ပြန်လှန်စစ်မေးမှုတွင် ''၁၉၇၄ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ပေါ်ပေါက်လာသော ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေဖြစ်၍ နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှု တည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ကိုယ်တိုင် ၄၆ နှစ်မြောက် တော်လှန်ရေးနေ့ ၂၇-၃-၁၉၉၃ တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ မရှိတော့ကြောင်း မိန့်ခွန်းပြောကြားထားတာ ရှိသည်ကို သိသလား" ဟု မေးမြန်းရာ၌ ''တရားလိုမှ မသိရှိပါ'' ဟု ဖြေဆိုပြီး န၀တ ၏ ၂၄-၉-၁၉၈၈ ရက်စွဲပါ ကြေညာချက် အမှတ် ၆/ ၈၈ အရ အာဏာအရပ်ရပ်ကို တာဝန်ယူခဲ့သည့် ၁၈-၉-၁၉၈၈ ရက်နေ့တွင် တည်ဆဲဥပဒေအားလုံးကို ရုပ်သိမ်းခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း မရှိသရွေ့ အတည်ဖြစ်သည် ဆိုသောကြောင့် ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေမှာ တည်ရှိနေကြောင်းသာ ဖြေပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကိုလည်း နအဖ မှ အတည်ပြုထားပြန်သဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံနှစ်ခု ဖြစ်နေတာလားဟု မေးမြန်းချက်ကို တရားသူကြီးက အလှမ်းကွာဝေးသည့်အတွက် ယခုအမှုနှင့်မဆိုင်၍ မေးမြန်းခွင့် မပြုကြောင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးလျက်ရှိသော တရားရုံး တရားသူကြီးများသည် အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်၏ အလိုကျ ဘက်လိုက်စစ်ဆေးနေသော တရားစီရင်ရေး ချိနဲ့ယိမ်းယိုင်မှုပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဥပဒေအရ ကန့်သတ်တားဆီးမိန့်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ခြင်း၊ အားပေးကူညီခြင်းတို့ဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ ၄ ဦးတို့အပေါ် စွပ်စွဲတရားစွဲနေချိန်မှာပင် ၂၅-၆-၂၀၀၉ ရက်နေ့၊ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ရီက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ယခုကဲ့သို့ Mr. John Willam Yettaw ၀င်ရောက်လာမှုကို လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတို့အား ချက်ချင်းအသိပေး အကြောင်းကြားခြင်းမရှိ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိမှုတို့ကြောင့် ဖြစ်ရကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ လုံခြုံရေးပျက်ကွက်မှုကို ၀န်မခံဘဲ Mr. Yettaw ၏ ပထမအကြိမ် ၀င်၊ ထွက်ရာ လမ်းကြောင်းရှင်းလင်း၍ လွတ်မြောက်သွားခဲ့ခြင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်တွင်လည်း ပထမအကြိမ်ဝင်ခဲ့သော လမ်းကြောင်းအတိုင်း ၀င်ခဲ့ပြီး ပြန်အထွက်၌ အချိန် ၅ နာခန့်ကြာ အင်းယားကန်မှ ရေကူးသွားရသော လမ်းကြောင်းအသစ်ကို ရွေးချယ်လျက် ဖမ်းဆီးခံရမှု ပေါ်ပေါက်လာစေခြင်းဖြင့် ယခုကဲ့သို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် ရုံးတင်တရားစွဲဆိုပြီး ပြစ်ဒဏ်စီရင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်မှု ဖြစ်ပါသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းသို့ နိုင်ငံရေး စည်းရုံးရေးခရီး ထွက်ခဲ့ရာ၌ လူထုထောက်ခံမှုများ တိုး၍ရရှိနေသည့်အတွက် နအဖ အစိုးရအနေဖြင့် စိုးရိမ်တုန်လှုပ်မှုရှိလာသည်။ ထို့ကြောင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များ ကြီးကြပ်စီစဉ်သော ၃၀-၅-၂၀၀၃ ရက်နေ့ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် စီစဉ်ထားခဲ့ခြင်းမှ လက်မတင် လွတ်မြောက်လာနိုင်ခဲ့သော်လည်း ၃၁-၅-၂၀၀၃ ရက်နေ့တွင် အာဏာပိုင်တို့က ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်လိုက်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုအမှုသည် နိုင်ငံရေးအရ လုပ်ကြံသော နိုင်ငံရေးအမှုဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်က ခံယူ၍ သဘောထားမှတ်ချက်ပေးပါသည်။
နအဖ အစိုးရသည် တရားစီရင်ရေးကို ကျင့်သုံးရာတွင် သူ့စစ်ဖိနပ်ကြိုး ချည်နှောင်ပေးနေရသော အဖွဲ့အစည်းတခုကဲ့သို့ သဘောထားသည်။ နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သောအမှု (သို့မဟုတ်) ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့မှ တရားစွဲဆိုသော အမှုတိုင်း၌ မူလတရားရုံးများသည် မိမိသဘောဖြင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုရဘဲ အထက်သို့ တင်ပြ၍ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်များ ချမှတ်ပေးရန် ညွှန်ကြားထားပါသည်။ ပြစ်မှုပုဒ်မ ၂ ခု၊ ၃ ခု ဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်တဦးတည်းအပေါ် တွဲစွဲထားသော အမှုများတွင်လည်း ပြစ်ဒဏ်ကို တပေါင်းတည်းပေးနိုင်ပါလျက် သီးခြားစီ အပြစ်ပေးရမည်ဟု မှာကြားထားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု (Rule of Law) ဆိတ်သုန်းခဲ့သည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါ၍ ယခုအမှုတွင်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေကို မည်သို့ပင်ခိုင်မာသော ခုခံဖြေရှင်းချက် ပေးနိုင်လင့်ကစား ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း ခံရမည်မှာမလွဲပါ။ လာမည့် မြန်မာနိုင်ငံ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပါဝင်ခွင့် မရအောင် နအဖ မှ စီမံချက်ချထားပြီး ဖြစ်ပါသတည်း။
(၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လွှတ်မည်မဟုတ်ဟု ဦးဉာဏ်ဝင်းပြော
Monday, 20 July 2009 20:18 ဇာနည်ဝင်း .ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်း တောင်းဆိုထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအား လွှတ်ပေးရန် ဟူသောအချက်မှာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာမရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံခြား ရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ယမန်နေ့ကပြုလုပ်သည့် အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးများ ညစာစားပွဲတွင် ပြော လိုက်သည်။
“ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဘန်ကီမွန်းရဲ့ မြန်မာပြည် ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး(ဦးဉာဏ်ဝင်းက) ကျနော်တို့ကို ရှင်းပြပါတယ်။ လက်မခံနိုင်သေးဘူး၊ အချိန်ယူရဦးမယ်တဲ့”ဟု အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် မစ္စတာ ဆူရင်ပစ်ဆူဝမ်က သတင်းထောက်များကို ရှင်းပြသည်။
ညစာစားပွဲတွင် ဦးဉာဏ်ဝင်း၏ ပြောပြချက်များအရ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အနာဂတ်တွင် လွတ်မြောက် လာမည်ဖြစ်သော်လည်း ယခုအခါ ဆက်လက် အကျဉ်းကျနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အထိန်းသိမ်းခံနေရခြင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကဆစ်ဖိရုမ်းက လည်း ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးကက်ကျွန်း အပန်းဖြေစခန်းတခုတွင် ပြုလုပ်သည့် အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲရောက် သတင်း ထောက်များကို ပြောပြခဲ့သည်။
“မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းရေး အခြေအနေတွေကို ကျနော်တို့ ဝင်ပြီး ပတ်သက်လို့ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည် ဟာ အာဆီယံရဲ့ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်နေတယ်” ဟု ကဆစ်ဖိရုမ်းက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခုအခါ အင်းစိန်ထောင်တွင် ရောက်ရှိနေသည်။ မေလက သူ၏ အိမ်အတွင်းသို့ အမေရိကန် နိုင်ငံသားတဦး လျှို့ဝှက် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် အကျယ်ချုပ် ကန့်သတ် တားဆီးမိန့် ချိုးဖောက်မှုဖြင့် ထောင်တွင်း တရားရုံးတွင် အမှုရင်ဆိုင်နေရသည်။ အဆိုပါ အမှုသည် ငွေဒဏ် ၅ဝဝဝ သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ ၅ နှစ်ထိ ချခံရနိုင်သည့် အမှု ဖြစ်သည်။
ထိုသို့ တရားစွဲဆိုပြီး ရက်အနည်းငယ် အကြာမှာပင် အာဆီယံအဖွဲ့ ဥက္ကဌ တာဝန်ကို ယူထားသော ထိုင်းနိုင်ငံက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးအတွက် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ ထိုစာကို ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဖိဆစ် ဝေ့ချာချီဝက လက်မှတ်ထိုးပြီး ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အာဆီယံ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင်ပစ်ဆူဝမ်ကလည်း ထိုအမှုသည် အာဆီယံအသင်းကြီး၏ ဂုဏ်သိက္ခာ ထိခိုက်စေသည့်အမှုဖြစ်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ဖူးသည်။
စစ်အစိုးရက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လည် လွှတ်ပေးရန် ဝန်လေးသဖြင့် ဤအမှုကို ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု အကဲခတ်များ ယူဆနေကြသည်။
ဤ သတင်းကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် ဇာနည်ဝင်းက ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးကက် ဒေသမှ ရေးသားပေးပို့ ခြင်းဖြစ်သည်။
အာဆီယံဆွေးနွေးပွဲရောက် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး သတင်းသမားများကို ရှောင်ရှားနေ
Monday, 20 July 2009 20:48 ဇာနည်ဝင်း .အာဆီယံ ဆွေးနွေးဘက် နိုင်ငံများ အစည်းအဝေးအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးကက် ကမ်းခြေတွင် ရောက်ရှိနေ သော နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်း ခေါင်းဆောင်သည့် မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့က သတင်းထောက် များကို ရှောင်ရှားနေသဖြင့် မြန်မာပြည်ဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များကိုသာ အားကိုး နေရကြောင်း တွေ့ရသည်။
၆ နှစ်ကြာ နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းထားသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားစွဲဆိုထားမှု၊ မြောက်ကိုရီးယားထံမှ လက်နက်များ ဝယ်ယူမှု စသည့် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ၎င်းအာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ခုခံ ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။
ယမန်နေ့က ညစာစားပွဲအပြီး ဟိုတယ်မှ ပြန်လာသော နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို သတင်းထောက် များက မေးခွန်းများ ဝိုင်းဝန်း မေးမြန်းကြသော်လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက တစုံတရာ ဖြေကြားခြင်း မပြုပေ။
ဦးဉာဏ်ဝင်း ရင်ဆိုင်နေရသည့် အနေအထားမှာ အလွန် ခက်ခဲလိမ့်မည်ဟု အာဆီယံ အစည်းအဝေးတွင် သတင်းယူနေသည့် သတင်းထောက်တဦးက ခန့်မှန်းသည်။
“မြန်မာပြည် ပြန်ရင်လည်း သူ့အတွက် မလွယ်ဘူး။ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သူက သေသေချာချာ ခုခံ ပြောကြားနိုင်မှ သူ့အတွက် အဆင်ပြေမယ်” ဟု သူက သုံးသပ်သည်။
ထိထိရောက်ရောက် ခုခံပြောကြားနိုင်ခြင်း မရှိပါလျှင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများက ဦးဉာဏ်ဝင်းအပေါ် အမျက်မာန် ရှကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး မိသားစုပင် အခက်အခဲ တွေ့နိုင်သည်ဟု သူက ယူဆနေသည်။
တည်ဆောက်နေသည်ဟူသော မြေအောက်ဥမင်များ၊ မကြာမီ လွှတ်ပေးမည်ဟု ဆိုသော အကျဉ်းသားများ၊ မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော စသည့် အကြောင်းအရာတို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံ ဆွေးနွေးပွဲရှိ မြန်မာ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် ပထမအတွင်းဝန် ဦးသက်ထွန်းကို ဧရာဝတီက ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာ
ဦးသက်ထွန်းက “ဒီမေးခွန်း ကျနော် ဖြေလို့ မဖြစ်ပါဘူး ခင်ဗျ” ဟု ယဉ်ကျေးစွာ ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံရာတွင် သတင်းထောက်များ မေးသည့် မေးခွန်း အားလုံးနီးပါးမှာလည်း မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးအခြေနှင့် မြန်မာစစ်အစိုးရအကြောင်းများသာ ဖြစ်နေသည်။
ရက်ပိုင်းအတွင်း ပြုလုပ်တော့မည့် အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက် နိုင်ငံများ အစည်းအဝေးတွင် အမေရိကန် အပါအဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၂၆ နိုင်ငံ တက်ရောက်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုအစည်းအဝေးတွင်လည်း ဦးဉာဏ်ဝင်းသည် မြန်မာ-မြောက်ကိုရီးယား စစ်ရေး ဆက်ဆံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ဝေဖန် ပြောဆိုမှုများကို ခံယူရဖွယ်ရှိသည်ဟု အများက သုံးသပ်နေကြသည်။
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းသည် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဖူးကက်ကျွန်း အပန်းဖြေစခန်းတခုတွင် ရောက်နေသော်လည်း အပန်းမဖြေနိုင်ဘဲ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေပုံရသည်ဟု သတင်းထောက်များက ခန့်မှန်းနေကြသည်။
အာဇာနည် ဗိမာန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ တားမြစ်ခံရ
Monday, 20 July 2009 20:52 ကိုစိုး .အာဇာနည် ဗိမာန်သို့ ယမန်နေ့က ကျရောက်သော ၆၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့တွင် သွားရောက်ပြီး အလေးပြုရန် ကြိုးပမ်းသူ ၅၀ ခန့်သည် အာဏာပိုင်များ၏ တားမြစ်ခြင်းခံရကြောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာဝင်းနိုင်က ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသည်ဟု သတင်းများထွက်ခဲ့သော အဆိုပါ အာဇာနည်ကုန်းသို့ သွားရောက်သူများ တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံ ပါသော တီရှပ် အင်္ကျီ ၊ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပုံ ကိုင်ဆောင်ထားသူများပါဝင် သည့် အတွက် လုံခြုံရေးအာဏာပိုင်များက တားမြစ်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ကပြောဆိုသည်။
“မနေ့ က ညနေပိုင်းအထိ သူတို့ကို ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ပဲ သတင်းတွေထွက်နေတာ၊ ကျနော် သိသလောက်
က ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါတဲ့ တီရှပ်တွေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကိုင်ပြီး အာဇာနည်ကုန်းကို တက်တာကို တားတာ၊ ဒီနေ့လည်း ကျနော် ရုံးကို ရောက်တော့ ထပ်မေးတယ်၊ အဲဒီလူတွေ အဖမ်းခံရတာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောတယ်”ဟု ၎င်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ယမန်နေ့က အာဇာနည်ကုန်းသို့ အလေးပြုရန်သွားသူများကို နော်အုန်းလှ က ဦးဆောင်ခြင်းဖြစ်ပြီး အများစုမှာ NLD အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြောင်း NLD အဖွဲ့ဝင် တဦးက ပြောဆိုထားသည်။
အာဇာနည်ဗိမာန်တွင် ပြုလုပ်သော အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနက တရားဝင် ဖိတ်ကြားထား သူများသာ တက်ရောက်ခွင့် ရကြောင်းသိရသည်။
NLD ကလည်း ၆၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ကို ရုံးချုပ်တွင် ကျင်းပသည်။ အဆိုပါ ရုံးရှေ့နှင့် အနီးတ၀ိုက် တွင် ယမန်နေ့က စစ်သားများ၊ ယူနီဖောင်းဝတ်ရဲများ၊ အရပ်ဝတ်ရဲများ၊ စွမ်းအားရှင်များ၊ ကြံ့ဖွံ့များ အပါအ၀င် စုစုပေါင်း ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်ဖြင့် အာဏာပိုင်များက လုံခြုံရေးချထားခဲ့သည်။
အာဇာနည်နေ့ အခမ်းအနား ကျင်းပရာ NLD ရုံးချုပ်သို့ လာရောက်ကြသော အဖွဲ့ဝင်များ၊ သတင်းထောက် များ၊ ဧည့်သည်များကို အာဏာပိုင်များဘက်က ဓာတ်ပုံ၊ ဗီဒီယို မှတ်တမ်းများ ရိုက်ယူကြောင်းလည်း NLD ကပြောသည်။
အာဇာနည်ကုန်းသို့ ချဉ်းကပ်ရာလမ်းများ၊ အာဇာနည်ကုန်းဘေးရှိ ရွှေတိဂုံဘုရား စောင်းတန်း ၄ ခု တို့တွင် ယမန်နေ့က လုံခြုံရေးများ တင်းကျပ်စွာ ချထားပြီး၊ မသင်္ကာသူများအား မေးမြန်း စစ်ဆေးခြင်း၊ ကင်မရာပါ သူများအား စစ်ဆေးမေးမြန်းရန် ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းများကို လုံခြုံရေး အာဏာပိုင်များက ပြုလုပ် ကြောင်း လည်း သိရသည်။
ဒေသတွင်း လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ သဘောတူ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဒီနေ့စတင်တဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ စည်းဝေးပွဲက လူ့အခွင့်အရေး ဌာနသစ် ဖွဲ့စည်းရေးကို အတည်ပြုလိုက်ပြီး လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားတက်ကြွသူတွေကတော့ ကျေနပ်အားရဖွယ် မရှိလှဘူးလို့ ဝေဖန်ကြပါတယ်။
ဖူးခက် အပန်းဖြေမြို့မှာ လုံခြုံရေးတွေ ထူထူထပ်ထပ် ချထားပြီး အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ စည်းဝေးပွဲက အတည်ပြုလိုက်တဲ့ အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးဌာနမှာ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တဲ့ နိုင်ငံတွေကို စောင့်ကြည့် အရေးယူဖို့ အာဏာ မပါရှိပါဘူး။
အာဆီယံရဲ့ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀တ်ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva) ကတော့ လူ့အခွင့်အရေးများ တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားပါတယ်။ အာဆီယံအနေနဲ့ စစ်အစိုးရအပေါ် အနောက်တိုင်းက ထပ်မံ ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှာကို ဆန့်ကျင်သင့်တယ်၊ စစ်အစိုးရနဲ့ ဆက်လက် စကားဆိုရမယ်လို့လည်း သူက စောစောပိုင်းမှာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာဆီယံ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဆူရင် ပစ်ဆူဝန် (Surin Pitsuwan) ကလည်း မြန်မာပြည်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ မရှိတာကိုက ဒေသ အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတယ်၊ မြန်မာ့ပြဿနာ မဖြေရှင်းနိုင်သေးသရွေ့ အာဆီယံအနေနဲ့ ကမ္ဘာကြီးကို ဆက်လက် ရှင်းပြနေရဦးမယ့် ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးကို ထမ်းဆောင်ရလိမ့်ဦးမယ်လို့ သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသွားပါတယ်။
အောက်တိုဘာလ အာဆီယံ ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာ ၁၀ နိုင်ငံစလုံးက ထောက်ခံမှသာလျှင် အဲဒီ လူ့အခွင့်အရေးဌာန အတည်ဖြစ်လာမှာပါ။ လက်ရှိ ဖူးခက်က အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ စည်းဝေးပွဲရဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆွေးနွေးဘက် ၁၇ နိုင်ငံက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ တက်ရောက်မယ့် စည်းဝေးပွဲသို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) လည်း တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်စုနဲ့ အကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေ နောက်ဆုံး လျှောက်လဲချက်အတွက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံထားရတဲ့ အမိန့်ကို ဖောက်ဖျက်တယ်ဆိုပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မေလကစပြီး အင်းစိန်ထောင်တွင်း ဧည့်ဂေဟာမှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ရာက မေလ ၁၈ ရက်နေ့မှာ စတင် ရုံးတင်စစ်ဆေးနေရာက အခုလာမယ့် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာတော့ နှစ်ဖက် နောက်ဆုံးတရားခွင်မှာ လျှောက်လဲကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို နောက်ဆုံးပြုလုပ်မယ့် တရားခွင်နေ့ မတိုင်မီ ပြင်ဆင်မှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့ ဒီနေ့ တနင်္လာနေ့မှာပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရဲ့ အကျိုးတော်ဆောင် အဖွဲ့ဝင် ၄ ဦးတို့ အင်းစိန် ဧည့်ဂေဟာမှာ ၂ နာရီကျော် ဆွေးနွေးခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မအေးအေးမာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျနေရာက ပုဒ်မ ၂၂ နဲ့ အင်းစိန်ထောင်တွင်းမှာ စွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သူမရဲ့ အပြီးသတ် လျှောက်လဲချက်တွေအတွက် သူမရဲ့ အကျိုးဆောင် ရှေ့နေတွေနဲ့ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက် နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲကနေ ၅ နာရီအထိ ၂ နာရီခွဲကြာ အင်းစိန်ထောင်တွင်းက ဧည့်ဂေဟာမှာ တွေ့ဆုံခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာပဲ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဘာတွေများ ဆွေးနွေးဖြစ်ပါသလဲ ဆိုတာကို ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို မေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
“တွေ့တာကတော့ ၂ နာရီခွဲကနေ ၅ နာရီအထိ တွေ့တယ်။ ထူးထူးခြားခြား ပြောစရာမရှိဘူး။ အဓိက Final Argument အတွက် နောက်ဆုံး Final Touch လုပ်တာပေါ့လေ။”
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ သူမရဲ့အမှုဟာ နိုင်ငံရေးအမှုလို့ ခံယူထားတဲ့အတွက် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားတယ်လို့လည်း ဆက်ပြောသွားပါတယ်။
“ဒီဥစ္စာက နိုင်ငံရေးအမှုပဲ။ သူကလည်း နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်အရပဲ လုပ်ခဲ့တာ။ အဲတော့ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်အရ လုပ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ တစုံတခု ကျနော်တို့ ခုခံတဲ့ဘက်က သဘောမတူလို့ တစုံတရာ အမိန့်ချရင်လည်း အဆင်သင့်ဖြစ်အောင် စိတ်ဓာတ်ရော၊ ကျန်းမာရေးရော အဆင်သင့် လုပ်ထားတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကျန်းမာရေး အခြေအနေက Physically ရော Mentally ရော ကောင်းပါတယ်။”
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ကတော့ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုမျှော်မှန်းထားသလဲ ဆိုတာကို မေးတဲ့အခါ ဒီအမှုဟာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လွတ်မြောက်မှာပဲဆိုပြီး ပြောသွားပါတယ်။
“တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး မြန်မာနိုင်ငံမှာ တကယ်ရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီအမှုက လုံးဝ လွတ်ရပါမယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ အကျဉ်းကျနေစဉ်အတွင်း သူမရဲ့ဖခင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကျဆုံးခဲ့ရတဲ့ အာဇာနည်နေ့မှာပဲ အင်းစိန်ထောင်တွင်းက ဆေးရုံမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းသားတွေကို အလှူအတန်းတခု လုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပြပါတယ်။
“စနေနေ့ ၁၈ ရက်နေ့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်အရ အန်ကယ်တို့က သူလိုချင်တဲ့ ကွေကာအုပ်တို့ ကိတ်မုန့်တို့ အားလုံး လူ ၃၃၀ အတွက် သွားပို့ပေးတယ်။ ၁၈ ရက်နေ့က ပို့ပေးတယ်။ အာဇာနည်နေ့မှာ သူက အလှူအတန်း လုပ်တယ်။ ထောင်ဆေးရုံတက်နေတဲ့ အကျဉ်းသားတွေ။ အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး မေးကြည့်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေတယ်တဲ့။ အလှူအတန်းလည်း စိတ်ဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်လို့ရပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်။”
ဒီနေ့မှာ လွတ်လပ်စွာ တွေ့ခွင့်ရခဲ့ပါသလား ဆိုတာကိုလည်း မေးကြည့်ခဲ့ရာမှာတော့ …
“လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့ Something Bug လုပ်တာ ဘာညာ ဒါတော့ ကျနော်မသိဘူး။ တွေ့တာတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ရပါတယ်။ အနားမှာလည်း တယောက်မှ မနေပါဘူး။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ သူမကို စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်ဝင်းတို့ သားအမိလည်း သူမနဲ့အတူ ရှိနေပြီး သူတို့အားလုံးကို ထောင်တွင်းက သီးခြားနေရာတခုမှာ ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန် အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ လက်နက်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်နှင့် အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန် ဆင်းဂ် (ယာ) တို့ နယူးဒေလီတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနေစဉ်။
ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၀၉။
အမေရိကန်နဲ့ အိန္ဒိယ နှစ်နိုင်ငံ မဟာဗျူဟာကျတဲ့ မဟာမိတ် ဆက်ဆံရေးကို ပိုပြီးခိုင်မာစေဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ ၅ ရက်ကြာ ခရီးစဉ်အတွင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) ဟာ ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန် ဆင်းဂ် (Manmohan Singh) နဲ့ ဒီနေ့ နယူးဒေလီမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အက်စ်.အမ်. ခရစ်ရ်ှနာ (S.M. Krishna) နဲ့လည်း ဒီနေ့နှောင်းပိုင်းမှာ တွေ့ဆုံဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ နယူးဒေလီကို ရောက်နေတဲ့ ဗွီအိုအေသတင်းထောက် ဒေးဗစ် ဂေါလပ်စ် (David Gollust) သတင်းပေးပို့ထားတာကို ဒေါ်လှလှသန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် အနေနဲ့ အိန္ဒိယ၀န်ကြီးချုပ် မန်မိုဟန် ဆင်းဂ်နဲ့ နယူးဒေလီမှာ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ နှစ်နိုင်ငံကြား မဟာဗျူဟာကျတဲ့ ဆက်ဆံရေး တိုးတက်စေဖို့ ရည်ရွယ် ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အိန္ဒိယ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး အက်စ်.အမ်. ခရစ်ရ်ှနာနဲ့ ဒီနေ့နှောင်းပိုင်းမှာ တွေ့ဆုံရာမှာတော့ ၀န်ကြီး ကလင်တန်အနေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံအကြား တရားဝင် မဟာဗျူဟာကျတဲ့ အခြေအတင် ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ဖို့ရှိပြီး သက္ကရာဇ် ၂၀၀၅ ခုက အမေရိကန်နဲ့ အိန္ဒိယ နျူကလီးယား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စာချုပ်ကို အခြေခံတဲ့ သဘောတူညီမှု အနည်းဆုံး ၂ ခု လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
စာချုပ်တခုကတော့ အိန္ဒိယမှာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ ၂ ခုက နျူကလီးယားစွမ်းအင် စက်ရုံ ၂ ရုံ တည်ထောင်မယ့် နေရာတွေကို အတည်ပြုမယ့်စာချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တခုကတော့ အိန္ဒိယကို အမေရိကန်က ရောင်းချတဲ့ လက်နက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတွေ တတိယနိုင်ငံကို မပြန့်ပွားရလေအောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တဲ့ စာချုပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသဘောတူညီမှုကနေ အမေရိကန်ကို အိန္ဒိယက တိုက်လေယာဉ် ရောင်းချမယ့် သဘောတူညီမှုကိုလည်း လမ်းဖွင့်ပေးရာ ရောက်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဒီနေ့မှာပဲ ၀န်ကြီး ကလင်တန်အနေနဲ့ အာဏာရ ကွန်ဂရက်စ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဆိုနီယာ ဂန္ဒီ (Sonia Gandhi) အပြင် အတိုက်အခံ BJP ပါတီခေါင်းဆောင် အယ်လ် ခရစ်ရ်ှနာ အတ်ဒ်ဗာနီ (Lal Krishna Advani) နဲ့လည်း တွေ့ဆုံဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သောကြာနေ့ နှောင်းပိုင်းကတော့ မွမ်ဘိုင်းကို ဆိုက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီး ကလင်တန်ရဲ့ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် နိုဝင်ဘာလက လူ ၁၆၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး ပါကစ္စတန်နဲ့ အိန္ဒိယကြား ဆက်ဆံရေး တင်းမာစေခဲ့တဲ့ မွမ်ဘိုင်းမြို့မှာ ပါကစ္စတန် အခြေစိုက် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေအကြောင်း သတိရစရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ထိုစဉ်က အကြမ်းဖက်သမားတွေ တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ ဟိုတယ် ၂ ခုအနက် တခုမှာ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က တည်းခိုခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်း သေဆုံး ဒဏ်ရာရခဲ့ကြသူတွေအတွက် အမှတ်တရ အခမ်းအနားကိုလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
အိန္ဒိယအစိုးရ ထိပ်တန်းအရာရှိတွေနဲ့ မတွေ့ဆုံမီ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က သတင်းထောက်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာတော့ သူက ပါကစ္စတန် အနေနဲ့ မကြာသေးမီ လများအတွင်း သူ့နယ်မြေမှာ အခြေစိုက် လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ အစွန်းရောက် ၀ါဒီတွေကို နှိမ်နင်းရာမှာ ထိထိရောက်ရောက် ကြိုးပမ်းခဲ့တာ တွေ့ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ပြီးခဲ့တဲ့ ၆ လအတွင်း ပါကစ္စတန် အစိုးရနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရာမှာ အစိုးရတရပ်လုံး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှုကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ သန္နိဋ္ဌာန် ခိုင်မာမှုကို အစိုးရက ပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ကျမတို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရ၊ စစ်တပ်၊ အရပ်ဘက်နဲ့ ထောက်လှမ်းရေး အဆင့်တိုင်းနဲ့ ကျမတို့ ဒီကိစ္စကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပါကစ္စတန် နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွားအတွက် ဆိုတာ ကျမအနေနဲ့ ပါကစ္စတန် ပြည်သူတွေကို တိုက်ရိုက် အသိပေး ပြောကြားခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်” လို့ ၀န်ကြီး ကလင်တန်က ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅ ရက်ကြာ အိန္ဒိယ ခရီးစဉ်အပြီး ၀န်ကြီး ကလင်တန်အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို ခရီးဆက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀တ်ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva) နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ရှိပြီး ဖူးခက်မှာ လက်ရှိကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ ၀န်ကြီးများအဆင့် ညီလာခံအပြင် ARF အာဆီယံ ဒေသန္တရ ညီလာခံကိုလည်း တက်ရောက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒီ့နောက် သောကြာနေ့မှာ ၀ါရှင်တန်ကို ပြန်ရောက်လာမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှု ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ကန့်ကွက်
မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူတာတွေဟာ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် မကျင့်သုံးသင့်ဘူးလို့ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀တ်ချာချီဝ (Abhisit Vejjajiva) က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုက ပြဿနာ မဖြေရှင်းနိုင်ရင် ASEAN အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများအဖွဲ့က ချမှတ်ကျင့်သုံးနေတဲ့ အပြုသဘောဆောင် ဆက်ဆံရေးကနေ မြန်မာနိုင်ငံ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဘန်ကောက်ရောက် ၀ိုင်းတော်သား ကိုကျော်ကျော်သိန်းက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အာဆီယံရဲ့ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ပြောကြားတဲ့ သူ့ရဲ့ သီတင်းပတ်စဉ် ရေဒီယိုမိန့်ခွန်းထဲမှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀တ်ချာချီဝက မြန်မာနိုင်ငံပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု ချမှတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောကြားသွားတာပါ။ အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးတွေရဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ ဆွေးနွေးဘက် နိုင်ငံတွေနဲ့ အစည်းအဝေးတွေ၊ အာဆီယံ ဒေသဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲတွေ ကျင်းပနေတဲ့ အချိန်မှာပဲ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က အခုလို ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မြန်မာနိုင်ငံပေါ် အဓိက ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားတဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက သူ့ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မူဝါဒကို ပြန်ပြီး သုံးသပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကာလနဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။
ဒဏ်ခတ်အရေးယူတာက ပြဿနာတွေကို မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး ဆိုရင်လည်း အာဆီယံက တောက်လျှောက် ကျင့်သုံးလာခဲ့တဲ့ အပြုသဘောဆောင် ဆက်ဆံရေးနဲ့ မြန်မာ့ပြဿနာတွေ ဖြေရှင်းနိုင်အောင် ထိထိရောက်ရောက် လုပ်ဆောင်သင့်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) သတင်းနဲ့ ပြန်ကြားရေး တာဝန်ရှိသူ တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။
“အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဆိုရင် အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို လုပ်တဲ့အထိရောက်အောင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို အမြန်ဆုံး ဖြစ်ပေါ်နိုင်အောင် လုပ်ဖို့ သူတို့က ၀န်းရံပြီး ခေါ်ဆောင်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုဟာ အောင်မြင်မှာပေါ့ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှု လိုတယ်ဆိုပြီး အာဆီယံလို အားကိုးထိုက်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မိတ်ဆွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ရော၊ Public Relation ရောပေါ့ဗျာ၊ ပြည်သူနဲ့ပါ ထိစပ်အောင် သွားနေတဲ့ အာဆီယံဖြစ်မယ်ဆိုပြီး ကြေညာထားတဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီ့ထက်ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်တဲ့၊ ထိရောက်တဲ့၊ လက်တွဲခေါ်ဆောင်မှုမျိုးနဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို ပြေလည်အောင် လုပ်ဖို့ အားကြိုးမာန်တက် ဆောင်ရွက်ပေးမယ် ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အာဆီယံကပြောတဲ့ စကားကို ငြင်းပယ်စရာအကြောင်း မရှိပါဘူး။”
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှုတွေ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာဟာ အကျိုးမထူးသလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံရေး မူကလည်း အလုပ်မဖြစ်ဘူးလို့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန် (Hillary Clinton) က ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း သွားရောက်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား ခရီးစဉ်တခုအတွင်း ပြောထားခဲ့ဖူးပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာအဘီဆစ်ကတော့ ဒဏ်ခတ် အရေးယူမှုကို ဆန့်ကျင်တာဟာ အာဆီယံ တဖွဲ့လုံးရဲ့ ရပ်တည်ချက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဖော်ထုတ်သင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် မြန်မာစစ်အစိုးရက အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေတာကို အာဆီယံက ကန့်ကွက်ထားခဲ့ပေမယ့် ပြည်တွင်းရေး ၀င်စွက်ဖက်တာမျိုးကိုတော့ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်း ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်က ပြောပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ရည်ညွှန်းတဲ့ အာဆီယံက ကန့်ကွက်တယ် ဆိုတာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မေလက အာဆီယံ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေညာချက်ကို ရည်ညွှန်းပုံရပါတယ်။ အဲဒီကြေညာချက်ထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတခု ဖြစ်တာနဲ့အညီ လူ့အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ဖို့နဲ့ မြှင့်တင်ဖို့ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာ အာဆီယံရဲ့ မူဖြစ်တဲ့ ပြည်တွင်းရေး ၀င်မစွက်ရ ဆိုတာကို ချိုးဖောက်တယ်ဆိုပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကနေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
အာဆီယံအဖွဲ့ အနေနဲ့ အစိုးရအချင်းချင်းသာ ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး အစိုးရတွေရဲ့ စကားသက်သက်ကိုသာ နားထောင်နေတာထက် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက လူထုတွေ ဘာလိုချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်ချင်တယ် ဆိုတာကိုလည်း နားထောင်ပြီးတော့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ပိုပြီး ထိရောက် အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လို့ ဦးခင်မောင်ဆွေက ပြောပါတယ်။
“အစိုးရချင်း ဆက်ဆံတာထက်စာရင် ပြည်သူချင်း ပြည်သူချင်း၊ ပြည်သူနဲ့ အာဆီယံနိုင်ငံ အစိုးရတွေနဲ့ ထိစပ်ပြီး ပြည်သူတွေ ဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာကို တကယ်တမ်း သိအောင်လုပ်ပြီး တကယ်တမ်း အချိန်တိုတိုတွင်းမှာ ထိရောက်တဲ့ ဖော်ဆောင်မှုတွေကို လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အကျိုးရလဒ်တွေ ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အနောက်ဘက်ကပြောတဲ့ Pressure တွေကို ဆန့်ကျင်မယ်၊ အာဆီယံ အသိုင်းအ၀ိုင်းက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ချဉ်းကပ်မှုပဲ လိုချင်တယ်ဆိုပြီး ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာပဲ အငြင်းအခုံ လုပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်နဲ့ အင်မတန် ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ အနေအထားက တက်မယ်လို့ ကျနော် မထင်မိပါဘူး။”
NLD သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေး တာဝန်ရှိသူတဦးဖြစ်တဲ့ ဦးခင်မောင်ဆွေ ပြောပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အာဆီယံအဖွဲ့ထဲက တချို့နိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာ့အရေးနဲ့ ပတ်သက်လာရင် တနိုင်ငံချင်း သီးခြားပြောဆိုတာနဲ့ တဖွဲ့လုံးအနေနဲ့ ပြောဆိုတာမှာ အမြဲလို ကွာခြားလေ့ရှိပါတယ်။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲက အင်ဒိုနီးရှား၊ မလေးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွေဟာ တနိုင်ငံချင်းအနေနဲ့ ပြောဆိုတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဝေဖန်ပြောဆိုတာတွေ ရှိတတ်ပေမယ့် အာဆီယံအဖွဲ့ အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အားလုံးလေသံအတိုင်းပဲ လိုက်ပြီးပြောဆိုကြပါတယ်။
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် အဘီဆစ် ၀တ်ချာချီဝဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီလကုန်မှာ သွားရောက်ဖို့ ရှိတယ်လို့ သိထားရပြီး ခရီးစဉ် အသေးစိတ်ကို နှစ်ဖက် အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနက ဗွီအိုအေကို ပြောထားဖူးပါတယ်။
အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ဖွဲ့ စည်းရေး မူကြမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေ ဒီကနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်အပန်းဖြေနေရာမှာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးတွေက အာဆီယံ ပဋိဥာဉ်နဲ့ အညီ ဖွဲ့စည်းရမယ့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တိုဘာမှာ ပြုလုပ်မယ့် အာဆီယံ နှစ်ပတ်လည် ထိပ်သီး ညီလာခံကျရင် အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ကို အပြီးသတ် အတည်ပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေမှာ လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေကို ထည့်တွက်ပြီး ဒီအဖွဲ့ကို အများ လက်ခံယုံကြည်တဲ့ အဖွဲ့ဖြစ်အောင် လုပ်ရေးဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး ကဆစ် ပီယွန်းက တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေးမူကြမ်းနဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို မြန်မာအပါအဝင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေက ကန့်ကွက်တာမျိုး မရှိဘူးလို့လဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ကဆစ်ကပြောပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်တဲ့ မှတ်တမ်းတွေအပြင် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတချို့က လူ့အခွင့်အရေး ဆိုင်ရာထောက်ပြမှုတွေရှိနေတာကြောင့် အာဆီယံကဖွဲ့မယ့် လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ အပေါ်မေးခွန်းထုတ်မှုတွေလဲ ရှိနေပါတယ်။
အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေအပြင် အမေရိကန် ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ရုရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ ဒီသတင်းပတ် နောက်ပိုင်း တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ လုံခြုံရေးကိစ္စ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲရေး ကိစ္စတွေအပါအဝင် ကျယ်ပြန့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တက်ရောက်သူများ တားမြစ်ပိတ်ပင်ခံရ
Sunday, 19 July 2009 00:00 ဉာဏ်မောင် .ယနေ့နံနက်ပိုင်းက အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား တက်ရောက်သူများကို စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ပိတ်ပင်ကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
(၆၂) နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အထိမ်းမှတ်အဖြစ် ဒေါ်နော်အုံးလှနှင့်အတူ လူသုံးဆယ်ခန့်သည် အာဇာနည်ကုန်းသို့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံပါသည့် တီရှပ်များဝတ်ဆင်ကာ လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြသောကြောင့် လုံခြုံရေးအဖွဲ့များက တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
"၂၅ ယောက်လောက်က အာဇာနည်ကုန်းတက်တယ်၊ ဝင်ခွင့်တော့ပေးတယ်၊ တော်တော် ဆိုးဆိုးရွားရွား ရှာဖွေတာတွေ လုပ်တယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်ပုံ၊ အန်တီပုံပါတဲ့ အင်္ကျီတွေကို လဲခိုင်းတယ်၊ သူတို့ စွပ်ကျယ်ပေးတယ်၊ ရိုးရိုးအင်္ကျီနဲ့လူတွေတော့ တက်ခွင့်ပေးတယ်" ဟု မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောသည်။
ယင်းကဲ့သို့ အာဏာပိုင်လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ တင်းကြပ်မှုကြောင့် ဒေါ်နော်အုံးလှနှင့် အခြားလူများမှာ အာဇာနည်ကုန်းပေါ်သို့ တက်ရောက်ခွင့်မရခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
"အင်္ကျီမလဲတဲ့ လူတွေတချို့ ပြန်လာတာတွေ ရှိတယ်၊ မနော်ဆို မတက်ဘူး၊ သူက ပန်းစည်းလည်း ပါတယ်၊ တက်သွားတဲ့ လူငယ်တွေက အပေါ်အဖြူ အောက်က ယောလုံချည်အနက်နဲ့" ဟု ပြောသည်။
နံနံက် (၁၀) နာရီ (၄၇) မိနစ်တွင် ဥသြဆွဲပြီး ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းမှတ်ဖြစ် တမိနစ်ငြိမ်သက်ခဲ့ကြပြီး အာဇာနည်းကုန်းအနီးတဝိုက်တွင် စစ်အစိုးရက လုံခြုံရေးများ အဆမတန် ချထားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ပေါ်တွင်လည်း လူငယ်အလုပ်သမားများက ထန်းလက်ဦးထုတ်များ တူညီဆောင်းပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်များကို သွားရောက်ခဲ့ကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို အလေးပြုခွင့်မရခဲ့ကြောင်း ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ခံက ပြောသည်။
"ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ပေါ်က မြို့မကျောင်းရှေ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ကို အလေးပြုဖို့သွားတဲ့အခါ အာဏာပိုင်တွေက ပိတ်ထားတယ်၊ လူငယ်တွေက စိတ်မကောင်းဖြစ်တာထက် ခံပြင်းနေကြတယ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်တွေ၊ စေတီကြီးဆီကိုတော့ သွားခဲ့တယ်" ဟု ပြောသည်။
ယနေ့သည် မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်အတူ အာဇာနည် ၉ ဦးကို မသမာသူ လူတစုက ဝင်ရောက်လုပ်ကြံ ပစ်ခတ်ခဲ့သည့် (၆၂) နှစ်မြောက်နေ့ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ (နအဖ)စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားများကို လွတ်လပ်စွာ ကျင်းပခွင့်မရပေ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သမီးဖြစ်သူ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း (နအဖ)စစ်ခေါင်းဆောင်များက မတရား အမှုဆင်တရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်ထားလျှက်ရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် “အမေ” သီချင်း
Monday, 20 July 2009 20:37 အေးလဲ့ .မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၆၄ နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အတွက် မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး (GW) က “ငါတို့ အမေ” အမည်ရှိ သီချင်းတပုဒ်ကို စတင် ဖြန့်ဝေလိုက် သည်။
GW အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော AK နှင့်9KT တို့က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အားပေး၊ ဂုဏ်ပြုသည့်အနေဖြင့် ၎င်းသီချင်းကို Hip Hop ပုံစံ ရေးစပ်၊ သီဆိုထားကာ အာဇာနည်နေ့တွင် စတင်ဖြန့်ဝေ လိုက်ကြောင်းသိရသည်။
9KT က “ဒေါ်စုကို အရမ်းလေးစားတယ်၊ အဲဒီအတွက် သူခွန်အားဖြစ်အောင်၊ သူကြားရင်လည်း လူငယ် အားလုံးက သူ့ကို လေးစားတယ်၊ အရမ်းယုံတယ် ဆိုတာ သိအောင် စပ်ဆိုထားတာပါ” ဟု ပြောသည်။
၎င်း သီချင်းထဲတွင် “အမေ အာဏာရှင်တွေလက်ထဲမှာ ရင်နင့်စွာ နေ့ပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်လို့ဂုဏ်ယူမယ့်နေ့၊ ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲဟာ တို့သမိုင်းပါ ကျနော့်သီချင်းများဟာ အမေ့အတွက်မို့အင်အားတခုပဲ .. ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ .. ကြေကွဲစရာ အမေ့စည်းရိုးမှာ နားစွင့်လို့ ပြန်လာမယ့်နေ့ ….” ဟု ရေးဖွဲ့ထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်များ အတွင်းမှ မိန့်ခွန်းတခုထဲတွင် ပါရှိ ခဲ့ဖူးသော “လူငယ်တွေရဲ့ အင်အားဟာ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးတယ်” ဆိုသည့် မူရင်းအသံကိုလည်း ထည့်သွင်းထား သည်။
“ရည်ရွယ်ချက်က ဒေါ်စု အကျဉ်းကျနေရာကနေ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်အောင်၊ ဒေါ်စုရဲ့ ရဲစွမ်းသတ္တိ နဲ့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အနေနဲ့ ရေးစပ်သီဆိုရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု GW မှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူ ကိုမိုဃ်းသွေးက ပြောသည်။
GW မှ ယခုကဲ့သို့ နိုင်ငံရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သီချင်းများကို ထုတ်လုပ် ဖြန့်ဝေလျှက်ရှိရာ “နိုးထလော့ အိုမြန်မာ” နှင့် “ကမ္ဘာမကြေဘူး” ဆိုသည့် သီချင်းများ အပါအဝင် ယခု အမေ သီချင်းက ၃ ပုဒ် မြောက်ဖြစ်သည်။
အခက်အခဲတချို့ကြောင့် ယခု သီချင်းကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လွန်ကာ တလခန့် နောက်ကျပြီးမှ ဖြန့်ဝေနိုင်ကြောင်းလည်း ၎င်းတို့အဖွဲ့က ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် မေလတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဒီပဲယင်း အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု အပြီးမှ စတင်၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ်ဖြင့် အထိန်းသိမ်းခံနေရသည့် ၆ နှစ်ပြည့်ခါနီးတွင် တရားစွဲဆို ခံနေရချိန် ဖြစ်သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှစ၍ နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ဘ၀ဖြင့် နေရချိန် စုစုပေါင်း ၁၃ နှစ်ကျော်ပြီ ဖြစ်သည်။
အစိုးရသစ်အတွက် ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိများကို စစ်တပ်မှ ကြိုတင်ခန့်အပ်
Monday, 20 July 2009 20:35 အောင်သက်ဝိုင်း .၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပေါ်ပေါက်လာမည့် အစိုးရသစ်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် သည့် အနေဖြင့် ၀န်ကြီး အဆင့်အောက် အစိုးရဝန်ထမ်း ရာထူးကြီးများနေရာတွင် အသက် ၅၀ ၀န်းကျင်အရွယ် စစ်အရာရှိကြီး များ ဖြင့် အစားထိုးရန် ညွှန်ကြားမှုများရှိနေသည်ဟု နေပြည်တော် အစိုးရ၀န်ထမ်း အသိုင်းအ၀န်းမှ သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အစိုးရသစ်တွင် ထိပ်ပိုင်းဝန်ကြီးနေရာများ အပြောင်းအလဲ ရှိမည် ဖြစ်သော်လည်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး အပါအ၀င် ရာထူးကြီးများအတွက်မူ ယခုကတည်းက ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး၊ ဗိုလ်မှူးကြီး များဖြင့် အစားထိုးပြီး ဆက်လက် အုပ်ချုပ်သွားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု နေပြည်တော်အစိုးရ၀န်ကြီး ဌာနတခုမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး တဦးက ပြောသည်။
“၀န်ကြီးဌာန ရာထူးကြီးတွေကို အရပ်ဝတ်လဲ တပ်အရာရှိတွေကိုပဲ ပေးတာပါ။ ဒါပေမယ့် အရင်က အသက်အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ အခုတော့ အသက် ၅၀ ကနေ ၅၅ နှစ်အကြားအရွယ် တပ်အရာရှိတွေပဲ ခန့်ဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ သိရတယ်”ဟု နေပြည်တော် အစိုးရ အရာရှိကြီးများနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဆိုသည်။
ယခုနှစ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အသက် ၆၀ ပြည့်သွားကြသည့် ၀န်ကြီးဌာန အရာရှိကြီးများကို သက်တမ်းတိုးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် မပြုတော့ဘဲ အငြိမ်းစား ပေးပြီး ၎င်းတို့နေရာတွင် ငယ်ရွယ်သော
စစ်တပ်အရာရှိကြီးများကို အရပ်ဝတ်လဲက ခန့်ထားသည်ဟု သိရသည်။
“ညွှန်ချုပ်၊ ဒုညွှန်ချုပ်နဲ့ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး တွေအပါအ၀င် ရာထူးကြီးတွေအတွက် အသက် ၅၀ ကျော် ပတ်ဝန်းကျင် တပ်အရာရှိတွေနဲ့ အစားထိုးတယ်။ တကယ်လို့ အရပ်သားထဲကပဲ ဒီလိုရာထူးကြီးတွေပေးမယ်
ဆိုရင်တောင်မှ အသက် ၅၀ ကျော်ဝန်းကျင်ကိုပဲပေးတယ်” ဟု နေပြည်တော်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးက ဆိုသည်။
ထိုကဲ့သို့ ညွှန်ကြားမှုမရှိခဲ့စဉ်က ရာထူးကြီးများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း အသက် ၆၀ ပြည့်သွားသော အစိုးရအရာရှိကြီးများသည် သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးများကို လာဘ်ပေးကန်တော့ပြီး ထိုရာထူးကြီး များတွင် အကြိမ်ကြိမ် သက်တမ်းတိုးကာ တာဝန်ဆက်လက်ယူကြလေ့ရှိကြောင်း သိရသည်။
“ရာထူးကြီးရထားတဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းဆိုတာက ပင်စင်ယူရမှာ အတော်ကြောက်တယ်။ ပင်စင်ယူဖို့ အသက် ပြည့်သွားရင် သက်ဆိုင်ရာဌာန ၀န်ကြီးတွေကို ကန်တော့ပြီး extension ယူကြတယ်။ အခုအဲဒီလိုမျိုး
မရဘူး။ ၀န်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်က အထက်ကညွှန်ကြားထားလို့ ဘယ်လိုမှ extension မပေးနိုင်ဘူး ဆိုပြီး ငြင်းတယ်” ဟု ဇွန်လအတွင်း အငြိမ်းစားယူခဲ့ရသည့် အစိုးရအရာရှိကြီးတဦးက ရှင်းပြသည်။
၀န်ကြီးဌာန ရာထူးကြီးများတွင် အသက် ၅၀ ကျော် ၀န်းကျင် စစ်တပ်အရာရှိကြီးများ အစားထိုးခန့် အပ်ခြင်း သည် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအရ ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အစိုးရသစ် အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား အဆင်ပြေစေရန် အတွက်ဖြစ်သည်ဟု ၀န်ကြီးများက ရှင်းလင်းပြောဆိုကြောင်းလည်း သိရသည်။
“နောင်အစိုးရသစ်တက်လာလည်း ၀န်ကြီးဌာနထိပ်တန်းရာထူးကြီးတွေ အများစုမှာ တပ်မတော်သား တွေကပဲ တာဝန်ယူထားမှာပါ” ဟု နေပြည်တော်အစိုးရ အရာထမ်းတဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရသည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ် အသွင်ပြောင်းမည်ဟုဆိုကာ လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်ကို ချမှတ်ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ၎င်းတို့ စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲထားသော အခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုခဲ့၍ လာမည့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန် ပြင်ဆင်လျက်ရှိသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကို ၆ နာရီ အလှည့်ကျနဲ့ လျှပ်စစ်မီးပေးနေ
Monday, 20 July 2009 20:30 အောင်သက်ဝိုင်း .ရန်ကုန်မြို့ကို လက်ရှိပေးဝေနေသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမနိုင်သောကြောင့် ယခုမိုးရာသီအတွင်း ၆ နာရီ အလှည့်ကျ မီးပေး၊ မီးဖြတ်စနစ်ဖြင့်ပေးမည်ဟု လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြောင်း သိရှိရ သည်။
“အခုထိ အုပ်စုခွဲမီးပေးစနစ်နဲ့ မီးဆက်ပေးဖို့ ညွှန်ကြားထားတယ်၊ ဘယ်တော့မှအပြည့်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာ မသိသေးပါဘူး”ဟု ရန်ကုန် လှိုင်မြို့နယ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့မှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
လျှပ်စစ်မီးအလှည့်ကျစနစ်ဖြင့်သာ ရရှိနေသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ခံများနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ နေ့စဉ် အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်ဟုသိရှိရသည်။
“မိုးတွင်းလည်း မီးအပြည့်မရဘူး၊ အလှည့်ကျပဲရတယ်၊ မီးမလာတော့ နေရေး၊ စားရေးအတော် ဒုက္ခရောက် တယ်၊ ညသန်းခေါင်ချိန် မီးလာမှရေတင်ရတဲ့ဒုက္ခကလည်း ခုထိမလွတ်နိုင်သေးဘူး၊ အရင်က မိုးတွင်းဆိုရင်
တနေကုန်မီးလာတယ်၊ ဒီနှစ်မရဘူးဆိုတော့ လူတွေလည်းစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဒေါသထွက်ကြတယ်” ဟု ရန်ကုန်မြို့တွင်းအထပ်မြင့်တိုက်ခန်းနှင့်နေထိုင်သူမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
အဓိကဓာတ်အားပေးဝေလျှက်ရှိသည့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ် လုပ်သည့်စက်ရုံများ ဖြစ်ကြသည့်လှော်ကား၊သာကေတ၊ရွာမ၊အလုံ စက်ရုံ စသည့် စက်ရုံလေးရုံအတွက် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပေးပို့နေသည့်ကမ်းလွန်ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများ မွန်ပြည်နယ် ဘီးလင်းချောင်းအတွင်းရေတိုက်စားမှု ကြောင့် ပျက်စီးသွားကြောင်း၊ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများမှဓာတ်အားပိုမိုရရှိနေသော်လည်း ဓာတ်ငွေ့သုံးစက်ရုံများ အပြည့်အ၀မလည်ပတ်နိုင်သည့် အတွက် ရန်ကုန်မြို့ကိုလျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့အရာရှိ တဦးက ဆိုသည်။
ပျက်စီးသွားသော သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းများကိုပြုပြင်ရမည့်အချိန်မှာလည်း လပေါင်းများစွာ ကြာမြင့်နိုင် ကြောင်းလည်း လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများက ပြောသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ကနွေရာသီ၊ဆောင်းရာသီများတွင် မီးအလှည့်ကျ စနစ်ဖြင့်ပေးပြီး မိုးရာသီအချိန်များတွင်နိုင်ငံတ၀န်းရှိရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများ၌ ရေရရှိမှု တိုးမြင့် လာသောကြောင့် ဓာတ်အားပိုမို ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်ရန်ကုန်တမြို့လုံးကို ယခုထက်ပို၍ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးလေ့ရှိသည်။
ရန်ကုန်တမြို့လုံးကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအပြည့်အ၀မပေးနိုင်ခြင်းမှာဓာတ်အားပေးစက်ရုံများမှ ပေးပို့လိုက် သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား များကိုအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားမြို့တော်သစ် နေပြည်တော်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသများကိုအဓိက ပေးပို့ပြီး ထိုနေရာများတွင် ၂၄နာရီမီးပေးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည် ဟုလည်း သိရှိရ သည်။
“နေပြည်တော်မှာက မီးကထိန်ထိန်ညီးပဲ၊ မီးလုံးဝမပျက်ဘူး၊ လူနေအိမ်ခြေနဲ့ဝေးတဲ့ကားလမ်းမကြီးတွေ ကိုတောင် တညလုံး မီးထွန်းထားတယ်”ဟု နေပြည်တော်ရှိ အစိုးရ၀န်ထမ်း တဦးက ဆိုသည်။
သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းပျက်သည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့ကို လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမပေး နိုင်ခြင်း ဖြစ် သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသော်လည်းမီးအပြည့်ရရှိသော နေပြည်တော်သို့ လူအများပြောင်းရွှေ့မှုနေထိုင်မှု များပြား လာ ရန်ရည်ရွယ်၍ ရန်ကုန်မြို့ကိုမီးဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်းပြည်သူများအကြား ဝေဖန် ပြောဆိုနေကြသည်။
“ဒါသက်သက်ညစ်တာ၊ ရန်ကုန်ကို မီးပေးနိုင်ရက်နဲ့ နေပြည်တော်ကို လူတွေပြောင်းရွှေ့နေချင် လာအောင် ရန်ကုန်မီးဖျက်ထားတာ၊ တမင်လုပ်တာ”ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနက မြစ်ချောင်းများကိုဖြတ်ပြီး ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံများ တည်ဆောက် ကာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးတက်ထုတ်လုပ်နေသော်လည်း အဆိုပါလျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများ စုကို အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းချရန်ဖြစ်သည်ဟု ထိုဝန်ကြီးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတဦးက ပြောသည်။
အမှတ် (၁) လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင်ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံ ၁၅ ရုံ လည်ပတ်နေပြီး ဓာတ်အား ၁၄၄၁ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နေကြောင်း၊လာမည့် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းခြောက်ခုပြီးစီးမည်ဖြစ်ပြီး ဓာတ်အား ၁၂၁၉ မဂ္ဂါဝပ် ထပ်မံထုတ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟု ထိုဝန်ကြီး ဌာန ၏ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရသည်။
အမှတ်(၂) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်တွင်လည်း ရေနွေးငွေ့နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့သုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ ၁၅ ရုံလည်ပတ်နေပြီး ဓာတ်အား ၇၂၃.၆၂ မဂ္ဂါဝပ် ထုတ်လုပ်နေသည်ဟု အစိုးရ စာရင်းဇယားများက ဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်မှာ ဓာတ်အား ၅၀၀ မဂ္ဂါဝပ် နီးပါးရှိပြီး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာဖြင့် ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်သည်မဂ္ဂါဝပ် ၁၀၀၀ ဖြစ်သည်ဟု လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနများ၏
မြန်မာငွေ နှင့် လဲလှယ်ရာတွင် ဘတ်ငွေဈေး နှုန်းကျ
၂၀ ဇူလိုင် မဲဆောက် ၊ ၊ယူကွန်
Thai – Burma Currency Exchange May Not Stable
ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ပို့ ကုန်၊သွင်းကုန်များကျဆင်းနေချိန်တွင် ကျင်းပသည့် ဖူးခက်အာဆီယံအစည်းအဝေး
ကော့ကရိတ်-မြ၀တီ လမ်းကြောင်းတွင် မိုးအဆက်မပြတ်ရွာသွန်းမှုများကြောင့် ရေကြီးမြေပြိုမှုများ
နှင့် တံတားများခိုင်ခံ့မှု အားနည်းသည့် အတွက် ထိုင်း ကုန်စည်များကို တင်သွင်းဝယ်ယူမှု နည်းလာသဖြင့် မဲဆောက် ရှိ ထိုင်း-မြန်မာငွေ လဲလှယ် သည့် နေရာများတွင် ဘတ်ဈေးနှုန်းမှာ တစ်ဘတ်လျှင်မြန်မာငွေ ၂၉ ကျပ်ပြား ၉၀ သာပေါက်ဈေးရှိတော့ သည် ဟု သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ငါးရက်ခန့် က သုံးဆယ့် နှစ်ကျပ်ထိ ပေါက်ဈေးရှိခဲ့ပြီး ဇွန်လနှောင်းပိုင်းက ၃၃ ကျပ်ထိဈေးမြင့် တက်သွားသေးသည်။မြန်မာငွေ နှင့် လဲလှယ်ရာတွင် ဘတ်ငွေဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုကြောင့်ထိုင်းဝယ်လက် မြန်မာ ကုန်သည် များမှာ အဆင်ပြေကြသော်လည်း လမ်းခရီး မကောင်းမှု ကြောင့်ကုန်စည် များကို ရန်ကုန် သို့ တင်ပို့ ရာတွင် ခရီးစရိတ် ပိုမိုကုန်ကျသည် ဟုသိရသည်။
ရန်ကုန် နှင့် မဲဆောက် ကုန်စည်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတစ်ဦးက “ဘတ်ဈေးကျပေမယ့် မပျော်နိုင်ဘူးဆရာ ဒီမှာ တံတားတွေ ကတချို့ နေရာတွေ ဆို ကယ်ရီနဲ့ ခွဲသယ်ရတော့ ပိုပြီးကုန်ကျတယ် ဟု Freedom News Group သို့ ပြောသည်။အမေရိကန် တစ်ဒေါ်လာလျှင် ထိုင်းဘတ် ငွေ ၃၄.၀၁ ဈေးပေါက်သည်။
နေပြည်တော်တွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အသုံးပြုမှုပမာဏ များပြားလာသောကြောင့် ရန်ကုန်ဧရိယာတွင် ယခင်ကဲ့သို့ လျှပ်စစ်မီး ပုံမှန်မပေးနိုင်တော့ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ (YESB) မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ခါတိုင်းနှစ်တွေလို လျှပ်စစ်မီး မှန်မှန် မပေးနိုင်သေးတာ၊ ပင်မဓာတ်အားလိုင်းကနေ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်မရတာက နေပြည်တော်မှာ အသုံးများလာလို့၊ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်ကနဲ့စာရင် ခုဆို နေပြည်တော်ဧရိယာရဲ့လျှပ်စစ်အသုံးပမာဏ တဆခွဲလောက် တိုးလာတယ်။ အသစ်ဆောက်ပြီးတဲ့ အဆောက်အဦတွေမှာ (၂၄) နာရီ အဲကွန်းပေးထားတာ၊ ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွေဆိုရင်လည်း မီတာခ မပေးရတော့ မီးကို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲနေတာ။ အဲဒါတွေကြောင့် ခုတော့ နေပြည်တော် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာတွေကို မီတာခ ကောက်ဖို့ စလုပ်နေပြီ။ ရန်ကုန်ကို ဘယ်တော့ (၂၄) နာရီ လျှပ်စစ်မီးပေးနိုင်မလဲ မပြောနိုင်သေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
၂ဝဝ၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်တွင် ရန်ကုန်မြို့လယ်နှင့် ဧရိယာအချို့ကို (၂၄) နာရီ မီးအပြည့်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ၂ဝဝ၈ မေလတွင် နာဂစ်ကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးတိုင်များ အားလုံးပြိုလဲခဲ့သော်လည်း ယင်းအချိန်က ဓာတ်အားလိုင်းများ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး သည့် ဧရိယာများကို (၂၄) နာရီ အပြည့်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ သို့သော် ယခုနှစ်တွင် မိုးတွင်းရောက်နေသော်လည်း ရန်ကုန်ကို လာသည့် ပင်မဓာတ်အားလိုင်းတွင် လျှစ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်မရရှိခြင်းကြောင့် မီးမှန်မှန်မပေးနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ရန်ကုန်တွင် လျှပ်စစ်မီး (၂၄) နာရီ မရသည့်ကိစ္စကို သက်ဆိုင်ရာ လျှပ်စစ်ရုံးအသီးသီးကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် အချို့ရုံးများက ပြင်ဆင်နေကြောင်း၊ အချို့ရုံးများက မသိပါကြောင်း၊ အချို့ရုံးများက သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း ပြင်ဆင်နေ သောကြောင့် ပြီးစီးသွားပါက ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့် ဖြေကြားကြသည်ဟု ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ရန်ကုန်စာနယ်ဇင်းများတွင်မူ “မိုးတွေမှန်လာပြီ။ ပြည်သူတွေ လျှပ်စစ်မီး မှန်မှန်ရဖို့ မျှော်နေကြပြီ။ ဇူလိုင်လအတွင်း လျှပ်စစ်မီး မှန်မှန်ရတော့မယ်” စသဖြင့် ရေးသားဖော်ပြနေသည်ကို တွေ့ရသည်။
လက်ရှိ ရန်ကုန်မြို့တွင်း လျှပ်စစ်မီးပေးစနစ်သည် ၂ဝဝ၆ နိုဝင်ဘာက စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်း တနေ့တာ အချိန်ကို (၄) ပိုင်း ပိုင်းပြီး အုပ်စု (၃) စုခွဲ မီးပေးသည့်စနစ်ကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေဆဲ ဖြစ်သည်။
အဆိုပါစနစ်အရ မနက် (၉) နာရီမှ ညနေ (၅) နာရီ ရုံးချိန်အတွင်း တရက်လျှင် ပျမ်းမျှ (၂) နာရီ (၄၅) မိနစ်ခန့်သာ မီးရရှိပြီး (၃ဝ) ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ ရှိသည့်အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများ၊ လျှပ်စစ်မီး လိုအပ်သူများသည် မီးစက်များကို ငွေကုန်ကြေးကျများစွာ အကုန်ကျခံကာ သုံးစွဲနေကြရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများအနက် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည့် ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည် စက်တပ်ဆင်အား (၂၈ဝ) မဂ္ဂါဝပ်ရှိပြီး ၎င်းမှထွက်သည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအများစုကို နေပြည်တော် ဧရိယာက အသုံးပြုနေသည်ဟု YESB မှ တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့ကို အဓိက ပေးပို့နေသည့် ဘီလူးချောင်း (၁) နှင့် (၂) နှစ်ခုပေါင်း စက်တပ်ဆင်အားသည် မဂ္ဂါဝပ် (၁၉၆) သာရှိပြီး မကြာခဏစက်များ ပျက်နေသောကြောင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အပြည့်အဝ ထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲ မကြာခင်က ပြီးစီးခဲ့သည့် စက်တပ်ဆင်အား မဂ္ဂါဝပ် (၅ဝဝ) ရှိ ရွှေလီ ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံသည်လည်း အပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
နောက်ထပ် ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ တည်ဆောက်နေသည့် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများမှ ထွက်ရှိလာမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများကိုလည်း ထိုင်းနှင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့ ရောင်းချရန် စာချုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
နအဖစစ်အစိုးရကမူ ဓာတ်ခဲအဟောင်းနှင့် နွားချေး၊ ဆား ရောနယ်ထားသည့် သဘာဝဘက်ထရီနှင့် အယ်လ်အီးဒီ မီးသီး အငယ်လေးများ အသုံးပြုကြရန် တနိုင်ငံလုံးကို လှုံ့ဆော်လျက်ရှိသည်။
ယခုကဲ့သို့ လျှပ်စစ်မီး မှန်မှန် မရသည့်အတွက် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများစွာ ဆုံးရှုံးရသကဲ့သို့ မြန်မာစက်မှုနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အားလုံးနီးပါးသည် ဒေသတွင်း၌ ပြိုင်ဆိုင်မှုလည်း မပြုနိုင်ကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ တာ့ခ်ခရိုင် ထာ့ဆောင်ရမ်းမြို့နယ် နောင်ဘိုးရွာ ယာယီခိုလှုံခွင့်စခန်းတွင် ကူညီနေသူတဦးက “ဒီနေရာကို ပြောင်းရွှေ့လာတာ အိမ်ခြေ (၃၀၇) လုံးရှိတယ်။ လူဦးရေကတော့ နောက်တိုးစာရင်း အပါအ၀င် (၁,၈၀၀) ခန့်ရှိတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ကလေးငယ်တွေက (၃၅၀) လောက်ရှိတယ်။ သူတို့ စာသင်ဖို့ ကျောင်းဆောင်တခုဆောက်ဖို့ ခွင့်တောင်းတာကို ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေက ခွင့်မပြုဘူး။ အဲဒီအတွက် ကျနော်တို့ထပ်ပြီးတော့ မေတ္တာရပ်ခံထားတယ်။ ဒီနေ့အထိတော့ ဘာမှအကြောင်းမပြန်သေးဘူး” ဟု ပြောသည်။
နောင်ဘိုးရွာ ဒေသခံတဦးကလည်း “ကလေးတွေ စာသင်မယ့်ကိစ္စကိုတော့ ခွင့်ပြုဖို့သင့်တယ်။ ကလေးတွေ စာမသင်ဘဲ ဒီလိုပဲ လိုက်သွားနေမယ်ဆိုရင် ကြာလာရင် ကလေးတွေ စိတ်လေသွားနိုင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ကျောင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်ရရှိပါက လိုအပ်သည့် ကျောင်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် စာရေးကိရိယာများကို အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများက ပံ့ပိုးပေးသွားရန် အရန်သင့်ရှိသည်ဟု နယ်စပ်အခြေစိုက် ဒုက္ခသည်များ၏ပညာရေးကို ကူညီမှုပေးနေသည့် အဖွဲ့တခုမှ တာဝန်ခံတဦးက ပြောသည်။
နောင်ဘိုးရွာ ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းမှ ဒုက္ခသည်များ၏ နေထိုင်စားသောက်ရေးကို ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်တလျှောက် ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးညွန့်ပေါင်းအသင်း (TBBC) အပါအ၀င် အခြားအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများက ကူညီပေးလျက်ရှိပြီး ယာယီစခန်း မြေနေရာအား နောင်ဘိုးရွာမှ မြေပိုင်ရှင်တဦးက နေထိုင်ခွင့်ပေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏အကူအညီဖြင့် နောင်ဘိုးရွာ ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းကို ဒုက္ခသည်များကိုယ်တိုင် ဆောက်လုပ်နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဒေသခံထိုင်းအာဏာပိုင်များဘက်မှ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရသည်။
ထိုးစစ်ကြောင့် ထိုင်းဘက်ထွက်ပြေးလာသည့် ကရင်ရွာသား (၄,၀၀၀) ခန့်ကို ထာ့ဆောင်ရမ်းမြို့နယ်ရှိ နောင်ဘိုး၊ အူးသူးထာ့၊ မဲ့စလေ စသည့်နေရာ (၃) ခုတွင် ထိုင်းဘက်မှ ယာယီခိုလှုံခွင့်စခန်း (၃) ခုဖွင့်ကာ လက်ခံထားပြီး ၎င်းဒုက္ခသည်များထဲတွင် သုံးပုံတပုံမှာ အရွယ်မရောက်သေးသည့် ကလေးသူငယ်များ ဖြစ်သည်။
၎င်းက “အထင်ကရဖြစ်တဲ့ နေ့ကို ရွေးလိုက်တာပါ။ အာဇာနည်နေ့မှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့အတွက် မှတ်ရတာလည်း လွယ်သွားမယ် လေ။ သုခဆေးခန်းကို သင်္ဃန်းကျွန်းမှာ ဖွင့်တုန်းကလည်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးနေ့မှာ ဖွင့်ခဲ့တာလေ။ အခုလည်း အာဇာနည်နေ့က တနင်္ဂနွေနေ့လည်းကျနေတော့ ရုံးပိတ်ရက် ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ လုပ်ချင်တာနဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်သွားတယ်” ဟု ပြောသည်။
မြောက်ဒဂုံရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်းပိုင် မြေ (၂) ဧကကျော်ပေါ်တွင် ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ဝန်းကျင်ကုန်ကျသည့် နှစ်ထပ်ဆေးခန်း တခုသာ တည်ဆောက်နိုင်သေးပြီး နာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးခန်း၊ လူနာနားနေဆောင်နှင့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပြုပြင်ခန်းများတည်ဆောက် ရန် ကျန်ရှိနေသည်။
“ဒီအဆောက်အဦက ပိုင်ရိုက်ပြီးဆောက်ခဲ့ရတာ။ ကျနော်တို့ ရထားတဲ့နေရာက အရင်က အမှိုက်ပုံကြီးဆိုတော့ ပေ (၂၀) တူးလည်း မြေသားကို မတွေ့သေးဘူး။ ပလတ်စတစ်အိတ်တွေချည်းပဲ။ နောက်ဆုံး ပိုင်ရိုက်ပြီး ဆောက်လိုက်ရတဲ့အတွက် ကုန်ကျစရိတ်က ပိုများသွားတယ်” ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
အောက်ခံမြေသားမရှိသည့်အတွက် အရိပ်ရပင်စိုက်ပျိုးမှုလည်း မအောင်မြင်သေးပေ။ လောလောဆယ်တွင် အမှိုက်ပုံပေါ် သဲဖြူခင်းက လူသွားလမ်းလုပ်ထားရသဖြင့် နောင်တွင် သန့်ရှင်းမှုရှိစေရန် လူနာနားနေဆောင်၊ အသင်းရုံးခန်းနှင့် သုခဆေးခန်း တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးမည့် ကွန်ကရစ်လူသွားလမ်းတခုလည်း ဆောက်လုပ်ရန်လိုသည်ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
“အလှူရှင်တွေအနေနဲ့ကတော့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းဖို့ နည်းနည်တော့ လှမ်းသွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အခုဒီဘက်မှာ ရန်ကုန်ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်ဆိုတော့ လူနာပိုများမယ်။ နွမ်းပါးတဲ့လူနာတွေအတွက်တော့ ပိုအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့” ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
မြောက်ဒဂုံရှိ သုခဆေးခန်းသည် မီးလိုင်းတလိုင်းသာရရှိထားကာ မီးပျက်မှုများသည့်အတွက် မီးစက်ကိုသာ အားထားနေရ ကြောင်း၊ ရေရရှိမှုမှာလည်း အ၀ီစိတွင်းကိုသာ အားပြုနေရပြီး အစိုးရပိုက်လိုင်း ရေသွယ်တန်းနုိုင်ရေး အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရကြောင်း သိရသည်။
“အသင်းရုံးရှေ့မှာရှိတဲ့ ပိုက်လိုင်းကနေ သွယ်ခွင့်ပြုဖို့လျှောက်တာ စည်ပင်က မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။ ကိုက်နှစ်ထောင်ကျော် လောက်မှာရှိတဲ့ ကြံ့ခိုင်ရေးက ကန်ထရိုက်ယူထားတဲ့ ပိုက်လိုင်းကနေ ကြံ့ခိုင်ရေးကို အလှူငွေပေးပြီး ယူရင်တော့ ရမယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလောက်အဝေးကြီးကနေယူရင် ရေအားမကောင်းနိုင်ဘူး” ဟု ဦးကျော်သူက ရှင်းလင်းပြောဆိုသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ၂၀၀၁ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် စာရေးဆရာ၊ ဒါရိုက်တာကြီး ဦးသုခ၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူတို့ ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့ကြပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် မတ်လတွင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် ပါရဂူဘွဲ့ရဆရာဝန်ကြီးများအပါအ၀င် ဆရာဝန် (၃၀) ခန့်က အခမဲ့ပညာအလှူပြု ကုသပေးလျက်ရှိသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းပိုင်နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များကို ရေဝေးသုသာန်တွင် စည်ပင်သာယာအား မြေငှားရမ်းခ တလကျပ် (၁) သောင်း ပေးကာ ကိုယ်ပိုင်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်၍ ထားရှိရသည်။ ရေဝေးကားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင် ဖုန်းတလုံးတပ်ဆင်ထား သော်လည်း မကြာခဏဖုန်းကြိုးဖြုတ်ခိုးခံနေရကြောင်း ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
“အဲလိုဖုန်းကြိုးတောင် အခိုးခံနေရတော့ ကားတွေလုံခြုံရေးကို ပိုဂရုစိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ ကားစခန်းညစောင့်အတွက်ကို လူ (၃) ယောက် ငှားထားရတယ်။ ဒီကြားထဲ ထိန်ပင်သုသာန်မှာပါ ကားတွေခွဲထားရမယ်ဆိုပြီး စည်ပင်က စာပို့တယ်။ ကျနော်တို့ အဲလောက်ကြီးတော့ မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။ အဆောက်အဦဆောက်ဖို့၊ လုံခြုံရေးချဖို့ ကိစ္စတွေက အများကြီး ၀န်ကြီးတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲကို လာမည့်သြဂုတ် (၂) ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ရန်ကုန်မြို့၏ ရပ်ကွက်များအတွင်း ရယကများက လုပ်ငန်းရှင်များထံမှ အလှူခံနေကြောင်း သိရသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်အတွင်း ရပ်ကွက် (၁၃) ခုရှိရာ ပြီးခဲ့သည့် ဇူလိုင် ဒုတိယအပတ်က မြို့နယ် မယက ဥက္ကဋ္ဌမှ ရယက ဥက္ကဋ္ဌများကို ခေါ်ယူကာ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းကိစ္စ ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ မြို့နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်(ကြီး)များ မဖြစ်မနေ တက်ရောက်ရပြီး ၎င်းတို့ထံမှ ဦးစွာ အလှူငွေကောက်ခံခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်တို့နှင့် မဆက်ဆံ၍ မဖြစ်သော လက်ရှိအခြေအနေတွင် လုပ်ငန်းရှင်များမှာ သဒ္ဒါကြေးထက်မကသော အလှူငွေများ ထည့်ဝင်ကြရကြောင်း အလှူငွေ ကျပ် (၅) သိန်း ထည့်ဝင်ခဲ့ရသည့် (၈) ရပ်ကွက်၊ စက်မှုဇုန်မှ လုပ်ငန်းရှင်တဦးက ပြောသည်။
ရပ်ကွက်လုပ်ငန်းရှင် (ငယ်) များအား ကမ်းသောစာအိတ်ပေါ်၌ ဆွမ်းဆန်စိမ်းအလှူတော်ငွေ ကောက်ခံခြင်း (၂.၈.၂၀၀၉)၊ “လာဘမုနိဓမ္မာရုံ” ဟု ပါရှိကာ “တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲ” ဟု ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။
အထက်ပါအတိုင်း ခေါင်းစဉ်တပ်ဖော်ပြပါက သဒ္ဒါကြေးပင် မည်သူမျှ ထည့်ဝင်ကြမည်မဟုတ်ဟု ရယကအဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
လုပ်ငန်းရှင်တဦးက “သံဃာတော်တွေကို လှူမယ့်တန်းမယ့်ကိစ္စ လူတိုင်းသဒ္ဒါကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မှန်မှန်ကန်ကန်ခေါင်းစဉ် မတပ်ရဲတာတော့ သူတို့ရဲ့ မရိုးသားမှုဘဲ” ဟု ပြောဆိုသည်။
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ (၁၂) ရပ်ကွက်၊ ရယက ဥက္ကဋ္ဌမှ အဆိုပါကိစ္စအား ရာအိမ်မှူးများကို ခေါ်ယူဆွေးနွေးကာ ဇွန်လ (၁၈) ရက်နေ့မှ စတင်အလှူငွေ ကောက်ခံစေခဲ့သည်။ ရပ်ကွက်အတွင်း ရာအိမ်မှူးအပိုင် (၁၇) စုရှိရာ တစုလျှင် အလှူငွေ (၁၀,၀၀၀) ကျပ်၊ စာအိတ်ဖိုး (၅၀၀) ကျပ်နှင့် စုစုပေါင်း (၁၀,၅၀၀) ကျပ် ပြည့်မီအောင် ကောက်ခံရန် စေခိုင်းခဲ့သည်။
အလှူငွေများကို ဇွန် (၂၃) ရက်နေ့အပြီး အပ်နှံရမည်ဖြစ်ပြီး သတ်မှတ်အလှူငွေထက်ကျော်လွန်ပါက ရာအိမ်မှူးများ သုံးစွဲခွင့်ရှိသည်ဟု သိရသည်။
အလှူငွေများကို ရယက ဥက္ကဋ္ဌများမှ မြို့နယ် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ထိုမှခရိုင်၊ ထိုမှတိုင်း အဆင့်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကောက်ခံရရှိငွေအပေါ် အသေးစိတ်စာရင်းရှင်းတမ်း တင်ပြနေစရာမလိုသည့်အတွက် နိုင်ငံတော်အဆင့် အထက်ပါ အလှူအတန်းမျိုးကို အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းက လွန်စွာလိုလားပြီး ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးငယ်တို့မှာ များစွာ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြ သည်။
တိုင်းအေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီမှ ၎င်းတို့လိုလားသော ကျောင်းတိုက်ကြီးများ၊ ဓမ္မာရုံများသို့ သံဃာတော်များအား ပင့်ဖိတ်လှူဒါန်းလေ့ရှိရာ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ဥက္ကလာပစေတီ (၇- ဆူဘုရား) ၀င်းအတွင်းရှိ လာဘမုနိဓမ္မာရုံလည်း တခုအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ အလှူငွေကောက်ခံခြင်းအား သိရှိခြင်း ရှိ မရှိ လာဘမုနိဓမ္မာရုံသို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ဆွမ်းဆန်စိမ်းလောင်းလှူပွဲဆိုတာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ ဘယ်နေ့ကျင်းပမည်ဆိုသည်ကို အတိအကျ မသိရသေးကြောင်းနှင့် အသေးစိတ်သိရှိလိုက မယကသို့ ဆက်သွယ်ရန် အတည်ပြုပြောကြားသည်။
နအဖရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို မထောက်ခံကြောင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာ နအဖစစ်အစိုးရနဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့ရဲ့ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာနှင့် ခေတ်ပြိုင်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။
မေး။ ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ နအဖနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလအတွင်း ပါတီနဲ့ ပြည်သူလူထုအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ နအဖနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတွေအတွင်းမှာ ပါတီအတွက် ရရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေကတော့ စစ်မတိုက်ရလို့ ထိခိုက်သေကျေမှု နည်းပါးလာတယ်။ အေးအေးချမ်းချမ်း သွားလာအိပ်စက် နားနေခွင့်တွေရတယ်။ အတွင်းပိုင်းမှာရှိတဲ့ မိမိတို့ မွန်အမျိုးသားပြည်သူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခွင့် အချို့လုပ်ငန်းမှာ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခွင့်တွေ ရခဲ့တယ်။
ပါတီအတွက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကတော့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ တပ်ပေါင်းစု၊ တိုင်းရင်းသား တွေနဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ စုပေါင်းထားတဲ့ တပ်ပေါင်းစုတွေ ပြန့်ကျဲအားနည်းသွားရတယ်။ ဒါဟာ ကျနော်တို့ပါတီကိုရော၊ တော်လှန်ရေးတရပ်လုံးကိုပါ ထိခိုက်သွားစေတယ်။ ပါတီခေါင်းဆောင်အချို့၊ ပါတီဝင်နဲ့ ရဲဘော်အချို့တွေထဲမှာ တော်လှန်ရေး စိတ်ဓာတ်တွေ ယိုယွင်းပျက်စီးသွားစေတယ်။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို မကြိုက်လို့ ပါတီနဲ့တပ်မတော်ကနေ ခွဲထွက်ပြီး သီးခြားအဖွဲ့ ထောင်သွားတာတွေလည်း ရှိခဲ့တယ်။
ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးဖြစ်စေတာတွေကတော့ မိမိနယ်မြေဒေသအတွင်းမှာ တိုက်ပွဲတွေမရှိတော့ အေးအေးချမ်းချမ်း နေထိုင်ခွင့်တွေ ရခဲ့တယ်။ ယခင်လို ပေါ်တာလိုက်ရတာမျိုး၊ သူပုန်အားပေးဆိုပြီး ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံရတာမျိုးကနေ သက်သာ ကင်းလွတ်သွားရတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို အေးအေးချမ်းချမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့်ရလာတော့ စီးပွားရေးအခြေအနေ အထိုက်အလျောက် ကောင်းမွန်တိုးတက်လာတယ်။ အချို့နယ်မြေဒေသတွေမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ကောင်းလာပြီး သွားရေးလာရေး အဆင်ပြေလာတယ်။ ကျေးရွာတွေ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာတယ်။
ပြည်သူတွေ နစ်နာရတာတွေက တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့တွေ တိုးချလာလို့ လယ်ယာခြံမြေတွေ ဧကများစွာ သိမ်းဆည်းခြင်း ခံလိုက်ရ တယ်။ တပ်စခန်းသစ် ဆောက်လုပ်ရာမှာ အဓမ္မလုပ်အားပေးရတာတွေရှိတယ်။ နအဖရဲ့ စစ်တပ်သြဇာ၊ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သြဇာ တွေ ပိုမိုလွှမ်းမိုးကျယ်ပြန့်လာလို့ ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေ ပိုမိုထိတွေ့ခံစားလာရတယ်။ ဒါတွေဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရဲ့ သိသာတဲ့ ပါတီနဲ့ ပြည်သူအပေါ် သက်ရောက်မှုတွေပဲ။
မေး။ ။ ဒီ ၂၀၀၉ ခု ဇွန်လကုန်ပြီးရင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သက်တမ်း ကုန်ဆုံးပြီလို့ နအဖက ထုတ်ပြောနေတဲ့အပေါ် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ ဘယ်လိုနားလည်ထားပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးအပေါ် ကျနော်တို့ နားလည်ခံယူတာက မပြေလည်တဲ့ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေကို စစ်ရေးနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းလာခဲ့တာ နှစ်တွေ ကြာခဲ့ပေမယ့် ပြေလည်စရာအကြောင်းမမြင်၊ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေက များလွန်းလို့ နည်းနာအသစ်နဲ့ အပစ်ရပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြေရှင်းဖို့ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့က ဒါကိုလိုလားပြီ အပစ်ရပ်ခဲ့တယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး နိုင်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ ဒါကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး ရှောင်ခဲ့တယ်။ ဒါထက်ပိုပြီး အချို့အဖွဲ့အတွင်းရေးကိစ္စမှာ ဝင်စွက်တာ၊ စစ်အင်အားသုံးပြီး ချေမှုန်းခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ အားနည်းလာတဲ့ အဖွဲ့တချို့ကိုလည်း လက်နက်သိမ်းတာတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အခု နောက်ဆုံး အပစ်ရပ်အဖွဲ့အားလုံးကို တပ်အပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ပြောလာနေတယ်။ ဒါတွေဟာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးရဲ့ ဦးတည်ချက်တွေကို သွေဖည်ပြီး တရားလက်လွတ်လုပ်တာပဲ။ ဒီလိုတရားမစောင့်ရင် သမိုင်းကြောင်း ညစ်ထေးပြီး နောင်ကို နိုင်ငံရေးအရ ဖြေရှင်းဖို့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပိတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ နအဖအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေး အဖြေရှာတာ လုံးဝမလုပ်တော့ဘူး။ ယခင်က ပြောခဲ့ဖူးသလို နောက်တက်လာမယ့် ရွေးကောက်ခံအစိုးရနဲ့လည်း ဆွေးနွေးဖို့ မရှိတော့ဘူးလား။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဖျက်သိမ်းချင်ရင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပါလို့ ပြောချင်တယ်။
မေး။ ။ အပစ်ရပ်ကြတုန်းက သဘောတူညီချက်တွေထဲမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းဖို့ မပါဘူးလို့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ပြောတာ ကြားရပါတယ်။ ဟုတ်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ မှန်ပါတယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရေးကိစ္စ လုံးဝမပါခဲ့ဘူး။ ဒါက အခုမှပေါ်လာတဲ့ သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်ပါ။
မေး။ ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေးကိစ္စကို ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလိုဆုံးဖြတ်ရတယ်ဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်တို့ပါတီအတွင်းမှာ ကြိုတင်ချမှတ်ထားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေ မဖြေရှင်းနိုင်ခင်မှာ ပါတီကို ဖျက်တာ၊ တပ်ကို ဖျက်တာ၊ ပါတီနဲ့တပ်ကို ခွဲခြားပစ်တာ ဒါတွေကို လက်မခံ နိုင်ဘူး။ ဒါတွေရှိနေတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်နိုင်ဖို့ တပ်ကို အပ်ရမယ်ဆိုတာ ပါတီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ငြိစွန်းနေတာက တကြောင်း၊
အမျိုးသားညီလာခံမှာ ကျနော်တို့ပါတီအပါအဝင် အပစ်ရပ် (၁၃) ဖွဲ့က တင်ပြတဲ့အချက်တွေကို တချက်မှ လက်မခံပယ်ချခဲ့လို့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရာမှာ ကျနော်တို့ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထား လုံးဝ မပါတော့ပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့ လက်မခံနိုင်တဲ့အချက်တွေ အများကြီး ပါဝင်နေတယ်။ ဒါတွေကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြုပြင်ခြင်း မရှိဘူးဆိုရင် ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကျနော်တို့ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
မေး။ ။ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းဖို့ နအဖက မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ဖိအားပေးတာတွေ ရှိခဲ့ပါသလား။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ခေါ်ပြီး ဆွေးနွေးပြောပြခဲ့တာ ရှိပါတယ်။ အခြားအဖွဲ့တွေ လက်မခံသလို ကျနော်တို့ပါတီ လက်မခံနိုင်မှန်း သိလို့ နောက်ထပ် ခေါ်တွေ့ပြီး ပြည်သူ့စစ်အသွင်ကို လက်ခံမလား ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုအဆင့်မျိုး ဖြစ်ချင်လဲဆိုပြီး မေးလာတာရှိပါတယ်။ ဒီလိုနှုတ်နဲ့ ခေါ်ပြောတာအပြင် အခြားသိသာတဲ့ဖိအားတွေ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
မေး။ ။ တကယ်လို့ တခြားအပစ်ရပ်အဖွဲ့ကြီးတွေ ဥပမာ ဝတို့၊ ကေအိုင်အိုတို့က နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းမယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ်ဆိုရင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ ရှေ့ဆက်ရပ်တည်ချက်အပေါ် တစုံတရာ သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါသလား။
ဖြေ။ ။ အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေရဲ့ ကံကြမ္မာတွေဟာ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ကိစ္စရပ်တခုခုမှာ အဖွဲ့အများစုက လက်ခံပြီး အနည်းစုက လက်မခံရင် နအဖက စစ်အင်အားနဲ့ တွန်းပြီးလုပ်သွားဖို့ ရှိလာမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အပစ်ရပ်အဖွဲ့တွေ အချင်းချင်း ရပ်တည်မှု တူညီကြဖို့ လိုပါတယ်။
မေး။ ။ အခြေခံဥပဒေကို မထောက်ခံကြောင်း ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာ နအဖက မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို အကျပ်ကိုင်တာတို့၊ ခြိမ်းခြောက်တာတို့၊ သွားလာရေး ကန့်သတ်တာတို့ ရှိခဲ့ပါသလား။
ဖြေ။ ။ သိသာထင်ရှားတဲ့ အကြပ်ကိုင်မှု၊ ခြိမ်းခြောက်မှု၊ ကန့်သတ်မှုတွေ မတွေ့ရသေးပါဘူး။
မေး။ ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တော့ဘူးဆိုတော့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး အလားအလာ ဘယ်လိုဖြစ်လာနိုင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ပါတီက ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တော့ဘူးရယ်လို့ အပြတ်မပြောရသေးပါဘူး။ ပါတီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ငြိစွန်းနေတဲ့ အပိုင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက ပြင်ဆင်လိုတဲ့အပိုင်းတွေကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှု မလုပ်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ပါတီအနေနဲ့ ပါဝင်လို့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီလိုရပ်တည်လို့ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ထိခိုက်မယ်၊ မထိခိုက်ဘူးဆိုတာ နအဖစစ်အစိုးရရဲ့ သဘောထားအပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
မေး။ ။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ အဓိကတောင်းဆိုချက်က ဘာပါလဲ။ ဒီတောင်းဆိုချက်ကို စစ်အစိုးရဘက်က မလိုက်လျောဘူးဆိုရင် နောက်ထပ် ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိပါရစေ။
ဖြေ။ ။ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့ အဓိကတောင်းဆိုချက်ကတော့ ဖြစ်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့၊ သုံးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ခေါ်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါကို မလိုက်လျောရင် ကျနော်တို့နိုင်ငံအတွင်း အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးကို တည်ဆောက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံမှာ အေးချမ်းတည်ငြိမ်မှု မရနိုင်ဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေ ရှင်သန် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်တယ်။
မေး။ ။ အခုလက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ လောလောဆယ် အရေးကြီးတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွမှာ ရှိနေသေးတယ်။ အဆိုးဘက်ကို ဦးတည်သွားဖို့ အလားအလာ များနေတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ ဖြစ်ရှိနေတဲ့ အခြေအနေဆိုးတွေကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မယ့် အလားအလာမရှိဘူး။ တဖက်သတ်တွန်းပြီး လုပ်သွားရင် ပြည်တွင်းစစ်မီး အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပြန်လည်ထတောက်လာဖို့ ရှိနေတယ်။ ဒီလိုထတောက်လာရင် ပြည်သူတွေ ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ၊ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေ ပိုမိုများပြားလာလိမ့်မယ်လို့ မြင်တယ်။
စစ်တပ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကို ခွဲထုတ်ကြ
၂၀ ဇူလိုင် ၂၀၀၉
ကချင်ပြည်နယ် မန်စီမြို့အခြေစိုက် ခမရ (၃၁၉) က တပ်ထောက်တာဝန်ခံ အရာခံ ဗိုလ်ထွန်းရွှေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လ (၂၈) ရက်နေ့က တပ်တွင်း အိမ်ထောင်သည်လိုင်းခန်းမှာ ကြိုးဆွဲချကာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းကို ပြင်ပ မပေါက်ကြားဖို့ စစ်အရာရှိကြီးတွေက အထူးထိန်းချုပ် မှာကြားထားကြောင်းလည်း သိရှိရပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်အတွင်း အခြားအဆင့် အားလုံးထဲမှာ ရာထူးအကြီးဆုံးနဲ့ အမြင့်ဆုံးသူများဟာ ဒု-အရာခံဗိုလ်နဲ့ အရာခံဗိုလ်များပင် ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ကို Non Commission officer လို့ ခေါ်ကြပြီး ပြန်တမ်းဝင် မဟုတ်တဲ့ အရာရှိများလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ ရထားတွဲစီးရင် အရာရှိများနည်းတူ အထက်တန်းတွဲမှာ စီးခွင့်ရသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တပ်ခွဲတွေမှာ တချို့အရာခံဗိုလ်များဟာ တပ်စုတစုကို အရာရှိမပါဘဲ သီးခြားအုပ်ချုပ်ခွင့် ရရှိပြီး တချို့တပ်ခွဲရုံးမှာတော့ တပ်ခွဲမှူးများနဲ့ ပူးတွဲစီမံခွင့် ရသူများလည်း ဖြစ်ကြပါတယ်။ အရာခံဗိုလ်များရဲ့ အရေးပါမှု အရာရှိများနဲ့ ဆက်ဆံမှုတွေကို ဒီဆောင်းပါးမှာ တင်ပြသွားပါမယ်။
တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ် ‘မာ’ မှ ကောင်းမှ တပ်ရင်းရဲ့တိုက်ခိုက်မှု၊ စည်းကမ်းသေဝပ်မှု ကောင်းတယ်လို့ ပြောစမှတ် ပြုကြပါတယ်။ တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ်ဟာ တပ်ရင်းမှူးရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကိုလည်း အကောင်အထည်ဖော်ရပါတယ်။ တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ်ဟာ အိမ်ထောင်သည်လိုင်းများ စည်းကမ်းသေဝပ်မှု၊ နောက်တန်းလုံခြုံမှုနဲ့ သက်သာချောင်ချိရေး စတာတွေကို တာဝန်ယူကြရသလို ဗဟိုကင်းကိုလည်း ကြီးကြပ်ပေးရသူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ်များဟာ စစ်သည်များကို တန်းစီလူစစ်ရာမှာ ကြပ်မတ် ပေးကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရဲဘော်များ အနေနဲ့ တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ်ကို ချစ်နေရင် သိပ်ပြီး မကောင်းသလို ကြောက်ရွံ့ရိုသေမှ ကောင်းတယ်လို့ အရာရှိတွေက ယူဆကြပါတယ်။ ဒါဘာလို့ ခေါ်တဲ့ တပ်တွင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲများမှာလည်း တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ်တွေဟာ အစစအရာရာ စီစဉ်ကြပ်မတ်ပေးကြရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တပ်ရေးဗိုလ်ကြီးနဲ့ အနီးကပ်လက်တွဲကာ အသေးစိတ်တာဝန်ယူ တင်ပြ ဆောင်ရွက် ကြရပါတယ်။ တပ်တွင်းက စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း အရာခံဗိုလ်တွေက တာဝန်ယူ ကြပ်မတ် ဆောင်ရွက်ပေးကြရပါတယ်။
ရဲဘော်တွေအား အရာခံဗိုလ်အိမ်တွေနဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း အပါအ၀င် အပိုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်အားပေးခိုင်းစေရာမှာ နာမည်ကြီးလို့ တချို့ ရဲဘော်တွေက အရာခံဗိုလ် လာတာတွေ့ရင် ဝေးဝေးက ရှောင်ပြေးသွားလေ့ ရှိကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ်ဟာ လစဉ်ရိက္ခာစား စာရင်းချုပ်ကို တာဝန်ယူကာ ရေးဆွဲပေးကြရပါသေးတယ်။ ဒါ့အပြင် အရာခံဗိုလ်တွေဟာ တပ်တွင်းက သာရေး၊ နာရေး၊ လူမှုရေး စတဲ့လုပ်ငန်းရပ်များကိုလည်း တပ်ရင်းမှူးကတော် ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဦးစီးကာ လုပ်ကိုင်ပေးကြရပါတယ်။
အလားတူ RQ လို့ခေါ်တဲ့ တပ်ထောက်အရာခံဗိုလ်တဦးဟာ တပ်ရင်းတရင်းလုံးရဲ့ စစ်ထောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရိက္ခာခဲယမ်း၊ စက်သုံးဆီတွေကို ကိုင်တွယ်ရပါတယ်။ တပ်ရဲ့  ထမင်းအိုးကြီးကို ကိုင်တွယ်ရသလို လောဘကြီးတဲ့ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်ထောက် ဗိုလ်ကြီးတို့နဲ့ နှစ်ပါးသွားရရင်တော့ ဆီပူလောင်သလို ဒုက္ခရောက်ပြီသာ မှတ်ပေတော့ပါပဲ။ တပ်ထောက်အရာခံဗိုလ်တွေဟာ တပ်ထောက်ဗိုလ်ကြီးကို တာဝန်ခံရပြီး အထက်အရာရှိတွေနဲ့ “ရိုက်စား” လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း တဦးကိုတဦး မဖော်ကြဘဲ ဝေစားမျှစား လုပ်ကြသူတွေ ဖြစ်သလို အဆင်မသင့်ရင်လည်း ဓားစာခံ ဖြစ်ကြရပါတယ်။
တချို့ အရာခံဗိုလ်များဟာ တပ်မှာ အနေကြာ နှစ်ကြာလာတာနဲ့အမျှ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းမှုကြောင့် လစာနဲ့ မလောက်ငမှု ကြုံတွေ့ရကာ သားသမီးများ ပျက်စီးနေကြတာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ တချို့အရာခံဗိုလ်တွေကတော့ မိမိတို့ရဲ့အိမ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ကြတဲ့ စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ စားသောက်ဆိုင် လုပ်ငန်းကိစ္စများမှာ စစ်သည် ရဲဘော်တွေရဲ့ လုပ်အားကိုရယူပြီး ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် အသုံးချ ခိုင်းစေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် တပ်ရင်းမှူးကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးထားတာမျိုးနဲ့ ဝေစားမျှစား လုပ်ကြပါတယ်။
တပ်ဟောင်းများက အရာခံဗိုလ်တွေအနေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာရှိကြပေမယ့် တပ်အသစ်များကို ရောက်သွားတဲ့ အရာခံဗိုလ်တွေမှာတော့ ဒုက္ခဆင်းရဲမျိုးစုံ ကြုံတွေ့ကြရပါတယ်။ အရာခံဗိုလ်တွေဟာ အထက်ကပေးတဲ့ တပ် တည်ဆောက်ရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရာမှာ ရရှိထားတဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာ မပြည့်စုံမှု၊ ငွေကြေး မလုံလောက်မှုတို့ကြောင့် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာ ရပ်ကွက်များက ရွာသားတွေကို အဓမ္မလုပ်အားပေး ခေါ်ယူခိုင်းစေပြီး အလွယ်လမ်း လိုက်ခဲ့ကြရတာလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ အရာခံဗိုလ်တွေဟာ အထက်က တာဝန်မယူမှုကြောင့် ကြုံသလို ဖြေရှင်းလုပ်ကိုင်နေရလို့ စိတ်မွန်းကျပ်မှုများနဲ့ အတူ ထွက်ပေါက်မရှိဘဲ အာဏာရှင်တွေအလိုကျ လှုပ်ရှားနေကြရပါတယ်။
တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာ အဲဒီ တပ်ထောက် အရာခံဗိုလ်တွေဟာ စားကွက် ရိုက်စား ‘ခွင်’ များနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တပ်ထောက် ဗိုလ်ကြီး၊ တပ်ရင်းမှူးတို့နဲ့ သဟဇာတ ဆက်ဆံရေး အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တပ်ရင်းမှူး၊ တပ်မှူးများရဲ့ စိတ်ကြိုက်အလေးပေးမှုနဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည်အပေါ်မှာ မူတည်ပြီး တချို့တပ်များမှာ တပ်ရင်းအရာခံဗိုလ်ဟာ အစွမ်းထက် နေသလို တချို့ တပ်များမှာလည်း ဘေးဖယ် ကျဉ်ထားခြင်း ခံရတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။
အရာရှိတွေဟာ တပ်ရင်းတခုမှာ သိပ်ကြာကြာမနေရဘဲ အကြောင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ သွားကြရပေမယ့် အရာခံဗိုလ်တွေ အနေနဲ့ကတော့ တပ်ရင်းတွေမှာ စွဲမြဲစွာ နေရလေ့ရှိတာမို့ တပ်ရင်းတခုလုံးကို အပ်ကျမတ်ကျ သိရှိနေတဲ့အပြင် စစ်သည် ရဲဘော်တွေနဲ့လည်း နီးနီးစပ်စပ်ရှိကြတာမို့ အောက်ခြေတပ်မတော်သားတွေကို ပြည်သူ့ဘက်ရပ်တည်ဖို့ ထိုးဖောက် စည်းရုံးရာမှာ အရာခံဗိုလ်များအား အဓိကပစ်မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရေစီဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်တွေ ၀ါဒဖြန့်ထားသလို မဟုတ်ဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် တပ်မတော်အတွက် အလွန်လိုအပ်နေကြောင်း သိရှိနားလည်ဖို့ တပ်ရင်းတွေမှာ အဓိကဖြစ်တဲ့ အရာခံဗိုလ်များကတဆင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ပါက ထိရောက်အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆွဲကြိုးချ သတ်မသေရဲဘဲ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကို နာကြည်းမုန်းတီးနေတဲ့ အရာခံဗိုလ်တွေလည်း အမြောက်အမြားရှိကြပါတယ်။ ပြေးစရာမြေမရှိ၊ ထွက်လို့လည်းမရဘဲ ကြိတ်မှိတ်လုပ်နေကြရတဲ့ အရာခံဗိုလ်တွေနဲ့ အောက်ခြေတပ်မတော်သားတွေရဲ့ဘ၀ကို စစ်အာဏာရှင်တွေက သတင်းအမှောင်ချထားပါတယ်။
တပ်မတော်အတွင်း အောက်ခြေမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်နေသလဲဆိုတာ တပ်မတော် စစ်ဆေးရေးအရာရှိချုပ် ဗိုလ်ချုပ် လွန်းမောင် ကိုယ်တိုင် လျှို့ ဝှက်ဆင်းကာ အမှတ်မထင် ၀င်ရောက်စစ်ဆေးပြီး ဗိုလ်သန်းရွှေကို အစည်းအဝေးတခုမှာ တင်ပြခဲ့တာကတော့ ရဲဘော်တွေ ခွက်ပျောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့အတူ တိုင်းမှူးတွေအားလုံးလည်း မျက်စိမျက်နှာ ပျက်ကုန်ကြပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေက တိုင်းမှူးတွေ၊ တပ်မမှူးတွေကို လှိမ့်ဆူရာ စစ်အာဏာရှင် ထိပ်သီးတချို့မှ ကိုလွန်းမောင် အမှန်အတိုင်း ဒီလိုလျှောက်ပြောရင်တော့ ခင်ဗျားကို တိုင်းမှူးတွေက ထမင်းတောင် ကျွေးချင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ ဟန့်သလိုလို ၀ိုင်းပြောပြီး တားခဲ့ကြတဲ့အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒါကိုကြည့်ရင် စစ်အာဏာရှင်တွေ အကြောက်ဆုံးက တပ်တွင်းစည်းလုံးရေးပြိုကွဲမှာကိုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အပါအ၀င် နိုင်ငံတကာဖိအားနဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက နိုင်ငံရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကို ဗိုလ်သန်းရွှေက ဂရုမစိုက်သလို အစည်းအဝေးတွေမှာလည်း တို့တပ်မတော်ကြီး စည်းစည်းလုံးလုံး ရှိနေသမျှ ဘယ်လိုအန္တရာယ်မှ မကျရောက်နိုင်ဘူးလို့ အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေအနေနဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို စစ်အာဏာရှင်တစ်စုရဲ့  လက်ထဲက ဆွဲထုတ်ကြဖို့ ထိထိရောက်ရောက် စီမံကိန်းချကာ ဆောင်ရွက်ရန် အရေးကြီးဆုံးအချိန်ကို ရောက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 19 နာရီ 21 မိနစ်
အဖွဲ့တွင်း ပထမဆုံး ပေါ်ပေါက်လာသော ဤလူ့အခွင့်အရေး စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကြီးကို လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူများက သြဘာပေး ကြိုဆိုကြသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်များတွင် ချို့ယွင်းအားနည်းချက်များ ရှိနေမည်ကို စိုးရိမ်ကြသည်။ ထို့ပြင် ဒေသတွင်း ပေါ်ပေါက်နေသော လူ့အခွင့်အရေးကိစ္စများကို ကိုင်တွယ်ရန် ဤလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွင် အာဏာများ ပိုမိုပေးအပ်ထားခြင်းဖြင့် ခိုင်မာတောင့်တင်းအောင် လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်ဟုလည်း ပြောဆိုကြသည်။
AHRB ၏ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ မူကြမ်းတွင် အဖွဲ့၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ `အာဆီယံ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အခြေခံလွတ်လပ်မှုနှင့် လူ့အခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်´ ဟု ရေးသားထားသည်။
ပြည်သူတို့၏ အခြေခံအခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အခြားအခွင့်အရေးများကို မြှင့်တင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူများက ပြောဆိုကြပြီး၊ ဤအဖွဲ့အနေဖြင့် လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာများအပေါ် ကိုင်တွယ်နိုင်ပါ့မလားဆိုသည့် သူတို့၏ သံသယကိုမူ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
ဤလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့သည် လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်နိုင်မှုမရှိသလို၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ အစီရင်ခံစာတင်သွင်းနိုင်သည့် ကာကွယ်မှုမျိုး မပါကြောင်းနှင့် ထို့ကြောင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူများအပေါ် ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်မှုမရှိကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက် မြန်မာ့လူ့အခွင့်အရေး လှုပ်ရှားသူ ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
''ဒီအတိုင်းသာသွားမယ်ဆိုရင် ဒီအဖွဲ့မှာ အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ကျူးလွန်သူတွေကို အရေးယူခွင့်၊ ပြစ်တင်ရှုတ်ချနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ ယန္တရားတစုံတရာလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံတွေကို ဖိအားပေးနိုင်မယ့် ယန္တရားတစုံတရာလည်း ရှိမှာမဟုတ်ဘူး'' ဟု ဦးအောင်မျိုးမင်းက ပြောသည်။
လက်ရှိ ရေးဆွဲထားသော တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထောက်ခံအတည်ပြုရန် မြန်မာ စစ်အစိုးရအနေဖြင့် ဘာမှပြဿနာမရှိဘဲ၊ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ အတည်ပြုမည်သာ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သူတို့အနေဖြင့် အာဆီယံ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီးကို ထောက်ခံအတည်ပြုပြီးဖြစ်ကာ နိုင်ငံတကာ၏ ဝေဖန်မှုများကို ပြန်လှန်ချေပနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သူက ဆက်ပြောသည်။
အာဆီယံ အနေဖြင့် သူတို့အဖွဲ့၏ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းတရပ် ပေါ်ထွက်လာရေး ဦးတည်လုပ်ဆောင်သင့်ကာ၊ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေးအတွက် ကတိကဝတ်ပြု အာမခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများ ရှိလာပါက စုံစမ်းစစ်ဆေး၍ အစီရင်ခံတင်ပြ တိုင်ကြားနိုင်ခွင့်ရှိသည့် ကော်မရှင်တရပ် ရှိရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်သူများကို ရုံးတင်စစ်ဆေး အပြစ်ပေးနိုင်မည့် တရားရုံးတခုကိုလည်း ထူထောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်မျိုးမင်းက ဆိုသည်။
ဤသို့ ဝေဖန်မှုများ ရှိနေလင့်ကစား အချို့ကမူ အာဆီယံ၏ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းရေးတွင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း မပြုရဆိုသည့် အစဉ်အလာကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် အာဆီယံအနေဖြင့် ပထမဆုံး ပေါ်ပေါက်လာသည့် ထူးခြားသည့် လှုပ်ရှားမှုတရပ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောင်တွင် ထိရောက်သည့် အဖွဲ့တရပ်အဖြစ် တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုကြသည်။
''ကျနော်တို့က မျှော်လင့်ချက်တော့ ထားရမှာပေါ့။ အကောင်းမြင်နေတာလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ ဘာမှ မရှိတာထက်စာရင် ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအကြာမှာ အခုလို လူ့အခွင့်အရေး ယန္တရားတရပ် ပေါ်လာတာ ထူးခြားတဲ့ ခြေလှမ်းတလှမ်းပဲ'' ဟု မက်သီဆင်က ပြောသည်။
သို့သော် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ အစိုးရများ၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများက ဤအဖွဲ့အလုပ်ဖြစ်ရန်နှင့် ထိရောက်၍ အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိစေရန် ဝိုင်းဝန်း လုပ်ဆောင်ကြရမည်ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောဆိုသည်။
နာရေးကူညီမှု အသင်းရုံး ပြောင်းရွှေ့ပြီ
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 49 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ သုခဆေးခန်းနှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးကို သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်သို့ ယမန်နေ့က ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်လိုက်ကြောင်း အသင်းဥက္ကဋ္ဌက ပြောသည်။
မြောက်ဒဂုံရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်းပိုင် မြေ ၂ ဧကပေါ်တွင် ကျပ်သိန်း ၂ ထောင်ခန့် ကုန်ကျသည့် နှစ်ထပ်ဆေးခန်းတခုသာ တည်ဆောက်နိုင်သေးသော်လည်း ဖွင့်ပွဲကိုမူ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
“မနေ့က ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တယ်။ အာဇာနည်နေ့ဟာ မှတ်ရတာလည်း လွယ်တယ်။ မြန်မာပြက္ခဒိန်မှာ ဆိုလည်း ရက်ရာဇာဆိုတော့ ဖွင့်ပွဲလုပ်လို့ ကောင်းတယ်။ ဆေးခန်းက သင်္ကန်းကျွန်းကနေ ပြောင်းတာတော့ကြာပြီ၊ ၁၀ ရက်ကျော်ပြီ်။ ဆက်ကုထားတဲ့ လူနာတွေကို အမြန်ဆုံး ပြန်ကုနိုင်ဖို့အတွက် အမြန်ဆုံး ဖွင့်လိုက်တာ။ ဖွင့်ရက်ကို သတိတရရှိဖို့ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာ” ဟု အသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်သူ နိုင်ငံကျော် ရုပ်ရှင်မင်းသား ဦးကျော်သူက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယနေ့မှ စတင်ကာ မျက်စေ့၊ ကလေးအထူးကု၊ အရိုးအကြော၊ သားဖွားနဲ့ မီးယပ်၊ အရေပြားဆိုင်ရာ ဆရာဝန်များ၊ အထွေထွေ ဆရာဝန်များရှိသည့် အဆိုပါ ဆေးခန်းသို့ လူနာပေါင်း ၂၀၀ ခန့် လာရောက်၍ ကုသမှုခံယူနေကြောင်း သိရသည်။
ဦးကျော်သူက “လူနာကူညီမှုကတော့ အရင်ကထက် ပိုများလာတယ်။ လူနာသဂြိင်္ုဟ်ပေးရတဲ့ ဦးရေလည်း ပိုများလာတယ်။ အရင်တုန်းကဆို တရက်ကို ၃၀၊ ၃၅ ယောက်လောက် သဂြိင်္ုဟ်ပေးရတယ်။ အခုတော့ ၄၀ ကျော်၊ ၅၀ လောက် ရှိလာတယ်။ လူနာက တရက်ကို ၁၂၀ လောက်လာတာ။ အခု ၂၀၀ ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ များလာတယ်လို့ ပြောရမယ်” ဟု ပြောသည်။
သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းတွင် ပါရဂူဘွဲ့ရ ဆရာဝန် ဦးရေ ၃၀ ခန့်နှင့်အတူ သူနာပြု ၉ ဦးက အခမဲ့ ပညာအလှူပြု ကုသပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ မြေကွက်အောက်တွင် မြေသား မရှိသည့်အတွက် သန့်ရှင်းမှု ရှိစေရန် လူသွားလမ်းအတွက် သဲဖြူခင်း ပေးထားသည်။
နေရာအသစ်အတွက် ရရှိသည့်မြေမှာ ပလတ်စတစ်အမှိုက်ပုံ ဖြစ်နေပြီး အောက်ခံမြေသား မရှိသောကြောင့် အရိပ်ရအပင်များ စိုက်ပျိုးထားသော်လည်း မအောင်မြင်သဖြင့် နွေရာသီအတွက် စိုးရိမ်နေရကြောင်း သိရသည်။
“ပေ ၂၀ လောက်တူးမှ မြေကြီး မတွေ့သေးဘူး။ မိုးတွင်းဆိုတော့ လောလောဆယ် သဲအပေါ်ကနေ ခင်းထားတယ်။ နွေဆိုရင်လည်း ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်။ ပလပ်စတစ်ကနေ ထွက်တဲ့ Gas ပေါ့လေ။ အပူနဲ့ ဒီလို Gas တွေက သာမန်လူတွေအတွက်လည်း မကောင်းသလို လူနာတွေအတွက်လည်း မကောင်းနိုင်ဘူးလေ။ ဒါကြောင့် ဆေးခန်းအဆောက်အအုံအောက်မှာ Gas ထွက်ဖို့အတွက် ပိုက်လိုင်းတွေတော့ သွင်းထားရတာပေါ့လေ” ဟု ဦးကျော်သူက ပြောသည်။
မြောက်ဒဂုံရှိ သုခဆေးခန်းသည် မီးလိုင်းတလိုင်းသာ ရရှိထားကာ မီးပျက်မှု များသောကြောင့် မီးစက်ကိုသာ အားထားနေရပြီး၊ ရေသွယ်တန်းနိုင်ရန်လည်း အစိုးရရေပိုက်လိုင်းများ မရရှိသေးသဖြင့် အဝိစိတွင်းကိုသာ အားပြုနေရသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးခန်း၊ လူနာနားနေဆောင်၊ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပြုပြင်ခန်းများသာမက လူနာနှင့် ဝန်ထမ်းများအတွက် သက်သာချောင်ချိရေး စားသောက်ဆိုင်ခန်းများပါ တည်ဆောက်ရန် ကျရှိနေသေးသဖြင့် ကျပ်ငွေ သိန်း ၂၀၀၀ ခန့် လိုအပ်သေးကြောင်း ခန့်မှန်းထားကြသည်။
လက်ရှိတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်းရုံးခန်းအား သစ်သားတိုင်၊ သွပ်မိုးဖြင့်သာ တည်ဆောက်ထားနိုင်ပြီး ခြံရှေ့ပိုင်းကိုသာ ခြံစည်းရိုး ကာနိုင်သေးသဖြင့် လုံခြုံရေးအတွက် စိုးရိမ်နေရသည်ဟု သိရသည်။
လက်ရှိပြောင်းရွှေ့လာသည့် မြောက်ဒဂုံမြေကွက်သည် ကိုယ်ပိုင်မြေကွက်ဖြစ်သဖြင့် စိတ်တိုင်းကျ တည်ဆောက်နိုင်သော်လည်း ပလပ်စတစ်အမိုက်ပုံပေါ်တွင် ဆောက်လုပ်ထားသည့်အတွက် ကုန်ကျစရိတ် ပိုများကြောင်း သိရသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းကို ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ဦးကျော်သူ ဦးစီးတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ ဘာသာမရွေး အခမဲ့ ပို့ဆောင် သဂြိင်္ုဟ်ပေးနေခဲ့ရာမှ နောက်ပိုင်းတွင် သုခ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်မှ ဘုန်းကြီးကျောင်း တကျောင်းတွင် ထားရှိသည့် နာရေးကူညီမှု အသင်းပိုင် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်များကိုလည်း မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ရေဝေးသုသာန် နယ်နိမိတ်အတွင်း ပြောင်းရွှေ့ရန် ယခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလက ကျောက်တံတားမြို့နယ် စည်ပင်သာယာရေးရုံးက ညွှန်ကြားခဲ့သည်။
တာချီလိတ်တွင် နှစ်လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု ဖြစ်ပွား
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 37 မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့တွင် သားအဖ နှစ်ဦးအား ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်သည့် နှစ်လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုတခု ယမန်နေ့က ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
တာချီလိတ်မြို့ ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်၊ ပုန်းထွန်လမ်းမကြီးပေါ်၌ နေထိုင်သော ဦးလီရှောက်ဝေ (ခ) ဦးစိုင်းလုံ (၅၂ နှစ်) နှင့် သားဖြစ်သူ စိုင်းထွန်းလှ (၂၉ နှစ်) တို့အား နေအိမ်၌ လူသတ်သမားက ၉ မမ ပစ္စတိုဖြင့် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
“စန်းရေ ရေသန့်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပေါ့။ ဦးအိုက်လုံပေါ့။ ဦးစိုင်းလုံလည်း ခေါ်တယ်။ နေ့လည် တနာရီ လောက်က သူ့အိမ်မှာ ဝင်ပြီးတော့ ပစ်သွားတာပေါ့နော်။ သူက ပုန်းထွန်မှာပဲ နေတာ။ သူ့ကို ပစ်ပြီး အထွက်မှာ သူ့သားက လည်း အိမ်ထဲက ထွက်လာတော့ သူ့သားကိုလည်း ထပ်ပစ်သွားတာပေါ့။ နှစ်လောင်းပြိုင်ပေါ့” ဟု တာချီလိတ်မြို့ခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တာချီလိတ်ရဲစခန်းသို့ မေးမြန်းရာ တာဝန်ကျ ရဲတဦးက “အဲဒါက ကျနော်တို့က ဖြေလို့ မရပါဘူး ခင်ဗျာ။ သတင်းဌာနအနေနဲ့ဆိုရင် ပိုင်ရှင်တို့၊ ရပ်ကွက်တို့ကိုပဲ စုံစမ်းကြည့်လိုက်ပါ” ဟု ပြန်ဖြေ၍ ဖုန်းချသွားသည်။
ပုန်းထွန် ရယက (ရပ်ကွက်ကောင်စီ) ရုံးနှင့် တာချီလိတ်ဆေးရုံသို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ဖုန်းကိုင်မည့်သူ မရှိပေ။
ပစ်သတ်ခြင်းခံရသူ သားအဖ နှစ်ဦး၏ အိမ်သည် ပုန်းထွန်လမ်းမကြီး၏ဘေး၊ လမ်းစွယ် နံပါတ် (၄) လမ်းထိပ်အနီး၌ တည်ရှိပြီး လူသတ်သမားသည် ကားနှင့် လာခြင်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးတဦးလည်း ပါလာသည်ဟု အနီးအနားမှ မျက်မြင်များက ပြောကြောင်း အခြားမြို့ခံတဦးက ပြောသည်။
လူသတ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာက သတင်းထိန်ချန်ထားသော်လည်း မြို့ခံများအကြား၌ မူးယစ်ဆေးဝါး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်နေသည်ဟု သတင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း သိရသည်။
“သတင်းထွက်နေတာက အကြွေးလာတောင်းတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။ သူတို့က ယာမားတွေဘာတွေ လုပ်ခဲ့တဲ့ လူတွေကိုး။ အပေးအယူတွေ ရှိမှာပေါ့။ ဝ’ ခေတ်ထလာတဲ့ အခါကျတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရှမ်းတရုတ်လိုလို၊ ဝ’ လိုလို ဖြစ်လာကြတာပေါ့။ ဟိုတုန်းကတော့ ဝ’ တံဆိပ်ပါတဲ့ကား စီးတာပေါ့။ အခုတော့ သူတို့က ဒါတွေ နံပါတ်ပြောင်းထားတယ်လေ။ ဝ’ နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိတာတော့ definitely ပဲ” ဟု မြို့ခံက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၄ နှစ်ကျော်ခန့်ကလည်း ပုန်းထွန်ရပ်ကွက် အတွင်းရေးမှူး ဦးကံမြင့်ဆိုသူကို ယခုကဲ့သို့ နေ့ခင်းကြောင်တောင် ပစ်သတ်ခဲ့မှုဖြစ်ဖူးကြောင်းနှင့် တရားခံစီးလာသည့် ကားအမျိုးအစားနှင့် နံပါတ်ကို အတိအကျ သိရသော်လည်း ဖမ်းမိခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း မြို့ခံများက ပြောသည်။
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့သည် နယ်စပ်မှောင်ခိုလုပ်ငန်း၊ လူရောင်းဝယ်ရေးနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ရေး လုပ်ငန်းများဖြင့် နာမည်ကြီးသည့် မြို့ဖြစ်သည်။
ယခုလ ၁၀ ရက်နေ့ကလည်း တာချီလိတ်မြို့ လွယ်တော်ခမ်း ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးစခန်း၌ မိုင်းဆတ်မှ တာချီလိတ်သို့ ဝင်ရောက်လာသော နစ်ဆန်း ၆ ဘီးကားပေါ်မှ ဘိန်းဖြူ ဘလောက်တုံး ၂၁၀၀ ကျော် (ကီလိုဂရမ် ၇၀၀ ကျော်) အပါအဝင် WY စာတမ်းပါ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးပြား ၃ သိန်း ၄ သောင်းတို့ကို ဖမ်းမိကြောင်း ယခုလ ၁၆ ရက်ထုတ် မြန်မာ့အလင်းသတင်းစာက ဖော်ပြခဲ့သေးသည်။
တနင်္လာနေ့၊ ဂျူလိုင်လ 20 ရက် 2009 ခုနှစ် 18 နာရီ 27 မိနစ်
“သဘောင်္ပေါ်က တက်လာတာ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ ပါလာတာ တွေ့ရတယ်လေ။ အမြောက်တွေ ပါလာတယ်လို့ ပြောတယ်။ အမြောက်တပ်က တက်လာတာလို့လည်း ပြောတယ်လေ။ ဘာအမြောက်တွေလည်း ဆိုတာတော့ မိုးကာတွေနဲ့ အုပ်ထားတော့ သေချာတော့ မတွေ့ရဘူးပေါ့” ဟု စစ်သားများနှင့် စကားပြောခဲ့ရသည့် ဒေသခံတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“စစ်ဗိုလ်တွေ၊ စစ်သားတွေ ည ၉ နာရီလောက်ကမှ ရောက်လာတာ။ သွားကြည့်လိုက်တယ်။ ၁၀၀ လောက်ပဲ ရှိမယ်။ အရာရှိက ပိုများတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လာကြိုတဲ့အထဲမှာ အရာရှိတွေချည်းပဲ။ စစ်ကားတွေထဲမှာလည်း အရာရှိစီးတဲ့ ကားက တော်တော်များများ လာတယ်” ဟု သူက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် တပတ်ကျော်ကလည်း ဗန်းမော်သို့ လက်နက်အပြည့်အစုံ တပ်ဆင်ထားသည့် စစ်ယာဉ်တန်းများ ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်းနှင့် ယခင်က မြို့နယ်နိမိတ်တွင် စစ်တပ်လှုပ်ရှားမှု သိပ်မရှိလှသော်လည်း ယခုအခါ အသွားအလာများ ထူထပ်နေကြောင်း ဒေသခံများက ဆိုသည်။
ဤသည်မှာ ယခုလ ၈ ရက်နေ့က ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အပစ်အခတ်ရပ် ကချင် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ - KIO ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဋ္ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းတို့ နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်ပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က အဆိုပြုထားသည့် နယ်ခြားစောင့်တပ် ဖွဲ့စည်းရေးအား KIO က ငြင်းဆန်ကာ ကချင်ဒေသ လုံခြုံရေးတပ်အဖြစ်သာ အသွင်ပြောင်းလိုကြောင်းနှင့် နောင်တက်မည့် အစိုးရအာဏာတွင် ပါဝင်ရန် လိုလားကြောင်း တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
ယခုလို ဗန်းမော်မြို့သို့ တပ်အင်အား တိုးချဲ့ချထားလာသည့် အရာရှိနှင့် စစ်သည်များသည် မည်သည့်တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့များမှ ဖြစ်သည်ကို ဒေသခံများအနေဖြင့် မသိကြသေးပါ။
ဗန်းမော်တွင် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် အမှတ် ၂၁ အခြေစိုက်ထားပြီး၊ သူ၏ လက်အောက်တွင် ခြေလျင်နှင့် ခြေမြန်တပ်ရင်း ၁ဝ ရင်းခန့် ရှိကာ ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်း ဖြန့်ကျက်ချထားသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၏ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်သည့် ဗန်းမော်သည် မြို့တော်မြစ်ကြီးနား၏ တောင်ဘက် ၁၁၅ မိုင် အကွာတွင် တည်ရှိကာ၊ တရုတ်နယ်စပ်နှင့် မိုင် ၄၀ ခန့် ကွာဝေးသည်။ KIO အခြေစိုက်ရာ လိုင်ဇာမြို့သည် ဗန်းမော်နှင့် မြစ်ကြီးနားအကြား တည်ရှိကာ ဗန်းမော်၏ အရှေ့မြောက်ဘက် မိုင် ၄၀ ခန့်တွင် တည်ရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲထားသည့်အပေါ် တပ်တွင်းမကျေမနပ်ဖြစ်
Sunday, 19 July 2009 12:37 ရိုးမ ၃ .နေအိမ်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် နိုင်ငံခြားသားတဦးကိုမူတည်ကာ တရားစွဲဆိုနေခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်တွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် အရာရှိအချို့ မကျေမနပ်ဖြစ်နေသည်။
အမျိုးသမီးတဦးအပေါ်အရှက်ရစရာကောင်းလောက်အောင် လိမ်ညာအမှုဆင် လုပ်ဆောင်နေသည့်အတွက် တပ်မတော်အတွင်းရှိ အောက်ခြေ အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်တပ်သားများနှင့် မိသားစုဝင်များက တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်များအပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
“ကျနော် စစ်တပ်ထဲဝင်ခဲ့မိတာ မှားတယ်၊ ဒီကိစ္စ တပ်ထဲမှာလည်း တီးတိုးပြောကြတယ်ပေါ့ဗျာ၊ သိပ်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်၊ သူတို့ ဘာကြောင့် အရှက်ကင်းမဲ့စွာ လုပ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း ကျနော် စဉ်းစားမိသမျှပေါ့ဗျာ၊ အာဏာကို ငန်းငန်းတက် မက်မောနေကြပြီလို့ပဲ ပြောချင်တယ်” ဟု အရှေ့တောင်တိုင်းစစ်ဌာချုပ် လက်အောက်ခံတပ်မှ တပ်ခွဲမှူးအဆင့်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိအခြေအနေတွင် အခြားတပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်လည်း ယခုကိစ္စများကို ကျေနပ်မှုမရှိကြောင်း၊ ၄င်းနှင့်တပတ်စဉ်တည်း ကျောင်းဆင်းလာခဲ့သည့် မိတ်ဆွေများအား မေးမြန်းခဲ့ရာ တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်များမှာ အလားအလာမကောင်းကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
နေပြည်တော်နှင့်နီးစပ်သူ အရာရှိတဦးအဆိုအရ တပ်ချုပ်ဟုခေါ်သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေမှာ ယခုလုပ်ရပ်ကြောင့် အခြားတပ်မှူးကြီးများ၏ ယုံကြည်မှုလျှော့နည်းလာသည်ဟု ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား တရားစွဲ၍ ထောင်ချပြီးမှသာလျှင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ ထွက်ပေါ်လာမည်ဖြစ်ပြီး ပါတီအားဖြင့် ၄ ခုခန့်သာ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်ဟု အဆိုပါအရာရှိက ဆက်လက်ပြောဆိုသွားခဲ့သည်။
စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား အမေရိကန်နိုင်ငံသား မစ္စတာ ဂျွန်ယက်တော နေအိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့သည်ကို လက်ခံခဲ့သည့် အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရုံးတင်တရားစွဲဆိုမှုများ ပြုလုပ်ထားပြီး ယခုလ (၂၄) ရက်နေ့တွင် အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက်တင်ရန် ရုံးချိန်းသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
Saturday, 18 July 2009 19:41 ဖြိုးကြီး .စစ်အစိုးရအာဏာပိုင်များက ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလ တရားပွဲကို တားမြစ်ခဲ့ပြီး တရားပွဲလာသူများကိုလည်း နှောက်ယှက်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မဲဆောက်မြို့ရှိ BHSOH ကျောင်းတွင် ရခိုင်လူငယ် ၂၂ ဦးထိ ပညာနို့ရည် သောက်စို့ခွင့် ရရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့ရှိ Boarding High school for Orphan and Helpless Youths, BHSOH အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ၂၀၀၉-၁၀ ပညာသင်နှစ်၌ ရခိုင်ကျောင်သားများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းမှ ရခိုင် ကျောင်းသား ၂၂ ဦးကို ပညာ သင်ကြားခွင့်ရရန် ကျောင်းအပ်နှံ နိုင်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ရခိုင်အမျိုးသား ကျောင်းအုပ် ဆရာကြီး ဦးခိုင်ဦးမောင်မှ ဦးစီး တည်ထောင်ထားသော ကျောင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား အများအပြား ပညာ သင်ကြား လျက်ရှိသည်၊၊
အဆိုပါ ကျောင်းသား လူငယ်များထဲတွင် ရခိုင်ပြည်နယ် အရပ်ရပ်မှ ရောက်ရှိလာသော ရခိုင် ကျောင်းသား ၂၂ ဦး ရှိပြီး ထိုအထဲတွင် ကျောင်းသား ၁၈ ဦးမှာ ကျောင်းအိပ် ကျောင်းစား စခန်းသွင်း နေထိုင်လျက်ရှိသည်ဟု ရခိုင်ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းမှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
အဆိုပါ ကျောင်းသားများ အတွက် ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ထည့်ဝင်ငွေများဖြင့် အဆိုပါ စီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး မည်သူ တဦးတယောက်ထံမှ ငွေကြေး ကောက်ခံခြင်း၊ အကူအညီ တောင်းခံခြင်းလည်း မရှိကြောင်းလည်း အဆိုပါ အဖွဲ့ ပြောခွင့်ရသူက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း ယခုအခါ မဲဆောက်မြို့တွင် အဆိုပါ အဖွဲ့ အမည်ကို အသုံးပြုပြီး ငွေကြေးကောက်ခံမူများ ကူညီတောင်းခံမူများ ရှိနေသည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသဖြင့် အဆိုပါ ကိစ္စမှာ သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်မူ မရှိကြောင်း အဆိုပါ အဖွဲ့၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖေါ်ပြသည်။
ရခိုင်ကျောင်းသားများ၏ ပညာရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းမှာ ရခိုင်ပြည်အတွင်းတွင် ကျွန်ပညာရေး စနစ်ဖြင့် ဘ၀ အမှောင်ချခံနေရသည်. ရခိုင်လူငယ်များ အခြေခံပြီး အမျိုးသား ပညာရေး စွမ်းရည် တိုးမြင့်ရေးကို ရွယ်ရည်ပြီး ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းကို ပြည်ပရောက် ရခိုင်လူငယ်များက မိမိအသိစ်ိတ်ဓါတ်ဖြင့် အများကောင်းကျိုးအတွက် ဦးစီး ဦးဆောင်ပြုလုပ်ကာ ဆောင်ရွက်နေသော စီမံကိန်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ခိုးဝင်လာသူများကို ပြန်လည် နှင်မထုတ်ဘဲ ဖမ်းဆီး တရား စွဲဆိုသွားမည်ဟုဆို
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ ခိုးဝင်လာသူများကို ယခင်ကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်မနှင်ထုတ်တော့ဘဲ ဖမ်းဆီး ထောင်ချ အရေးယူသွားတော့မည် ဖြစ်သည်ဟု ဒေသ တာဝန်ရှိသူ တဦးက ပြောဆိုသည်။
တက်ကနက် မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Md Tofayel Islam က “ကျနော်တို့ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက ခိုးဝင်လာတဲ့ သူတွေကို အစပိုင်းမှာ သူတို့ နိုင်ငံကို နှင်ထုတ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလို နှင်ထုတ်တာက အလုပ်မဖြစ်ဘူး။ တိုးပြီးတောင် ထွက်လာ ကြတယ်။ ဒီတော့ ကျနော်တို့ အနေနဲ့ ခိုးဝင်လာသူတွေကို ပြန်နှင် မထုတ်တော့ဘူး။ အခုအခါ ဖမ်းပြီး တရားစွဲဆို ထောင်ချသွားပါတော့မယ်” ဟု ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သော လအနည်းငယ်က စတင်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှ မူဆလင် အများအပြားမှာ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ ခိုးဝင်လာခဲ့ကြပြီး အများစုကို ဘင်္ဂလာ အာဏာပိုင်များက ၎င်းတို့၏ နေရပ်သို့ ပြန်လည် နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ကြောက်ရွံ့မူ မရှိဘဲ ဆက်လက်ပြီး တသုတ်ပြီး တသုတ် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ကို ၀င်ရောက်လာနေကြသဖြင့် ဘင်္ဂလာ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီး အရေးယူရန် စီစဉ်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ စီစဉ်ခြင်းမှာ အစိုးရ၏ ပေါ်လစီ အပြောင်းအလဲ တရပ် ဟုတ်မဟုတ်ကို မသိရသေးသော်လည်း လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က စပြီး အဆိုပါ စီမံကိန်းကို နယ်စပ်မြို့ တက်ကနက် မြို့နယ်အတွင်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
တက်ကနက်မြို့ ရဲစခန်းမှာ ရဲမင်းကြီး ဂျာမေး အာမတ် ချော်ဒူရီက “ကျနော်တို့ စီမံကိန်းကို စတာနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေက ခိုးဝင်လာတဲ့ လူ (၆) ဦးကို ဖမ်းမိပါတယ်။ သူတို့ကို တရားစွဲဆိုပြီး တည်ဆဲ ဥပဒေတွေနဲ့ အရေး ယူဆောင်ရွက် သွားဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ဖမ်းဆီးခံရသူ မြန်မာနိုင်ငံသား (၆) ဦးမှာ စစ်တွေမြို့နယ် ဂျာလီယာ ကျေးရွာမှ မူဆလင်များ ဖြစ်ကြပြီး နတ်မြစ်ဝရှိ ဆင်မဖြူကျွန်းတွင် ဘင်္ဂလာ ရိုင်ဖယ် တပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြသည်။
ထိုကဲ့သို့ ဖမ်းဆီး အရေးယူခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့သို့ ခိုးဝင်လာသူ အရေအတွက်မှာ လျော့ကျသွားမည်ဟု ဘင်္ဂလာအာဏာပိုင်များက ထင်မြင် ယူဆထားသည်ဟု သိရသည်။
FBF မှ ၆၂ နှစ်မြောက်အာဇာနည်နေ့ကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နယ်စပ်တွင် ကျင်းပ
မောင်အေး(နိရဉ္စရာ) ယနေ့တွင် ကျရောက်သည့် ၆၂ နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားကို Free Burma Federation ( Bangladesh) မှ ဦးဆောင်ပြီ ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံ အင်အားစုများနှင့် စုပေါင် ပြီး ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ မြန်မာ နယ်စပ် တနေရာတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။
“အခမ်းအနားကို ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ စစ်တကောင်း တောင်တန်းနယ် မြန်မာ နယ်စပ် အနီးရှိ ဒါးပိုင်ခါလီ ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ ပြုလုပ်ပါတယ်။ နေ့လည်ပိုင်းမှာ စတင်ပြီး နမောတဿ သုံးကြိမ်ရွှတ်ဆိုပြီး အခမ်းအနားကို စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ဦးဆောင်သူ ကိုထွန်းစံက ပြောသည်။
အခမ်းအနားသို့ လူပေါင်း ၄၀ ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ကျဆုံးသွားခဲ့ကြသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များအတွက် အမျှအတန်းပေးဝေခဲ့ကြသည်။
“တက်ရောက် လာကြတဲ့သူတွေက အာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဟောပြော ကြတယ်။ နောက်ပြီး ကျဆုံးသွားကြတဲ့ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို ဗုဒ္ဓဘာသာ တရားနဲ့အညီ အမျှဝေ မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းမူတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။”
၎င်းပြင် ကိုထွန်းစံက “အခုလို အာဇာနေနေ့ကို ကျင်းပရတာက ရည်ရွယ်ချက်တွေထဲမှာ အဓိက အချက်ကတော့ ဒီကနေ့ စစ်အုပ်စုဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အရေးကြီး တဲ့ နေ့တနေ ဖြစ်တဲ့ အာဇာနည်နေ့ကို လုံးဝ ပျောက်ကွယ် သွားအောင်ထိ ဖျက်စီးပစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဒီနေ့ကို မြန်မာ ပြည်သူတွေ မမေ့ပျောက်ရအောင်နဲ့ မျိုးဆက်သစ် လူငယ်တွေ သိရှိထား အောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ကျင်းပတာဖြစ်တယ်။” ဟု ပြောသည်။
အခမ်းအနားကို ညနေ ၂ နာရီခွဲတွင် အောင်မြင်စွာအဆုံး သတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
၁၉၄၇-ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် လွတ်လပ်ရေးဗိသုကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါ အ၀င် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်များကို မသမာသူ လူသတ် သမားများက ရက်စက်စွာ ပစ်သတ်ခဲ့သည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်များ ကျဆုံးခဲ့ရသည့် ဇူလိုင် ၁၉ ရက်နေ့ကို မြန်မာပြည်သူများက အာဇာနည်နေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး အခမ်းအနားများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ကျင်းပခဲ့ ကြသော်လည်း နဖအ စစ်အုပ်စု အာဏာရလာသည့် ကတည်းက လွတ်လပ်စွာ ကျင်းပခွင့်ကို ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်။
မောင်တောမှ ခရီးသည် အမျိုးသမီး တဦးကို တရားရုံး မတင်ဘဲ ဥပဒေမဲ့ ချုပ်နှောင်ထား
မောင်တောမြို့မှ ခရီးသည် အမျိုးသမီး တဦးကို နစကမှ ဖမ်းဆီးထားပြီး တရားရုံးမတင်ဘဲ မောင်တောမြို့ အောက်စခန်းတွင် ချုပ်နှောင် ထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။
ချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသူမှာ မစိုးစိုး အသက် ၃၆ နှစ် ဖြစ်ပြီး လွန်ခဲ့သော အဂါင်္နေ့က ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ တက်ကနက်မြို့မှ မောင်တောသို့ အပြန်တွင် POE ခေါ် ဖေါင်တော်ကြီး ဆိပ်ကမ်းတွင် အဖမ်းခံရသည်ဟု အမည်မဖေါ်လိုသူ ခရီးသည် တဦးက ပြောသည်။
“သူမကို ရှာဖွေတော့ ဘင်္ဂလာတာကာ ၂၀၀၀၀ တွေ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို နစက ဖမ်းဆီးပြီး အောက်စခန်းမှာ ချုပ်နှောင်ထားပါတယ်။ ခုဆိုရင် ၇ ရက်နီးပါးခန့် ရှိနေပါပြီ။ တရားရုံးလည်း မတင်ဘဲ ခုလို ဖမ်းချုပ်ထားတဲ့အတွက် လူတိုင်းလိုလိုက သူမ အတွက် စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။”
မြန်မာ နအဖ အာဏာပိုင်များက နေ့ချင်းပြန် ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူ ပြောင်းရွှေ့သူများ အနေဖြင့် ဘင်္ဂလာ တာကာ ၅၀၀၀ အား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ယူဆောင်ခွင့် ပြုထားပြီး ထိုထက်များပြားသော ငွေပမာဏကို ယူဆောင်ခွင့် မပြုဟု သိရသည်။
သူက “နေ့ချင်းပြန် ပတ်စပို့နဲ့ မောင်တောနဲ့ တက်ကနက်မြို့ အကြားမှာ ပစ္စည်း အသယ်အပြောင်း လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသမီး ဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေတော့ ငွေတွေ အလွဲအပြောင်း လုပ်ရတာ မလွယ်တော့ ပိုက်ဆံက တခါတခါ အပိုပါလာတတ်ပါတယ်။ သတိမထားရင် ခုလို အဖမ်းခံရတတ်ပါတယ်။”
မြန်မာနှင့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့အကြား ကုန်သည်များ အနေဖြင့် နတ်မြစ်ကို မော်တော်ဘုတ်များနှင့် နေ့စဉ် ဖြတ်ကျော်ပြီး ကုန်ကူသန်း ရောင်းဝယ် နေကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ပစ္စည်း အသယ်အပြောင်း လုပ်သူ အမျိုးသမီးမှာ အများစုဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ မစိုးစိုးအား ဖမ်းဆီးပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း တရားရုံးသို့ တရားမတင်ဘဲ (၇) ရက်ကြာလာသည့်တိုင်အောင် သူမအား နစက အရာရှိများက အောက်စခန်းတွင် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ထားသဖြင့် သူမ၏ လုံခြုံရေးကို အများက စိုးရိမ်နေကြသည်ဟု သတင်း ရရှိသည်။
ဘင်္ဂလာကျားများ၏ တိုက်ခိုက်မူကြောင့် ခရိုင် တခုအတွင်းမှ ၉ နှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၁၄၆ ဦးသေဆုံး
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်ငံ ဘာဂါဟက် (Bagerhat) ခရိုင် တခုတည်း အတွင်း ဘင်္ဂလာကျားများ၏ တိုက်ခိုက်မူကြောင့် ၉ နှစ်အတွင်း လူပေါင်း ၁၄၆ ဦးသေဆုံးခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော ကြာသပတေးနေ့က အဆိုပါ ခရိုင်အနီးရှိ ငါးဖမ်းသမား တဦးကို ဘင်္ဂလာကျားများက ကိုက်သတ် ပြီးနောက် သေဆုံးသူ လူပေါင်း ၁၄၆ ဦးထိ ရောက်ရှိလာခြင်း ဖြစ်သည်။
လူနှင့် ကျားများ တိုက်ခိုက်မူတွင် ၉ နှစ်တာကာလ အတွင်း ကျားကောင်ရေ ၁၉ ကောင်ကို ဒေသခံများက သတ်ပစ် ခဲ့ကြောင်း ဖေါ်ပြသည်။
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ အစိုးရ အနေဖြင့် ဘာဂါဟက် ခရိုင် အနီးရှိ ဆင်းဒါဘန်းတောအုပ်တွင် ဘင်္ဂလာကျားများကို ဘေးမဲ့ပေးထားပြီး မျိုးမတုန်းရအောင် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက် ထားသည်။
ကျားများ အနေဖြင့် ရေငတ်နေပြီး အထူးသဖြင့် မြစ်များတွင် ရေခမ်း ခြောက်သွားချိန်တွင် လူများကို ပိုမို ရန်ရှာ တိုက်ခိုက်လေ့ရှိပြီး အများအားဖြင့် သေဆုံးသူများမှာ ငါးဖမ်းသမားများ ဖြစ်ကြသည်။
ယခုကဲ့သို့ ကျားများ တိုက်ခိုက်မူကြောင့် လူပေါင်း မြောက်မြား သေဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်သော်လည်း သစ်တောဌာန အရာရှိများက ကျားများကို မသတ်ရန်နှင့် အဆိုပါ တောအုပ်မှ ကျားများ လူနေထိုင်ရာ ကျေးရွာများသို့ ၀င်ရောက်လာသည်ကို တွေ့ပါက ချက်ချင်း အကြောင်းကြားရန် ကျေးရွာသားများကို ညွန်ကြားချက် ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟု သိရသည်။
စစ်တွေတွင် အာဇာနည်နေ့ ကျင်းပခြင်း မရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ် မြို့တော် စစ်တွေတွင် ၆၂ နှစ်မြှောက် အာဇာနည်နေ့ကို အခမ်းအနား ပြုလုပ်ပြီး ကျင်းပသူများ မရှိကြောင်း သတင်း ရရှိ်သည်။
စစ်တွေမြို့ နည်းပညာကောလိပ်မှ ကျောင်သား တဦးက “ဘယ်သူမှ အာဇာနည်နေ့ကို စစ်တွေမှာ ကျင်းပတာကို မတွေ့ရဘူး။ နအဖ အာဏာပိုင်တွေ မကျင်းပသလို ပြည်သူ တွေလည်း ကျင်းပတာ မတွေ့ရဘူး။ အခြေအနေကတော့ ထူးခြားမူ မရှိပါ” ဟု ပြောသည်။
အာဇာနည်နေ့ ကျင်းပခွင့်ကို အာဏာပိုင်များက တရားဝင် တားမြစ်ထားခြင်း မရှိသော်လည်း အာဇာနည်နေ့ကျင်းပလျှင် အနှောင်အယှက် ပြုလုပ်ခံရနိုင်ပြီး ဖမ်းဆီးပါ ခံရနိုင်သဖြင့် မည်သူမျှ မကျင်းပကြခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“ဒီနေ့က တင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ ကျောင်းတွေလည်း အကုန်လုံးပိတ်ထားပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေလည်း တစုံတရာ လှုပ်ရှားတာတွေ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း အာဏာပိုင်တွေက စောင့်ကြည့်မူတွေတော့ ရှိနေပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
စစ်တွေတွင် ယမန်နေ့က စပြီး အရပ်ဝတ်ဖြင့် လမ်းဆုံ လမ်းခွများတွင် ထောက်လှမ်းရေးများ စောင့်ကြပ်နေပြီး ဘုရားကြီးတွင် လုံထိန်းနှင့် ရဲများကို အားဖြည့် ချထားသည်ဟု သိရသည်။
ယခင်က ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပြည်နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာ အဆင့် အာဇာနည်နေ့ကို အဆင့်ဆင့် ကျင်းပကြသော်လည်း နအဖ စစ်အစိုးရ တက်လာကတည်းက ရခိုင်ပြည်နယ် အနှံ့အပြားတွင် အဇာနည်နေ့ကို ကျင်းပမူ မရှိဘဲ ပစ်ပယ်ထားသည်ဟု သိရသည်။
ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၀၉ ၀က်တုပ်ကွေး ဟု ထင်ရှားသည့် H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါ ကူးစက်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် မျက်နှာဖုံးတပ်ထားသော ထိုင်းနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှ ၀န်ထမ်းတဦး (ဓာတ်ပုံ-မိုးမခ)
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းတိုက်၊ ဈေးကွက်ဌာနမှ ထိုင်းလူမျိုး ၀န်ထမ်းတဦးတွင် ၀က်တုပ်ကွေး ရောဂါပိုး ရှိနေသဖြင့် ဆေးရုံတင်ထားရသည်ဟု သိရသည်။ ဧရာဝတီ သတင်းထောက်များ နှင့် ၀န်ထမ်းများ ရောဂါပိုး ကူးစက်မည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် ဧရာဝတီရုံးကို ပိတ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ ရုံးပိတ်ထားသော်လည်း သတင်း လုပ်ငန်းများကို နေအိမ်မှ အင်တာနက်သုံးပြီး လုပ်ကိုင်ကြမည်ဟု သိရသည်။ ဧရာဝတီရုံး အခြေစိုက်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါပိုး ကူးစက်သူ ၄၀၀၀ ကျော် ရှိနေကြောင်း ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က ထုတ်ဝေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာန၏ ကြေညာချက်အရ သိရသည်။ ၂၆ ဦး သေဆုံးပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ဆေးရုံတွင် စိုးရိမ်ရသည့် တုပ်ကွေးဝေဒနာသည် ၁၀ ဦးခန့် ရှိကြောင်း၊ တုပ်ကွေးရောဂါပိုး ကူးစက်သူများအနက် ၃၀၀၀ ကျော်မှာ သက်သာ ကျန်းမာသွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
DKBA အဖွဲ့ဝင်အမည်ခံသူများ မဖြစ်မနေရှေ့တန်းသို့သွားခိုင်း
Kaowao ဇူလိုင် ၂၀၊၂၀၀၉။
စံခလပူရီ(ဇူလိုင်-၂၀)။ ။ ကရင်ပြည်နယ်၊ ဖါးအံမြို့နယ်နှင့် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်များရှိ မွန်ကျေးရွာတို့၌
DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင် အမည်ခံထား၏ကသူ မွန်လူငယ်အချို့ရှိကြရာ KNU တပ်ဖွဲ့များအား သွားရောက်တိုက်ခိုက်
နိုင်ရန် သတ်မှတ်ရာစုရပ်သို့ ရယကမှများတာဝန်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရကြောင်း ကော့မိတ်ရွာသား မွန်လူငယ်တစ်ဦးကပြောပြခဲ့သည်။
အကယ်၍ အခြားတစ်နေရာသို့ ထွက်ပြေးရှောင်တိမ်းရှောင်သွားပါက မိသားစုဝင်များကို ခြိမ်းခြောက်ပြီး
အတင်း ပြန်ခေါ်ခိုင်းပါသည်။ အကယ်၍ မြဝတီမြို့ စုရပ်သို့ ရောက်သောအခါ ဘတ်ငွေသုံးသောင်းမှ ငါးသောင်းအထိပေးနိူင်သူများ ရှေ့တန်းသို့မသွားရတော့ပဲ အခြားသို့ ထွက်ခွာသွားရောက်ခွင့်ရှိသည်ဟု
ဆိုသည်။ အများအားဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်သွားကြသည်။
ယခင်က ဖါးအံမြို့အခြေစိုက် ကရင်စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့တွင် တစ်လကျပ်ငွေနှစ်သောင်းပေးသွင်းပြီး DKBA အဖွဲ့ဝင်အသိအမှတ်ပြုကဒ်ပြား ရရှိကာလူမှောင်ခိုကူးခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်အရောင်းအဝယ်ပြုခြင်း စသည့်စီးပွါးရေး လုပ်ငန်းများကို အာဏာပိုင်များ အနှောင့်အယှက်မှ လွတ်ကင်းသောကြောင့် ဖါးအံမြို့နယ်နှင့်ကော့ကရိတ်မြို့
နယ်ရှိ မွန်စီးပွါးရေးသမား အများအပြား DKBA သို့အမည်ခံဝင်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဇွန်လဆန်းမှစ၍ KNU တပ်မဟာ(၇)ကို ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတွင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင် တစ်ရာ ကျော်မက သေကြေထိခိုက် ဒါဏ်ရာရရှိခဲ့သည်ဟု သတင်းဌာနများ၌ ဖေါ်ပြခဲ့သည်။
ဒါဏ်ရာရရှိသော DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို မဲဆောက် ၊ မြဝတီ၊ ရွှေကိုက္ကိုနှင့် ဖါအံမြို့နယ်ဆေးရုံများတွင် ဆေးဝါးကုသကြရ၏။
ဖါအံမြို့ဆေးရုံ၌ ဆေးကုသခြင်းခံနေရသော ကော့ကရိတ်မြို့နယ်-ကော့မိကျေး ရွာနေ DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင် မွန်အမျိုးသား တစ်ဦး၏ ဆွေမျိုးသားချင်းတစ်ဦးကို ဆက်သွယ်ခဲ့ရာ၌ “ကျွန်တော်တို့ကော့မိ ရွာသား
နှစ်ယောက်နဲ့ မင်းရွာသားတစ်ယောက် ဒါဏ်ရာရထားတယ်။ စစ်သား မဟုတ်တဲ့သူတို့တတွေ ရှေ့တန်း
တိုက်ပွဲမှာ ထိခိုက်ခံတာ တော်တော်များတယ်”ဟု ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ DKBA အဖွဲ့ဝင်အမည်ခံ စီးပွါးရှာစားသူများမှာ အစားချောင်မည်ထင်၍ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ခံယူခဲ့သော်
လည်း ယ္ခုကဲ့သို့ရှေ့တန်း၌ တိုက်ပွဲဝင်လာရသောကြောင့် အမည်ခံအဖွဲ့ဝင်အများအပြား စိတ်ဓါတ်ကျ ဆင်းနေကျကြောင်း မြဝတီမြို့ခံအချို့ ပြောဆိုချက်အရ သိရပါသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီးတဦး ဆွန်ဒီးတိုက်ခိုက်မှုမှာ တတိယမြောက်သံသယရှိ
post by Monday, July 20, 2009
ဇူလိုင် ၂၀၊ ၂၀၀၉ (ဘန်ကောက်ပို့စ်)
ဆွန်ဒီးလုပ်ကြံရေးကို စစ်ဆေးတဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက လော့ပ်ဘူရီ၊ အထူးစစ်ရေးယူနစ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ဗိုလ်မှူး ကြီးတဦးကို တတိယမြောက်ပစ်မှတ်အနေနဲ့ နာမည်ထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
Sunai Prapuchaney ဟာ တတိယမြောက်သံသယရှိသူဖြစ်တယ်လို့ မြို့တော်ရဲ ဒု-ရဲချုပ်က တနေု့တုန်းက ထုတ်ဖော် ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး Sunai ဟာ ဧပြီ ၁၇ ရက်နေ့ က အသုံးပြုတဲ့ သံသယဖြစ်တဲ့ တိုယိုတာ ထရပ်ကား ကို ကားပိုင်ရှင် Rasamee Mekchai ဆီကနေ ငှားရမ်းခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ မြို့တော်ရဲ ဒု-ရဲချုပ် Sumet Rueangsawat က ပြောဆို ပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး Sunai ဟာ လော့ပ်ဘူရီမှာ အခြေစိုက်နေထိုင်ပေမဲ့၊ လောလောဆည် ဆည်မှာတော့ တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေကအရေးကိစ္စတွေကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးစစ်ဆင်ရေးဌာနချုပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေပါတယ်။ သူဟာ ရဲက လိုက် ရှာနေတဲ့ တခြားသံသယရှိသူ ၂ ဦးထဲက တဦးဖြစ်တဲ့ အရာခံဗိုလ် Panya Srihera ရဲ့ အကြီးအကဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားတယောက်ကတော့ မူးယစ်နှိမ်နှင်းရေးဗျူရိုက ရဲတပ်ကြပ် Worawut Mungsanti ဖြစ်ပါတယ်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေက ဗိုလ်မှူးကြီး Sunai ကို ရဲကိုလာတွေ့ဖို့ ဆင့်ခေါ်စာထုတ်မှာ ဖြစ်တယ် လို့ ရဲဗိုလ်ချုပ် Sumet က ပြောပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး Sunai ကို မေးမြန်းဖို့ ခေါ်တယ်ဆိုရင်
ဒု-ရဲချုပ် Sumet Rueangsawat
တပ်မတော်က ရဲနဲ့ အပြည့်အ၀ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပါမယ်လို့ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် အနုပေါင်း က တနေ့တုန်းက ပြောဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး Sunai က သူ့ဆီကို တိုက်ရိုက် အစီရင်မခံသေးပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့အဓိကတာဝန်က ထောက်လှမ်း ရေးလုပ်ငန်း ဖြစ်လို့ပါ၊ ဆိုပြီး အမှတ် ၄ စစ်ဒေသ တပ်မှူးကြီး Pichet Wisaijorn က တနေ့တုန်းက ပြောဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီး Sunaiဟာ သူ့လုပ်ငန်းသဘာဝကိုယ်ကပဲ အလုပ်နဲ့လက် ပြတ်တယ်လို့ ကိုမရှိဘူး၊ အမြဲတန်း အလုပ်များနေတာပါလို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Pichet က ပြောပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဆွန်ဒီးကို လုပ်ကြံစရာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ PAD ခေါင်းဆောင်နဲ့လည်းပဲ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူးလို့ ဗိုလ်မှူးကြီး Sunai က တမြန်နေ့တုန်းက ပြောပါတယ်။
“ ပြောရမယ်ဆိုရင်၊ တခြားစစ်သားတွေလိုပဲ ကျနော်လည်း ဆူဆူပူပူ လုပ်တဲ့သူတွေကို မကြိုက်ပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလို ပြောလို့ သူတို့ကို တခုခု လုပ်မယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး” လို့ ဗိုလ်မှူးကြီး Sunai က ပြောပါတယ်။
၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ထပ်စင်ကိုမောင်းထုတ်ဖို့အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Chettha နဲ့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာမှာ သူလည်း တဦးဖြစ် တယ်လို့ အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။ “ ဒီအမှုကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ ကျနော် ရှေ့နေတယောက် တောင်းထားပါတယ်” လို့ သူက ပြောပါ တယ်။
အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်တဲ့ ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်က ဒီအမှုကို သူလည်း အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှတ်ချက်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမှာ မရှိပါဘူးလို့ ၀န်ကြီးချုပ် အဘီဆစ်က ပြောဆိုပါတယ်။ ရဲစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့က သတင်း တွေ ပေါက်ကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ စစ်ဆေးဖို့ ၀န်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ တခု ဖွဲ့သင့်တယ်လို့ PAD ညှိနှိုင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်၊ နိုင်ငံရေးသစ်ပါတီရဲ့အတွင်းရေးမှူးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့ Suriyasai Katasila က ပြောပါတယ်။ တချို့ရဲတွေက စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေကို လမ်းလွှဲပစ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ အပြင်ဖက်က လူတွေဆီ သတင်းတွေ ထုတ်ပေးနေတယ်လို့ အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့၊ ဒုရဲချုပ် Thanee Somboonsap က အရင်တပါတ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
၅၁ နှစ်ပြည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အခမ်းအနားကျင်းပ
Mon 20 Jul 2009, ရိုင်မရော့
မွန်ပြည်သစ်ပါတီ ထူထောင်လာသည့် အနှစ် (၅၁) နှစ်ပြည့် အခမ်းနားကို ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် စံခလပူရီမှာ မွန်ပြည်သစ်ပါတီမှ ဦးဆောင်ပြီး ဒီကနေ့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားခဲ့ပါသည်။
အခမ်းအနားသဘာပတိအဖြစ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ ဖွဲ့စည်းလာပုံအဆင့်ဆင့်နှင့် (၅၁) နှစ်အတွင်း မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာခြင်းနှင့် အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားက ဖွဲ့စည်းလာသည့် မွန်ပြည်သစ်ပါတီအကြောင်းအပြင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ လက်ရှိအခြေနေကိုလည်း နိုင်အောင်မင်းက ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
“မွန်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်တာက မွန်ပြည်သစ်ပါတီဟာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရာပါတီ မဟုတ်ဘူး၊ မွန်လူမျိုးထုတစ်ရပ်လုံးရဲ့ပါတီဖြစ်တယ်၊ ဒီပါတီရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က လည်း မွန်လူမျိုးအတွက်ဖြစ်တယ်၊ မွန်ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး အခွင့်ရေးကောင်းတွေရရှိဖို့ အတွက် အာဏာပြည့်စုံတဲ့ မွန်ပြည်နယ်ဖြစ်ဖို့ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပါတီဖြစ်တယ်” ဟု အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နိုင်ဟံသာက ပြောသည်။
၄င်းက မွန်ပြည်သူတွေအနေ့နှင့် လက်ရှိမွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ လုပ်ဆောင်မှုတွေနှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်စေလိုပါတယ်၊ ပါတီဆိုတာက မွန်ပြည်သစ်ပါတီအနှစ် (၅၁) နှစ်ပြည့်အခမ်းနားမှာ စံခလပူရီရှိ မွန်အဖွဲ့စည်းများအပါဝင် မွန်လူငယ်များ စုစုပေါင်း လူအင်အား အယောက် (၅၀) ဝန်းကျင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခမ်းနားမှာ သဘာပတိအဖြစ်မွန်ပြည်သစ်ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေမှူး နိုင်ဟံသာ အပါဝင် နိုင်ငံခြားရေးဆက်ဆံရေးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ နိုင်အောင်မင်းနှင့် နိုင်အောင်မငေးတို့က တက်ရောက်ခဲ့သည်။
၄င်းအခမ်းနားတွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ၏ လက်ရှိအခြေနေ စစ်အစိုးရ၏ နယ်ခြားစောင့်တပ် ပြောင်းလဲဖွဲ့ခြင်းနှင့် ပြည်သူ့စစ်ပုံစံဖွဲ့စည်းခြင်းတို့၏ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလည်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် မြန်မာစစ်အစိုးရ၏ ဖိအားပေးခြင်းကို အမျိုးမျိုးခံခဲ့ရသော်လည်း သူတို့၏ ရပ်တည်ချက်ဖြစ်သော သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေးလမ်းစဉ်ကို ဆက်လက်ရပ် တည်ကာ တောင်းဆို အကောင်အထည်ဖော်မြဲဖြစ်သည်။
ဖဆပလအစိုးရထံ မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး လက်နက်စွန့်လွှတ်သည့် လမ်းစဉ်ဖြင့် မိမိလူမျိုးတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ကို မယုံကြည်သော ဗဟိုကော်မတီဝင် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ နိုင်ရွှေကျင် (နိုင်ဘလွင်) ဦးဆောင်၍ (၁၉၅၈) ခု ဇူလိုင်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ (၁၉၉၅) ခုနှစ်တွင် မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အပစ်ခတ်ရပ်စဲခဲ့သည်။
ယနေ့ကာလ၌ မွန်ပြည်သစ်ပါတီသည် အပစ်ခတ်ရပ်စဲခဲ့သည်မှာ (၁၄) နှစ်တာကျော် လွန်ခဲ့ပြီး ပါတီ၏ သက်တမ်းသည်လည်း အနှစ် (၅၁)ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
အထက်လူကြီးခရီးစဉ်အတွက် လမ်းရှင်းရန် မယက ညွန်ကြား
Mon 20 Jul 2009, IMNA
အဆင့်မြင့် အထက်အရာရှိခရီးစဉ်အတွက် လမ်းဘေးဝဲယာ လမ်းရှင်းရန်အ တွက် ဒေသခံအာဏာပိုင် များကို မုဒုံမြို့နယ် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံဖြိုး ရေးကောင်စီ (မယက) က လွန်ခဲ့သည့် ကြာသပတေးနေ့တွင် ညွန်ကြား ထားသည်။
မုဒုံမြို့နယ် မယကဥက္ကဌမှ ကျေးရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံဖြိုးရေး ကောင်စီ (ရယက) များကို လမ်းဘေးရှိ ချုံနွယ်များရှင်းလင်းရန် ညွန်ကြား ထားသော်လည်း ကျေးရွာတစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ ညွန်းကြားပုံ မတူညီဟု မုဒုံမြို့နယ်ရှိ ရယကတစ်ဦးက ပြောသည်။
၄င်းရယက၏အဆိုအရ “ချုံရှင်းဖို့ သူတို့ (မယက) ညွန်းကြားပုံမတူဘူးလေ၊ အဲဒီလို လုပ်တာက သူတို့လုပ်တာ ပေါ်သွားမှာ ကြောက်လို့လေ” ဟု ဆိုသည်။
ရယကဥက္ကဌတို့မှာလည်း မယကဥက္ကဌတို့၏အမိန့်အရ မော်လမြိုင်-မုဒုံ၊ မုဒုံ-သံဖြူဇရပ်ကားလမ်း လမ်းဘေးဝဲယာရှိ ကျေးရွာပြည်သူတို့အား ချုံနွယ် ရှင်းလင်းရန် ရယက ဥက္ကဌတို့က ၄င်းတို့အားညွန်းကြားထားသည်ဟု ၄င်းလမ်းဘေးဝဲယာရှိ ခြံရှင်တစ်ဦးက ပြောသည်။
“အဓိကကတော့ သူတို့လူကြီးတွေဆင်းလာလိုရှိရင် ကားလမ်းဘေးဝဲယာ မရှင်းလင်းထားရင် ကျေးရွာဥက္ကတွေပဲ အဟောက်ခံရတယ်လေ” ဟု ၄င်းရကယဥက္ကဌက ပြောသည်။
သို့သော်လည်း လမ်းဘေးရှင်းလင်းပါက လမ်းသွားလမ်းလာများ ကြောက် ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲ သွားလာနိုင်မည်ဟုလည်း ၄င်းက ဆိုသည်။
လမ်းဘေးဝဲယာချုံရှင်းနေသည့် ခြံရှင်တစ်ဦးက ကျေးရွာဥက္ကဌ၏အမိန့်ဖြင့် ညွန်းကြားလာသည့် အတွက် ၄င်းတို့မှ မငြင်းပယ်နိုင်ချေ။ အကယ်၍ ထိုကဲ့ သို့မလိုက်နာပါက မြို့နယ်မယကဥက္ကဌအဆင့်သို့ တိုင်ကြားခံရမည်ဟု ခြံရှင်က ပြောသည်။
ယခုလောလောဆယ်တွင်လည်း မော်လမြိုင်၊ မုဒုံနှင့် သံဖြူဇရပ် ကတ္တရာ လမ်းဘေးဝဲယာရှိ အချို့ခြံရှင်များ ရှင်းလင်းပြီးသော်လည်း အချို့ခြံရှင်များမှာ ချုံနွယ်ရှင်းလင်းနေဆဲဟု သိရပါသည်။
တချို့ ကျေးရွာဥက္ကတွေက အမြင်မကျယ်လို ရွာသားတွေဆီမှာ ပိုက်ဆံကောက်ပြီး၊ ရွာသားတွေ ပြောမှာကြောက်လို သူတို့ကိုယ်တိုင် ချုံရှင်းရပါသည်။
ချင်းမိုင်ရောက်သျှမ်းများ အမျိုးသားအာဇာနည်တို့အတွက် ဂုဏ်ပြုပွဲကျင်းပ
တနင်္လာနေ့၊ 20 ဇူလိုင်လ 2009 သျှမ်းသံတော်ဆင့် .ချင်းမိုင်ရောက် သျှမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းများစုစည်းပြီး တိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအတွက် အသက်ပေးလှူသွားခဲ့သည့် မျိုးချစ်အာဇာနည် ခေါင်းဆောင်ရဲဘော်များ ပြည်သူများအတွက် အလှူအဒါန်းနှင့်တကွ ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင် သျှမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းကျင်းပသည့် သျှမ်းအာဇာနည်များဂုဏ်ပြုပွဲ
၁၉၄၇ ဂျူလိုင် ၁၉ ရက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့နှင့်အတူ လုပ်ကြံခံရသည့် မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီးစ၀်စံထွန်း ကွယ်လွန်ခြင်း ၆၂ နှစ်ပြည့်နေ့ကို အစွဲပြု၍ - ဂျူလိုင်လအတွင်း အသက်ပေးလှူသွားခဲ့သည့်မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အမည်မသိ/မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မခံခဲ့ရသည့် ပြည်သူ/ကေဒါ/ရဲဘော်ရဲဘက်များအတွက် ဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားတရပ်ကို ချင်းမိုင်မြို့ဝတ်ဂူတောက်(၀်) ဘုန်းကြီး ကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
လက်နက်ကိုင် တော်လှန်ရေး ခေါင်းဆောင်ဟောင်း စ၀်ကန်းဂျစ် က - “ဂျူလိုင် ၂၀ ရက်နေ့ မှာ ကျဆုံးသွားတဲ့ မိုင်းပွန်စော် ဘွားကြီး စ၀်စံထွန်း၊ ကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့ စ၀်နန်းဟိန်းခမ်း၊ တော်လှန်ရေးဖခင် စ၀်နွဲ့စောယန္တ၊ စ၀်ဂွဏ်းဇိဏ်းနဲ့ အခြားခေါင်း ဆောင်တွေကို ရည်စူးပြီးလုပ်ကြတာတင်မက တသက်လုံးတိုင်းပြည် နဲ့လူမျိုးအတွက် ဘ၀ပေး၊ အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့ သက်ရှိထင် ရှားဆဲခေါင်းတွေ အတွက်လဲအလေးထားဂုဏ်ပြုစေလိုတယ်။ သူတို့အိုနာမသွားမလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ စိတ်ဓါတ်ခွန်အားပေး စေလိုတယ်” - ဟု အမှာစကားဆို၏။
ဂျူလိုင်လအတွင်း အသက်ပေးလှူ ကွယ်လွန်ကြသည့် ခေါင်းဆောင်များမှာ - ၁၁/၇ စ၀်ဂွဏ်းဇိဏ်း၊ ၂၀/၇ စ၀်စံထွန်း၊ ၂၄ /၇ စ၀်ဇန့်ယောင်ဟွေ့ နှင့် ၃၀/၇ စ၀်ဇမ်မိုင် (သျှမ်းအမျိုးသမီးအသင်း နန်းချမ်တောင်း၏ ဖခင်) တို့ဖြစ်သည်။
“သူတို့တွေအပြင် တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးခံယူချက်နဲ့ တော်လှန်ရေးထဲဝင်ရောက်ပြီး အသက်ပေးလှူသွားခဲ့တဲ့ ပြည်သူ အများအပြားရှိသလို နယ်ချဲ့စစ်အစိုးရက မတရားနှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ပြီး သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သူတွေ မရေမတွက် နိုင်အောင်ရှိခဲ့ တယ်၊ အဲဒါတွေအတွက်လည်း ရည်စူးသင့်တယ် ” - ဟု သျှမ်းပြည်ဖွဲ့စည်းပုံ မူကြမ်းရေးဆွဲရေးကော်မတီဥက္ကဌ စ၀်ခင်းဆိုင် လည်း အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ချင်းမိုင် သျှမ်းစာပေ/ယဉ်ကျေးမှုအသင်းနှင့် သျှမ်းအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ မကထပြု စုပေါင်းကျင်းပခဲ့သည့် “သျှမ်းပြည်အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးကောင်းအာဇာနည်များအတွက် အလှူအဒါန်းနှင့်ဂုဏ်ပြုပွဲ” အပေါ် - “မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီး ဘာကောင်းကျိုး လုပ်ပေး လို့လဲ၊ ဗမာ့စစ်ကျွန် စစ်ဖိနိပ်အောက်ရောက်အောင် လမ်းမှားဦးဆောင်ခဲ့လို့တမျိုးသားလုံး အခုလို ဒုက္ခရောက် ရတာ” ဟု ဆိုကာ အခမ်းအနား မတက်ရောက်သူ အချို့လည်းရှိကြောင်း အခမ်းအနားတက်သူများထံမှ ကြားသိရသည်။
စ၀်ဇန့်နှင့် စ၀်ဟန်တို့ကဲ့သို့ သျှမ်းခေါင်းဆောင်အချို့ကမူ- “အမျှော်အမြင်ကြီးသည့် မိုင်းပွန်စော်ဘွားကြီးတို့ကဲ့သို့ သျှမ်း ပြည်ခေါင်းဆောင်များ ပင်လုံစာချုပ် ချုပ်ဆို ထားရှိခဲ့သည့်အတွက်သျှမ်းပြည် နှင့် ဗမာပြည် သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ သည့်သက် သေဖြစ်စေခဲ့ကြောင်း၊ ပင်လုံစာချုပ်သာမရှိခဲ့လျှင် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးတောင်းဆိုရန် ပိုမိုခက်ခဲစေမည်ဖြစ်ကြောင်း” စသဖြင့် ထောက်ပြခဲ့ဘူးသည်။
မလေးရှားအကျဉ်းစခန်းများမှာ မြန်မာတွေ တဖြည်းဖြည်း များပြားလာ
မလေးရှားအာဏာပိုင်တွေက အရင်ကလို ထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်ကို နယ်နှင်ဒဏ် မပေးတော့တဲ့အတွက် မလေးရှားအကျဉ်းစခန်းနဲ့ ထောင်တွေထဲမှာ မြန်မာဒုက္ခသည်နဲ့ တရားမဝင် အလုပ်သမား အရေအတွက်ဟာ တစတစ များလာနေတယ်လို့ RFA က စုံစမ်း သိရပါတယ်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဖမ်းဆီးခံရပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ မလေးရှား အကျဉ်းစခန်းတွေမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာအကျဉ်းသားတွေကို အာဏာပိုင်တွေက နယ်စပ်မှာ နယ်နှင်ဒဏ်ပေးတာကို ရပ်ထားတာ လအနည်းငယ် ရှိသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဌာနနဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနတွေက မြန်မာ ဒုက္ခသည်နဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို နယ်စပ် လူမှောင်ခိုကူးရာမှာ မလေးရှား အာဏာပိုင်တွေ ပါဝင်နေတဲ့အကြောင်း အစီရင်ခံစာတွေ ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် မလေးရှားအစိုးရက နယ်နှင်ဒဏ်ပေးတာကို ရပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှားနိုင်ငံဟာ လူမှောင်ခိုကူးမှုမှာ အနည်းဆုံးအဆင့် ဖြေရှင်းဖို့ ပျက်ကွက်တဲ့အတွက် နာမည်ပျက် စာရင်းမှာ ထည့်သွင်းခံခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွေက ဒီကိစ္စတွေ ဖြေရှင်းဖို့ လူသိထင်ရှား ဖော်ထုတ်မဲ့အကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် ပထမပတ်ကလည်း ထိုင်းမလေးရှားနယ်စပ်က မြန်မာဒုက္ခသည် လူမှောင်ခိုကူးမှု လုပ်ငန်းတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုအတွက် မလေးရှားနိုင်ငံတဝန်းက လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးဌာန (လဝက) က ၁၀ ဦးထက်မနည်းတဲ့ အရာရှိတွေကို အရေးယူ စစ်ဆေးနေတယ်လို့ မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မလေးရှား အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ဒီလို သောင်တင်နေတဲ့အတွက် ထွက်ပေါက်ရဖို့ ကြိုးစားကြတဲ့ မြန်မာတချို့လည်း အဆင်မပြေပဲ ဒုက္ခရောက်သွားတာမျိုးလည်း ရှိတယ်လို့ မလေးရှားရောက် မြန်မာတွေက ပြောပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကို RFA မှ ကိုကျော်မင်းထွန်းက စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
လျှို့ဝှက်အစီရင်ခံစာ ပေါက်ကြားမှုကြောင့် အရာရှိအချို့ ဖမ်းဆီးခံရ
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တတိယ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ခရီးစဉ် အစီရင်ခံစာ ပြည်ပသတင်းဌာနတွေကို ပေါက်ကြားခဲ့မှုအတွက် နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ အရာရှိ ၁၀ ဦးထက်မနည်း အဖမ်းခံထားရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဖမ်းခံရတဲ့ အရာရှိတွေဟာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးဌာန ကြည်းတပ်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတွေ ဖြစ်ပြီး ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အရာရှိတချို့လည်း ထွက်ပြေး ပုန်းရှောင်နေရတဲ့အကြောင်း စစ်ဖက်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတွေကို ကိုးကားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
အလားတူ မြောက်ကိုရီးယားက နေပြည်တော်မှာ မြေအောက် ဥမင်လိုဏ်တူးဖော်မှု သတင်းနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ပေါက်ကြားခဲ့တဲ့အတွက် အရာရှိတွေကို ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့ မကြာခင်က ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် The Nation သတင်းစာမှာလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဧရာဝတီမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာ ကိုအောင်ဇော်ကတော့ အနည်းဆုံး နေပြည်တော်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ အကြီးအကျယ် လုပ်နေတယ်လို့ စစ်ဖက်အသိုင်းအဝိုင်းကို ကိုးကားပြီး ပြောပါတယ်။
ဦးအောင်ဇော်။ ။ “ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ထပ်ပြီးတော့ အတည်ပြုလို့ရတဲ့ source နှစ်ခု သုံးခုကနေပြီးတော့ ပြောတာပါ။ အနည်းဆုံး officer ၁၀ ဦးထက်မနည်း နေပြည်တော်မှာ အဖမ်းခံရတယ်။ ညွှန်ချုပ်တွေလည်း စစ်ဆေးခံရတဲ့အထဲမှာ ပါတယ်၊ စစ်ဆေးရေး လုပ်နေတယ်ပေါ့လေ။ Investigation ဝင်နေတယ်ပေါ့လေ၊ နော်။ ဆိုတော့ အဖမ်းခံရတယ်ဆိုတာ တချို့က သံသယရှိလို့ အဖမ်းခံရတာ ရှိနိုင်တယ်။ တချို့ကျတော့ စစ်ဆေးရေး ဝင်တာ ရှိနိုင်တယ်။ အဲဒါ သိမ်းကျုံးပြီးတော့ အဖမ်းခံရတယ်ဆိုပြီးတော့ သတင်းဌာနတွေက ရေးတာလည်း ပါနိုင်တယ်။ ကျွန်တော် မြင်တာကတော့ ဒီသတင်းတွေကို ပေါက်ကြားပြီး နောက်ပိုင်းက စပြီးတော့ တပ်မတော် အရာရှိပိုင်းမှာ၊ ထိပ်ပိုင်းမှာ၊ နောက်ပြီးတော့ နေပြည်တော်ထဲမှာ အကြီးအကျယ်ကို အပြန်ပြန် မြေလှန်ပြီးတော့ စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေတာ သုံးလေးပတ် ရှိသွားပါပြီ။”
မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ လျှို့ဝှက် အစီရင်ခံစာတွေ ပေါက်ကြားမှုဟာ အခုကာလမှာမှ မဟုတ်ပဲ အရင်ကလည်း စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာသတင်းတွေ မကြာခဏ ပေါက်ကြားခဲ့ဖူးပါတယ်။
နေပြည်တော်နဲ့ နီးစပ်သူတဦးက RFAကို ပြောပြရာမှာ မကြာခင်ကလည်း မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးရဲ့ လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့ စာမူကြမ်းတောင် နေပြည်တော်ကနေ အပြင် စီးပွားရေးလောကကို ပေါက်ကြားခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ မြန်မာစစ်ရေးဆက်ဆံမှုကို ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ တကွ ပေါက်ကြားခဲ့တာဟာ မြောက်ကိုရီးယားသင်္ဘော မြန်မာပြည်လာနေတယ်လို့ သတင်းထွက်ချိန်နဲ့ အချိန်ကိုက် ဖြစ်တဲ့အတွက် နေပြည်တော် အတွင်းစည်းမှာကို ခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာ ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားသွားတာတွေ ရှိတယ်လို့ ယူဆကြောင်း ကိုအောင်ဇော်က သုံးသပ်ပါတယ်။
ဦးအောင်ဇော်။ ။ “ဖော်ထုတ်ချင်တဲ့သူက တပ်မတော်ပိုင်းမှာကိုက၊ အရာရှိပိုင်းမှာကိုက ဒီ ကမ်နန် သင်္ဘောကြီး လာနေတဲ့အချိန်မှာ တမင်သက်သက်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဖော်ထုတ်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်ထင်တယ် တပ်မတော် အရာရှိပိုင်းမှာ ရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်၊ သူတို့ထဲမှာ မယုံကြည်မှုတွေ ပိုဖြစ်သွားတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း စစ်ဆေးမှုတွေ လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်၊ တချို့ဆိုလည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွန့်ရဲ့ အောက်မှာ လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့ တချို့ ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့လူတွေ ဘာတွေ ဆိုရင် တော်တော်များများက ပြေးကြ ပုန်းကြပြီလို့ ကျွန်တော် သိရတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့က တမင်သက်သက်ကို မီဒီယာကို leak လုပ်ပြီးတော့ ဒီ ကမ်နန်သင်္ဘောနဲ့ ချိတ်တာပေါ့။ အမှန်တော့ ဒီသတင်းတွေက မီဒီယာမပါပဲနဲ့ အပြင်မှာ နှစ်လသုံးလလောက် နိုင်ငံခြား ထောက်လှမ်းရေး ဌာနတွေမှာ အကုန်လုံး လက်ခံရရှိပြီးပြီလို့ သိရပါတယ်။”
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းရဲ့ မြောက်ကိုရီးယား လျှို့ဝှက်ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အစီရင်ခံစာအကြောင်း သတင်းဖော်ပြချက်တွေကို ပြည်ပ အသံလွှင့်မီဒီယာတွေနဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဇွန်လကုန်က အသီးသီး ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
မြောက်ကိုရီးယားပြဿနာနှင့် အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စ အာဆီယံဆွေးနွေးမည်
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်မြို့မှာ ကျင်းပနေတဲ့ အာဆီယံ ထိပ်သီးညီလာခံမှာ မြောက်ကိုရီးယား ညူကလီးယား ပြဿနာနဲ့ ဒေသတွင်း အကြမ်းဖက်မှု ပပျောက်ရေးတွေကို ဒီကနေ့ ဇူလိုင် ၂၀ မှာ ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးမယ်လို့ အာဆီယံ အရာရှိတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့ ဖူးခက်မှာ ထုတ်ပြန်မဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဒီအကြောင်းတွေ ထည့်သွင်းမှာဖြစ်ပြီး အာဆီယံညီလာခံ အပြီး ကျင်းပမဲ့ အာရှဒေသတွင်း လုံခြုံရေးညီလာခံ ARF အကြို လမ်းခင်းတာလည်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အာဆီယံညီလာခံမှာ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းဖို့ အခြေခံမူတွေကို အာဆီယံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ ရှိပြီး မကြာခင်က ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံ ဂျာကာတာ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှု အပြီး အကြမ်းဖက်မှု တိုက်ဖျက်ရေး ဆွေးနွေးဖို့လည်း ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အများစု သဘောတူနိုင်တဲ့ အချက်တွေကို ရယူမှာဖြစ်သလို အထူးအခြေအနေတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မစ္စတာ ကာဆစ် ပီရိုမြာက ပြောပါတယ်။
အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ဟာ စစ်အစိုးရ အုပ်ချုပ်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ပါဝင်နေမှုနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တာတွေကြောင့် အဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။
အခုဖွဲ့မဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ဟာလည်း မြန်မာကိစ္စကို အရေးမယူနိုင်ရင် စက္ကူကျားလို ရုပ်ပြသက်သက်သာ ဖြစ်မယ်လို့လည်း ဝေဖန်တာတွေ ရှိနေပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ ဖိအားပေးခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အာရှ၊ အမေရိကန်နဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ သံတမန်တွေ တွေ့ဆုံကြတဲ့အခါ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စွဲချက်တင် အမှု စစ်ဆေးနေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ဖိအားပေးတာနဲ့ ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ပြောကြပါတယ်။
၂၆နိုင်ငံနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတခု ပါဝင်တက်ရောက်တဲ့ အာဆီယံ အရှေ့တောင်အာရှအသင်း ဒေသဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို အဓိကထား ဆွေးနွေးဖို့ သတ်မှတ်ထားတာပါ။ ဒီဆွေးနွေးပွဲဟာ လုံခြုံရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဒေသတွင်း အကြီးမားဆုံး ဆွေးနွေးပွဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရကို အဓိကထောက်ခံနေတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံအပြင် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mrs. Hillary Clinton လည်း ညီလာခံ တက်ရောက်မှာ ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးကလည်း မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ဖိအားပေးပါလိမ့်မယ်လို့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက ဇူလိုင် ၂၀ရက် ဒီနေ့ထုတ် The Manila Times သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဘယ်သူဘယ်ဝါကမှ ပြောင်းလဲအောင် မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ စင်ကာပူ စီမံခန့်ခွဲရေးတက္ကသိုလ် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ တွဲဖက်ပါမောက္ခ Bridget Welsh ကပြောကြားပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲမှာ Mrs. Clinton တက်ရောက်လာတဲ့အတွက် မြန်မာစစ်အစိုးရကို ဖိအားပေးဖို့ အတော်ကြီး သေချာပေမဲ့ ဖိအားပေးရုံသက်သက်နဲ့တော့ ထိရောက်တာ မရှိပါဘူးလို့ သူက ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကိစ္စကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပိုဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်လို့ သူကရှုမြင်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်အစိုးရက အမှုစစ်ဆေးနေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အာဆီယံက ဆန့်ကျင်ပေမဲ့ အာဆီယံ အဖွဲ့နိုင်ငံတွေထဲ ဒုက္ခအများဆုံးပေးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံကို အာဆီယံက ပြောင်းလဲအောင်လည်း မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
အာဆီယံဟာ မြန်မာနိုင်ငံပေါ် မီးစတဖက် ရေမှုတ်တဖက်နည်းနဲ့ ချဉ်းကပ်နေတယ်လို့ စင်ကာပူ တက္ကသိုလ် တွဲဖက်ပါမောက္ခ Bridget Welsh ကတော့ ဝေဖန်ပါတယ်။ ခုကျင်းပတဲ့ ARF အာဆီယံ ဒေသဆိုင်ရာ ညီလာခံကို ၁၉၉၄ခုနှစ်က စတင်ခဲ့ပြီး အရှေ့တောင်အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်ဒေသနိုင်ငံတွေက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေ နှစ်စဉ် တက်ရောက် ဆွေးနွေးကြပါတယ
စ်ဗိုလ်နှစ်ဦးက ရဲယောင်ဆောင်ပြီး ဆိုင်ကယ် လုယက်
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ တပ်မတော်အရာရှိနှစ်ဦးက ရဲအယောင်ဆောင်ပြီး လုယက်ထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်ကို ဝယ်မိသူဟာ အချုပ်ခံရပြီး အရာရှိနှစ်ဦးကိုတော့ တပ်တွင်းက အရေးယူထားတယ်လို့ စုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။
ဗန်းမော်မြို့ ၃၂၀ တပ်က ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိတဲ့ အရာရှိနှစ်ဦးဟာ မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ တလကျော်လောက်က တပ်တွင်းသင်တန်း တက်ရောက်နေချိန်မှာ ရဲအယောင်ဆောင်ပြီး ဆိုင်ကယ်စီးလာသူတွေကို ရိုက်နှက်ရုံမက သူတို့စီးလာတဲ့ ဆိုင်ကယ် အသစ်စက်စက်တွေကို လုယက်ယူတာလို့ ဒေသခံတွေက ပြောကြပါတယ်။
ဒီနောက် လုယူထားတဲ့ ဆိုင်ကယ်တွေကို မြစ်ကြီးနား ကချင်စုရပ်ကွက် ဆိုင်ကယ်ပွဲစားတန်းမှာ ကြားပွဲစား တယောက်နဲ့အတူ လာရောက်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။
စစ်အရာရှိနှစ်ဦးဟာ သင်တန်းတက်ရောက်ချိန်ငွေလိုနေလို့ ဆိုင်ကယ်လာရောက် ရောင်းချတာပါလို့ ကြားပွဲစားကပြောပြီး ရောင်းချပေးခဲ့တာပါ။
တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ဆိုင်ကယ်တစီးဟာ ကာလပေါက်ဈေး ၅ သိန်းကျော်ရှိပြီး ပွဲစားတန်းက ဆိုင်ကယ် ဝယ်-ရောင်း လုပ်သူက တစီးကို သုံးသိန်းခွဲလောက်နဲ့ ဝယ်ယူခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရိုက်နှက်လည်းခံရ၊ ဆိုင်ကယ်လည်း အလုယက်ခံရတဲ့ ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်တွေက သူတို့ဆိုင်ကယ်တွေ ဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုတာ လိုက်လံစုံစမ်းရာက ပွဲစားတန်းမှာ ရှိနေတာကို သိရပြီး မြစ်ကြီးနား အမှတ် (၁) ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်တဲ့အတွက် အမှုမှန် ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါ။
ဆိုင်ကယ်ဝယ်မိသူကိုတော့ ရမန်ယူပြီး မြစ်ကြီးနား ထောင်ကြီးချုပ်မှာ ချုပ်နှောင်ထားပြီး စစ်အရာရှိ နှစ်ဦးကို တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာ ချုပ်နှောင်အရေးယူထားတယ်လို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။
ဆိုင်ကယ် သုံးစီးကို ပြန်သိမ်းမိပြီး လုရာပါဆိုင်ကယ် ဝယ်မိသူဟာ အာမခံမရပဲ စစ်အရာရှိနှစ်ဦးနဲ့ ပေါင်းပြီး ဆိုင်ကယ်လိုက်ရောင်းပေးတဲ့ ကြားပွဲစားကတော့ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီအမှုကိစ္စ စုံစမ်းဖို့ မြစ်ကြီးနား အမှတ် (၁) ရဲစခန်းကို RFAက ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်းက တယ်လီဖုန်းချသွားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိစ္စ ပအိုဝ်ညီလာခံ ကော်မတီမှာ ပြောကြား
ပအိုဝ်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ ပါဝင်တဲ့ ပအိုဝ်ညီလာခံ ကျင်းပနိုင်ရေး အစည်းအဝေးတရပ်ကို ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တနေရာမှာ ကျင်းပနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပအိုဝ်ညီလာခံကျင်းပဖို့ လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျင်းပရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထားတဲ့ ဦးခွန်တင်ဆွေဦးက အခုလို ပြောပြပါတယ်။
ဦးခွန်တင်ဆွေဦး။ ။ “အဖွဲ့အစည်း အမျိုးမျိုး ရှိနေတဲ့ ပအိုဝ်အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်းတွေကို ကျွန်တော်တို့က ဒီနိုင်ငံထဲက ကျင်းပပြီးတော့ ပအိုဝ်အမျိုးသားတွေ အားလုံး တပေါင်းတစုတည်း တဖွဲ့တစည်းတည်း ဖြစ်လာနိုင်အောင် ပအိုဝ်အမျိုးသား အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ ကိုယ်စား ပြောကြားနိုင်တဲ့ အဆင့်ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ဖို့ အတွက်ကို ကျွန်တော်တို့က ကြိုးစားတာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။”
သူဟာ ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ရဲ့ ရုံးအဖွဲ့မှူးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေကြားမှာ မိမိတို့ အမျိုးသားအရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားအရေးတွေကို တာဝန်သိသိ နားလည်မှုရှိရှိနဲ့ ဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း သူက ပြောပြပါတယ်။
လက်ရှိ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်မှာ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ပအိုဝ် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်သူရိန် ဦးဆောင်တဲ့ ပအိုဝ် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့၊ ဗိုလ်မှူးကြီး ခွန်ဥက္ကာ ဦးဆောင်တဲ့ ပအိုဝ် ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့၊ ပအို့ပါတီအဖွဲ့ အစည်းတွေ အပါအဝင် လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အလုပ်သမားအဖွဲ့နဲ့ လူမှုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းပြီး ပအိုဝ်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး၊ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရေးတွေကို ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ရှိမှာ အဝေးရောက် ညွန့်ပေါင်းအစိုးရအဖွဲ့မှာ အလုပ်သမားရေးရာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပအိုဝ်အမျိုးသား ဦးခွန်မြင့်ထွန်းကလည်း အခုကြိုးပမ်းချက်ဟာ ပအိုဝ် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တခုတည်းအတွက် လုပ်ဆောင်တာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
ဦးခွန်မြင့်ထွန်း။ ။ “တော်လှန်ရေး အင်အားစုတွေက ကိုယ့်အချင်းချင်း စုစည်းညီညွတ်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပအိုဝ် ပအိုဝ်ချင်း ညီညွတ်ဖို့ လိုတယ်၊ ကရင် ကရင်အချင်းချင်း ညီညွတ်ဖို့ လိုတယ်၊ ကချင် ကချင် အချင်းအချင်း ညီညွတ်ဖို့ လိုတယ်၊ ရှမ်း ရှမ်း အချင်းချင်း ညီညွတ်ဖို့ လိုတယ်၊ အဲဒီ ညီညွတ်မှုတွေ စုစည်းပြီးတော့မှ တကဲ့ကို စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဖြုတ်ချနိုင်ဖို့အတွက်ကို ညီညွတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျွန်တော်တို့ အမျိုးသားညီလာခံ ကျင်းပရေး ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့ ပအိုဝ်အမျိုးသားတွေ တခုတည်းရဲ့ လွတ်မြောက်ရေး ကျွန်တော်တို့ ဆောင်ရွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ပြည်ထောင်စုကြီးတခုရဲ့ လွတ်လပ်ရေးကို ရည်စူးပြီး ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော် အလေးအနက် ပြောကြားချင်ပါတယ်။”
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်မြင့်ထွန်း ပြောသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပအိုဝ်အမျိုးသား ညီလာခံကို လာမဲ့ စက်တင်ဘာလထဲမှာ ကျင်းပသွားဖို့ ရှိတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
စစ်အစိုးရလက်အောက်ရှိ ပြည်သူထဲက သတင်းထောက်များ အခန်းကဏ္ဍ
အခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်း ကမႝာ့နာမည်ကြီး ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာနတွေကနေ ၂၀ဝ၇စက်တင်ဘာ ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေးအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတဲ့ BurmaVJ မှတ်တမ်းတင်ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သတင်း၊ သုံးသပ်ချက်တွေကို ပြသတဲ့အခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံက citizen journalist လို့ ခေါ်တဲ့ အပျော်တမ်း သတင်းထောက်တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း အဓိက ဆွေးနွေးပြောဆိုကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
သတင်းနဲ့ ပတ်သက်ရင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာ စွန့်စွန့်စားစား လုပ်ကိုင်ရတဲ့ အပျော်တမ်းသတင်းထောက်တွေ ဘာကြောင့် ထွက်ပေါ်လာရပါသလဲ။
အပျော်တမ်း သတင်းထောက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စစ်အစိုးရကရော ဖိနှိပ်ထားလို့ ရပါသလား ဆိုတာတွေကို RFA မှ မအင်ကြင်းနိုင်က ဗန်ကောက်မြို့ကနေ စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။